ဗီဒီယိုက ချက်တင် ကိုရီးယား
တရားဝင်အဖြစ်လူသိများသည်တာင္ကိုးရီးယား၊တောင်ကိုရီးယားတို့တွင်အချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံများအတွက်အာရှ။ ကမ္ဘာလုံးလည်းတောင်ကိုရီးယားအနောက်ဘက်ဆုံးစီးပွားရေး၏စည်းကမ်းချက်များ၌အသုံးြ။ နိုင်ငံသားများ၏နိုင်ငံပျော်မွေ့တစ်ခု၏အမြင့်ဆုံးစံချိန်စံညွှန်းများ၏နေထိုင်မှုအတွက်တိုက်။ ထို့ကြောင့်၊လျှင်သင်ထည့္ပါချိန်းတွေ့က်ာက္၊တောင်ကိုရီးယားအခွင့်ကိုအရပ်ကြည့်ရှုများအတွက်ကြွယ်ဝသောတစ်ခုတည်းယောက်ျားနိုင်သူသင်ပူဇော်။ အဆင်ပြေမှုရေးဘဝ။ အစွန်အဖျား:ကြွယ်ပွဲစဉ်အများအပြားရှိပါတယ်တစ်ခုတည်းကြွယ်မှတောင်ကိုရီးယားရှာဖွေနေများအတွက်ရက်စွဲအမျိုးသမီးနှင့်လက်ထပ်သည်။ အတွက်အမြန်လမ်းကိုအဓိကယာဉ်မောင်းများ၏အတောင်ကိုရီးယားစီးပွားရေး၊အထူးသဖြင့်ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခု၏နှစ်ဆယ်ရာစု၊ခဲ့သည်ပည့္ေမာ္ေတာ္ကား။ အလွန်ကြီးစွာသောအတိုင်းတိုးတက်မှုအတွက်တောင်ကိုရီးယားေမာ္ေတာ္ကားလုပ္ငန္းခဲ့လောင်စာဖြင့်တင်ပို့သည်အနောက်တိုင်းနိုင်ငံများအတွင်း။ ပင်သော်လည်းမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းတင်ပို့လည္ပတ္လုပ္ေ၊တောင်ကိုရီးယားထိတိုင်အကြီးဆုံးမော်တော်ကားထုတ်လုပ်သူအတွက်။ လက္ရွိသည်ပဉ္စမမြောက်အကြီးဆုံးကမ္ဘာအတွက်၏ဝေါဟာရများအတွက်ထုတ်လုပ်မှုပမာဏနှင့်အဌမအကြီးဆုံးပို့ကုန်ပမာဏ။ နေစဉ်၎င်း၏ကနဦးဆာင်ရွက်ရုံမျှသာအကုန်၍တန်ဆောင်းဝန်း၏အစိတ်အပိုင်းမှတင်သွင်းသည့်ဂျပန်နိုင်ငံနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့၊ယနေ့အချိန်တွင်အတောင်ကိုးရီးယားေမာ္ေတာ္ကားစက်မှုလုပ်ငန်းတို့တွင်အများဆုံးနည်းပညာအဆင့်မြင့်လောကအတွက်။ ယင်း၏မြောက်မြားစွာအိမ်-မော်ဒယ်သရုပ်ပြနေလို့၎င်းရဲ့စွမ်းရည်ဝေါဟာရများအတွက်ဒီဇိုင်းနဲ့စွမ်းဆောင်ရည် ဒါပေမယ့်လည်းအချက်ပြမှုများ၎င်း၏အသက်အရွယ်ကြွလာ။ အကြားအဓိကအမည်များအတွက်တောင်ကိုရီးယားေမာ္ေတာ္ကားလုပ္ငန္းကိုအဝင္၊အာရှပါတယ္၊ေတာင္ကိုရီးေအုပ်စု၊၊ နှင့်ယာဥ္နဲ ။ ဒါကြောင့်၊အခါတိုင်းပြည်အတွက်၊အများအတွက်မြျှောအောင်မြင်တဲ့တစ်ဦးတစ်ယောက်မှဆက်စပ်အလိုအလျောက်လုပ်ငန်းကဏ္ဍ။ သူတို့ထံမှကွဲပြားခြားနားအင်ဂျင်နီယာ၊ဒီဇိုင်နာနှင့်အခြားအမြင့်မား-ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအဖို့အမှုဆောင်နှင့်အမြင့်ပျံကော်ပိုရေးရှင်း၏မော်တော်ကားကုမ္ပဏီများ၊အများအပြားအဘယ်သူဖြစ်နိုင်တစ်ခုတည်းကြွယ်ဝသောအမျိုးသားများအဘို့အရှာဖွေနေချိန်းတွေ့ခွင့်အလမ်း။ တစ်ဦးကောင်းတွေ့ဆုံခဲ့မည်မှာစီးပွားရေးဆွေးနွေးပွဲ၊နှင့်မြှင့်တင်ရေးအစာနှင့်အတူဆက်စပ်အလိုအလျောက်စက်မှုလုပ်ငန်း။ ဒီေနရာရောနှောနှင့်အတူဧည့်သည်များနှင့်စီစဉ်သူများလျှင်၊ကံကောင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုရဖို့အမြင်တစ်ခုတည်းကိုသာရ၏လူမှုဘဝခ်ဲအားဖြင့်အစာရှောင်လမ်းသွား။ တွေ့ဆုံကြွယ်မှာယောက်ျားကြွယ်ကိုက်ညီ။ ဘဏ္ဍာရေးအမျိုးသားတယောက်ဖြစ်ရခြင်း၏အများဆုံးတီထွင်စီးပွားအတွက်အာရှနှင့်တကမ္ဘာလုံးလည်းတောင်ကိုရီးယားရှိတက်ကြွဘဏ္ဍာရေးကဏ္ဍပါတယ္။ ၎င်း၏အကြီးဆုံးမြို့ကဲ့သို့ အမျိုးသားမြို့တော်ဆိုးလ်၊ခ်န္ဂင္နှင့်အင္ခ်ဳန္းတစ်ဦး၏ကြီးမားသောကွန်ယက်၊ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်း။ ထို့ကြောင့်ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြံပေး၊အခြံရန်ပုံငွေမန်နေဂျာများ၊အာမခံနှင့်ဘဏ္ဍာရေးတက်စေ၏တစ်ခုဖြစ်သည်အကောင်းဆုံးပေးဆောင်အတတ္ပေတြကိုေတာင္ကိုရီးယားစီးပွား။ ဖြစ်ချင်လျှင်ရက်စွဲပါစတိုင်အတွက်၊ကောင်းတစ်ဦးရွေးချယ်မှုဖြစ်လိမ့်မယ်အဘို့အကြည့်ဖို့အကိမ္ဟာလူကြီးလူကောင်းဝတ်စုံအတွက်ရင်းကော်ဖီသို့မဟုတ် အားဖြင့်တစ်ဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဂ္ဂဇင်းတစ်ခုအတွက်ဘဏ္ဍာရေးခရိုင်၏မြို့။ သင်ပြန်လည်အချို့သောရှာဖွေရန်အောင်မြင်သောပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ်ဦးတစ်ယောက်သို့မဟုတ်ချမ်းသာတည်း။ အျထိုကဲ့သို့သောဒေသများအ အဘယ်သူမျှမအကြီးအပျိုသြားခရိုင်။ ü အချုပ်ဘဏ္ဍာရေးအချာအတွက်ခ်န္ဂင္ရှိလာမည့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘဏ္ဍာရေးစင်တာထားကိုဖြည့်ဆည်းဖို့နောက်ဆုံးပေါ်စံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ဒီဇိုင်းနှင့်နည်းပညာ။ အရပ်တစ်ဦးတစ်မကြာခဏရီးယား၏ရောင်စုံဖျော်ဖြေရေးဖြစ်ရပ်များအတွက်အာရှနှင့်အမှန်အပန်းဖြေနှင့်ဧည့်ဝတ်ပြုရာပူဇော်သက္ကာအတွက်၎င်း၏အကြီးမားဆုံးမြို့ကြီးများကဲ့သို့နိုင္ငံျ၊ခ်န္ဂင္နှင့်အင္ခ်ဳန္းနိုင်နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ခြင်း အများဆုံးသီးသန့်အတွက်ပါ။ သာနိုင္ငံျအ ဆင်းဧရိယာသည်အကျော်ကြားများအတွက်အများဆုံးဇိမ်ခံအရက်ဆိုင်၊စားသောက်ဆိုင်နှင့်နားနေခန်း။ တစ်ခုမှာထိုကဲ့သို့သောခရီးသည်အနိုင္ပါျသည့်မျိုးစုံကြမ်းပြင်မှအယူခံဖို့ဧည့်သည်ဖို့ရှာဖွေနေ ကိုညဥ့်အခါ၊ငုံထူးခြားဆန်းပြားကော့တေးသို့မဟုတ်ရိုးရိုးအတွက်လုပ်ကြသူတို့ရဲ့အလွန်ကြီးစွာသောအစာ။ ပိုပြီးတည်ထောင်မည်တွင်ဤခရိုင်သည်-ဘားသောရှည်လျားပြီးဆွဲဆောင်နာယကနှင့်အတူ၎င်း၏ရွေးချယ်မှု၏ဂီတနှင့်အချိုရည်။ သို့သော်၊လျှင်သင်အဘို့အရှာကြသည် ၊ဧည့်ခန်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်သင်တို့အဘို့အရာ။ တည်ရှိမှာအပိုင်းဟိုတယ်အဆင့်အနားစွာနှင့် ဒီဇိုင်းနှင့်အတူ အဘို့သင်၏ကိုယ်ရေးအချက်၊ခေတ်ပြိုင်အနုပညာနှင့်ကြက်ဥပုံသဏ္ဌာန်ကု မျက်နှာကျက်ကနေ။ သို့သော်လည်းအခြားဆိုးလ်လိပ်စာဘယ်မှာကြွယ်ဝလှပထွက်ဆွဲထားသည်။ ဒီစတိုင်ဘားပည္ဆိုင္ရာနားရိုးရိုးအော်သံနှင့်တပ်မက်ဘွယ် ။ တွင်တည်ရှိ၏ဝုဏ်အဇိမ်ခံဟိုတယ်၊ဧအျပည္ျယားနိုင္ငံျ၊မျက်နှာအိမ်နှစ်ခုသီးခြားအဖျော်ယ၊ငါးပုဂ္ဂလိကအခန်းများ၊အားလုံးအာမခံ အထား၌သင်တို့အထိနှင့်အတူအချို့သောအချမ်းသာဆုံးယောက်ျား၏။ သာခ်န္ဂင္သင်စူးစမ်းနိုင်ပါတယ်အဓိကေဖ်ာ္ေျဖေရးခရိုင်အစုံရှိပါတယ်ရသောမြောက်မြားစွာစျေးဝယ်နှင့်ထမင်းပွဲရွေးချယ်စရာများ။ သို့သော်၊အဘို့ရှာကြသည်လျှင်နေရာဂီတသည်အကောင်းနဲ့အလွဆင္ေဖြစ်ကျွမ်းကျင်သူများဆုိး၊ထိုအထဲကစစ်ဆေးကလပ်သျှ။ သို့အတွက်တောင်ကိုရီးယား၊ရခံစားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ၎င်း၏ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်တိုးတက်ကြီးပွားရေးပင်ဖြစ်စေအပြည့်အဝအသုံးမြောက်မြားစွာအခွင့်အလမ်းတွေ့ဆုံရန်နှင့်ချိန်းတွေ့ကြဖို့၎င်း၏ချမ်းသာတည်း။
ကိုးရီးယားချိန်းတွေ့ဖို့နေရာကောင်းတခုဖြစ်သည်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်တွေ့ဆုံရန်နှင့်အစိမ်း။ သင်ကအသုံးပြုတဲ့အခါကိုးရီးယားချိန်းတွေ့၊ငါတို့သည်အကောက်အခြားအသုံးပြုသူမှာကျပန်းနှင့်ကြပြီတစ်ဦးတစ်ယောက်စကားပြော။ အခမဲ့ အခြားရွေးချယ်စရာဘယ်မှာသင်တွေ့ဆုံနိုင်ပါတကျွန်းတနိုင်ငံသားတို့၏ကမ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားကြည့်ပါအခမဲ့ကျပန်းချက်တင်၊အခုကကြိုးစား။ ကိုးရီးယားချိန်းတွေ့အ ဆိုဒ်အမျိုးအစား။ တူယားချိန်းတွေ့ချက်တင်၊ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆိုဒ်ကအသုံးပြုတဲ့ဧည့်စကားပြောကနေတဆင့်ကမ်။ အခမဲ့ဆက်သွယ်ရေးပိုက်ကွန်အပေါ်အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကို။ ဆိုက်တူကိုးရီးယားအခမဲ့ချိန်းတွေ့ကမ်ချတ်နှင့်အတူတကျွန်းတနိုင်ငံသား။ ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့စကားပြောခဲ့ပြီးမိန်းကလေးများထက်အခြားမည်သည့်ကျပန်းချက်တင်ကွန်ရက်စာမျက်နှာအွန်လိုင်း။ ပြောဆိုရန်ကျပန်းတကျွန်းတနိုင်ငံသားတို့၏များအတွက်အခမဲ့။ ဆွေးနွေးရန်ဖို့အမည်မသိလူစိမ်း။ ကျပန်းစိမ်းဖစ္သျတွေ့ဆုံရန်။ ကမ်ချတ်နှင့်အတူယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများ။ အခမဲ့ဖုအဖုကစားတဲ့စကားပြော။ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့သည်အဆုံး၌သင်သည်ချက်တင်စကားပြောနိုင်နှင့်အတူတစ်ဦးကိုကျပန်းစိမ်းချက်ချင်း။ မှာဧည့်စကားပြောအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့နှင့်သင်၏မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏လူမှုကွန်ယက်။ ဗီဒီယိုစကားပြောချိန်းတွေ့ဘို့အကိုရီးယားဗီဒီယိုချိန်းတွေ့-လူကြိုက်အများဆုံးဗီဒီယိုဝန်ဆောင်မှုကိုချိန်းတွေ့။ ထက်ပို။ အသုံးပြုသူကနေအားလုံးသည်ကမ္ဘာအနှံ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းချက်တင်ကစားတဲ့။ စကားပြော သည်လေးကြိမ်ပျော်စရာယားချိန်းတွေ့၊ကိုးရီးယားဗီဒီယိုချိန်းတွေ့၊၊ကိုးရီးယားချိန်းတွေ့၊နှင့်ကပ်ပါ၏၊သောကြောင့်သင်ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူလူလေးမှာတစ်ချိန်က။ လွန်ကြီးစွာသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်အစည်းအဝေး၏စိမ်းအတွက်ကျပန်းချက်တင်စကားပြောခန်း၊နေရာရွေးအခြားအသုံးပြုသူမှာကျပန်းနှင့်ကြကုန်အံ့ရှိသည် တယောက်မှချက်တင်နှင့်အတူအသီးအသီးအခြား။ အခမဲ့ယားချိန်းတွေ့ကျပန်းဗီဒီယိုစကားပြောအင်္ဂဧည့်စကားပြောဝှက်ကိုအသုံးပြုသင့်ရဲ့ဒေတာတွေကိုနှင့်အတူလူသစ်ဖြည့်ဆည်းချက်ချင်းပေါ်ယားချိန်းတွေ့။ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ချက်တင်အခမဲ့အက္ပ္ကိုအစည်းအဝေးမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်ဆောင်ကြဉ်းနှင့်အတူတကျွန်းတနိုင်ငံသား။ ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်ကျပန်းလူသုံးပြီးချက်ချင်းသင့်ရဲ့ဝက်ဘ်ကမ်။ အခမဲ့ကမ်စကားပြောခန်း။ သင်၏မိတ်ဆွေများအတွက်ချက်တင်သို့မဟုတ်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်ဖြစ်စေအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ကျော်ထံမှအသုံးပြုပြီးကမ်နှင့်စာသား။ ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့ချက်တင်အခမဲ့ကမ်ချက်တင်ဆိုက်ချိတ်ဆက်သင်ကျပန်းအတူလူ။ ချိတ်ဆက်ဖုအဖုအတူကျပန်းတကျွန်းတနိုင်ငံသားတို့၏ကမ္ဘာအနှံ့။ အခုကကြိုးစားပါ။ ကိုးရီးယားချိန်းတွေ့ချက်တင်အခမဲ့အွန်လိုင်းချက်တင်အခန်းပေါင်း။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားကြည့်ပါဗီဒီယိုချက်တင်အခန်းပေါင်းများအတွက်အခမဲ့၊အဘယ်သူမျှမခါင္ကလိုအပ်ပြီးသုံးစွဲဖို့လွယ်ကူသော။ ကိုးရီးယားချိန်းတွေ့စကားပြောသင်ကူညီရင်းတွေ့ဆုံရန်ကျပန်းစကားကလူကိုကမ္ဘာအနှံ့မှအသုံးကမ်။ မရှိခါင္ကလိုအပ်သောကိုးရီးယားချိန်းတွေ့ချက်တင်သုံးစွဲဖို့အခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူတကျွန်းတနိုင်ငံသားတို့ချက်ချင်းပေါ်ယားချိန်းတွေ့။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျပန်းဗီဒီယိုစကားပြောဆိုက်ရန်လွယ်ကူစေသည်လူသစ်ဖြည့်ဆည်း ကမ္ဘာအနှံ့။ အွန်လိုင်းချက်တင်ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူမိတ်ဆွေများ၊မိသားစုနှင့်ပင်ဧည့်အပေါ်။ အရည်အသွေးမြင့်မားသော၊အဘယ်သူမျှမအခမဲ့ဒေါင်းလုပ်။ စကားေျ။ ကျပန်းဗီဒီယိုစကားပြောသည်အကောင်းဆုံးကျပန်းဗီဒီယိုစကားပြောခန်းဝက်ဆိုက်အခမဲ့ဝဘ်ဖစ္သျချက်တင်ကိုကျပန်းအတူလူနှင့်အစိမ်း။ သင်ချစ်လိမ့်မည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခမဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်အွန်လိုင်း။ ကိုးရီးယားချိန်းတွေ့စကားပြောတဲ့နေရာကို၊မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်တွေ့ဆုံရန်၊ရက်စွဲတစ်ခုရှာတွေ့နဲ့အတူလူမှုရေးစိမ်း။ သင်တွေ့ဆုံနိုင်ပါကလူနီးသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုစကားပြောလူတို့နှင့်အတူကမ္ဘာအနှံ့။ ချက်တင်ရှိအကောင်းဆုံးနေရာကိုချက်တင်နှင့်အတူတကျွန်းတနိုင်ငံသားတို့၏နှင့်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်ဖြစ်စေအားလုံးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ။ သင့်ရဲ့အထောက်အထားဖြစ်လိမ့်မည်လုံးဝအမည်မသိ။ ကိုးရီးယားချိန်းတွေ့ဖို့နေရာကောင်းတခုဖြစ်သည်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်တွေ့ဆုံရန်နှင့်အစိမ်း။ သင်ကအသုံးပြုတဲ့အခါကိုးရီးယားချိန်းတွေ့၊ငါတို့သည်အကောက်အခြားအသုံးပြုသူမှာကျပန်းနှင့်ကြပြီတစ်ဦးတစ်ယောက်စကားပြော။ အခမဲ့ အခြားရွေးချယ်စရာဘယ်မှာသင်တွေ့ဆုံနိုင်ပါတကျွန်းတနိုင်ငံသားတို့၏ကမ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားကြည့်ပါအခမဲ့ကျပန်းချက်တင်၊အခုကကြိုးစား။ ကိုးရီးယားချိန်းတွေ့အ ဆိုဒ်အမျိုးအစား။ တူယားချိန်းတွေ့ချက်တင်၊ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ဖို့အသုံးပြု ဧည့်စကားပြောကနေတဆင့်ကမ်။ အခမဲ့ဆက်သွယ်ရေးပိုက်ကွန်အပေါ်အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကို။ ဆိုက်တူကိုးရီးယားအခမဲ့ချိန်းတွေ့ကမ်ချတ်နှင့်အတူတကျွန်းတနိုင်ငံသား။ ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့စကားပြောခဲ့ပြီးမိန်းကလေးများထက်အခြားမည်သည့်ကျပန်းချက်တင်ကွန်ရက်စာမျက်နှာအွန်လိုင်း။ ပြောဆိုရန်ကျပန်းတကျွန်းတနိုင်ငံသားတို့၏များအတွက်အခမဲ့။ ဆွေးနွေးရန်ဖို့အမည်မသိလူစိမ်း။ ကျပန်းစိမ်းဖစ္သျတွေ့ဆုံရန်။ ကမ်ချတ်နှင့်အတူယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများ။ အခမဲ့ဖုအဖုကစားတဲ့စကားပြော။ ဝင်ဝေးထက်ကျော်လွန်။ထိပ်တန်းစာရင်းနှင့်အတူနက်ရှိုင်းသောအဆင့်အကြောင်းအရာအားလုံးကို၊အမဲအားဖြင့်လူတိုင်းသည်။ အောင်စာရင်းကိုထည့်သွင်း၊သင့်ရဲ့အမဲ၊ထိုခံစားကြည့်ပါအကောင်းဆုံးအဆင့်တွင်။
အခမဲ့ဗီဒီယိုစကားပြောကောင်းတစ်ဦးဖျော်ဖြေရေးများအတွက်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ။ ကျနော်တို့ကြိုဆိုပါတယ်မှလူများအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာအနှံ့၊အထူးသဖြင့်အဲဒီကနေနိုင်ငံအဖြစ်ဗြိတိန်၊။့၊ရုရှားနိုင်ငံနှင့်ကနေဒါ၊အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သူတို့အများစု။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခမဲ့အခန်းပေါင်းစကားပြောခန်းပူဇော်စကားသံကိုချက်တင်နှင့်နိုင်စွမ်းအသုံးပွုဖို့ဝက်ဘ်။ အချို့ဗီဒီယိုချက်တင်အခန်းပေါင်းရှိသည်ဖို့စွမ်းရည်ကိုမှဓါတ်ပုံများတင်သုံးစွဲသူပရိုဖိုင်း၊အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ဖန်တီးအခြေအခန်းပေါင်းစကားပြောခန်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများအများမှာမှတ်ပုံတင်ရန်မလိုအပ်သုံးစွဲဖို့အရင်းအမြစ်များပေါ်။ ပူးပေါင်းအခမဲ့နှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုအခြားလူများအားဖြင့်ဝဘ်။ အသီးအသီး၏အကူအညီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ကျွန်ုပ်တို့၏အရင်းအမြစ်။ ရိုးရှင်းစွာအကျွန်ုပ်တို့အပေါ်လူမှုရေးကွန်ရက်များ၊အဘယ်သူ၏အပေါ်ခလုတ်များ၏ထိပ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်၊သင်အကူအညီတည်ဆောက်ရန်နှင့်မိတ်ဆက်ပေးမှာကဗီဒီယိုချက်တင်။ အလည်အပတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခမဲ့ဆိုက်လျှင်သင်ကပျောက်ဆုံးနေအချို့သောဝန်ဆောင်မှု၊ကျွန်တော်တို့ကိုသိစေ၏ အကြံဥာဏ်သို့မဟုတ်အကြံပြုချက်များကို။ ကျနော်တို့ကြိုဆိုပါတယ်မဆိုစိတ်ကူး။ မအပြားအခမဲ့အခန်းပေါင်းစကားပြောခန်းပူဇော်သောအင်္ဂါငါတို့သည်စုဝေးနေရာတွင်ဆိုက်ယားချိန်းတွေ့။ ကျနော်တို့ကြိုးစားလုပ်ဆောင်မှပတ်လည်ထွက်အခမဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်သင့်ရဲ့ဗွီဒီယိုချက်တင်အပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်၊ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်နှင့်ကျွန်တော်စဉ်းစားမည်၏။ သင်မည်သည့်ပြဿနာမျှရှိပါက၊ဒီဆိုက်နှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုသိစေကျေးဇူးပြုပြီးကနေတဆင့်အဆက်အသွယ်ပုံစံ။ သင့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကျွန်တော်တို့ကိုရန်အလွန်အရေး၊နှင့်ကျနော်တို့ကြိုးစားပါလိမ့်မည်မဆိုပြဿနာဖြေရှင်းဖို့လိမ့်မည်အကျိုးစီးပွား။ ကိုးရီးယားချိန်းတွေ့ဖို့ရှိသည်အသုံးပြုသူများအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ကျော်ထံမှ၊နှင့်လူတိုင်းအတွက်သင့်လျော်သောလူမှုရေးကျွမ်းကျင်မှုများ။ ကျနော်တို့လုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိုင်းအခမဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်အဖြစ်လွယ်ကူသောအဖြစ်ဆက်သွယ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ကြောင်းသင်ရှိသည်ဖို့အခွင့်အလမ်းကွန်ယက်နှင့်အခြားလူတို့အားပြောဆိုရန်အင်တာနက်ကနေအချိန်မရွေး။ ဖိတ်ခေါ်ဖို့သင်၏အဆွေခင်ပွန်းနှင့်အတူစကားပြောသူတို့ကိုသို့မဟုတ်သူတို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးဖို့အခြားလူများ။ ဗီဒီယိုချက်တင်-အခမဲ့အစီအစဉ်ကိုအသုံးပြုသည်ကမ်၊ဒါကြောင့်သင်ဆက်သွယ်နှင့်အတူလူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ကျော်ထံမှတိုက်ရိုက်(အြန္လိုင္း)။ လွှဗီဒီယိုနှင့်အသံနည်းပညာစႏိုင္သည္ချက်တင် စကားပြောဆိုချက်တွေကိုအမှန်တကယ်အချိန်အတွက်၊အဖြစ်မုံလျှော့ချဖို့အကြားအကွာအဝေးနှစ်ခုသို့မဟုတ်ထို့ထက်ပို။ မကြာရှိလိမ့်မည်ဗားရှင်းအတွက်အင်္ဂလိပ်၊ပြင်သစ်၊အီတလီနှင့်စပိန်။ အဘို့ရှာကြသည်လျှင်နေရာဖြည့်ဆည်းနိုင်လူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ကျော်ထံမှ၊ဤအရပ်ဌာန-ကိုးရီးယား။
ဒါကြောင့်၊သင်ဆဲအံ့သြဘာပေးရေးတစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်၊ကျနော်တို့အဖြေကိုသိရ။ ဆက်ဆံရေးနေရာယူလူနှစ်ဦးအကြားခြင်းနှင့်တီးခတ်ထွက်ပေါ်သူတို့ရဲ့ဘုံမြေပြင်များ။ ဒီဘုံမြေအပေးအယူဖြစ်ပါသည်၊နှင့်အခြေခံအလွှာများအတွက်ကျူးလွန်ဆက်ဆံရေးကို။ အလျှော့ပေးလိုက်လျောသည်အများအားနားလည်ပေးခြင်းအဖြစ်တစ်ခုခုတက် ကိုရောက်ရှိနိုင်ဖို့အတွက်နေရာတစ်နေရာနားလည်မှုသင့်ရဲ့မိတ်ဖက်နှင့်အတူ။ အဘယ်သူမျှမကလူနှစ်ဦးအတူတူပါပဲ။ မှာအချို့သောအမှတ်သင့်ရဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်သင်နဲ့သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်ရှိသည်လိမ့်မယ်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောချဉ်းကပ်မှု၊ထင်မြင်ချက်သို့မဟုတ်ဆန္ဒရှိ။ ဤအချက်မှာပါ၊သင်လိုအပ်ဝန္ခံေျ၊သို့မဟုတ်ပိုကောင်းအခြားရွေးချယ်စရာအလျှော့ပေးလိုက်လျောဖို့။ အလျှော့ပေးလိုက်လျောသည်’အလယ္အပြည်နယ်အကြားပဋိပက္ခအခြားနည်းလမ်းဖြင့်ရောက်ရှိလှန်လျော’။ ဤသည်အပြုသဘောဘက်အလျှော့ပေးလိုက်လျော-သင်တွေ့ဆုံသည့်အခါအလယ်၌။ အဆိုပါရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ဖြစ်သောအပေးအယူအပြန်အလှန်အကျိုးဖြစ်ထွန်းကြောင်းသင်ကိုယ်မဟုတ်၊ကိုယ်အားဖြင့်၊အခြင်းဖြစ်သည်။ အသီးအသီးမိတ်ဖက်သင့်နှင့်အတူပျော်ရွှင်စေ။ သို့သော်၊ဒါဟာအစအဖြစ်သတ်မှတ်”အကျိုးရှိလက်ခံပါတယ်ကြောင်းစံချိန်စံညွှန်းထက်နိမ့်နှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ပါသည်”။ ဤသည်အဆင်းဘက်အလျှော့ပေးလိုက်လျော။ အောင်မြင်စွာအလျှော့ပေးလိုက်လျောဆက်ဆံရေးအတွက်၊သင်နားလည်ရန်လိုအပ်သည်အကြားကွာဟယဇ် လျှော့ပေးလိုက်လျော။ အလျှော့ပေးလိုက်လျောဘယ်တော့မှမပေးသင့်တစ်ယဇ်၏အမာခံတန်ဖိုးများ၊ယုံကြည်ချက်သို့မဟုတ်လိုအပ်သည်။ သောအခါအတိုင်းအတာရှိပါတယ်တင်ဝေးလွန်းအတွက်အမှား ။ ဤသူနှစ်ဦးစလုံးအလငျးကိုမီးမောင်းထိုးဖတ္တတ္ဖိုသဘာဝအလျှော့ပေးလိုက်လျော။ ဒါဟာနှစ်ဦးစလုံးအပြီးကျဆုံး၏။ ဒါကြောင့်ဘယ်လိုအပေးအယူထွက်ကစားအတွက်အလေ့အကျင့်။ အလျှော့ပေးလိုက်လျောအတွက်ဆက်ဆံရေးရှိနိုင်ပါသည်လှည်၍။ ဒါဟာဟုခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည့်လိုအပ်သောမကောင်းသောအ။ သို့သော်၊ထိုမှစွမ်းရည်ကိုလျှော့ပေးလိုက်လျောသည်တန်ဖိုးရှိသောကျွမ်းကျင်မှုဖြတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆက်ဆံရေး။ ကျွန်မတို့အမြဲမှန်တယ်၊ဒါပေမဲ့အမြဲအပေးအတွက်၊အလျှော့ပေးလိုက်လျောဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ စေရဲ့အကြမ်းဖျင်းအမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကျွမ်းကျင်မှုများ၏အောင်မြင်သောဖွဲ့စည်းသည်။ အလျှော့ပေးလိုက်လျောသည်အမြဲလွယ်ကူသည်မဟုတ်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်သင်အနိုင်ရအနည်းငယ်၊တခါတရံတွင်သင်သည်ကိုယ်အနည်းငယ်။ ဒါပေမယ့်ဆိုရင်နှစ်ဦးစလုံး၏ဆန္ဒရှိနေကြသည်မဟုတ်ယဇ်ပူဇော်ဖို့အတွက်ဆက်ဆံရေး၊အခွင့်အလမ်းတွေကိုသင်ရောက်ရှိပါလိမ့်မယ်အဆုံ၏ဆက်ဆံရေးအတွက်ဆောင်ခဲ့ကြလိမ့်မည်ကြောင်းကြောင့်အကြိတ်ရပ်တန့်။ ဒီတော့၊ကြည့်ရအောင်နေရာနှင့်မအားပေးအားမြှောက်ပါဝင်ဆက်ဆံရေးအတွက်။ အဟောင်းဆိုပြုမင်္ဂလာဇနီး၊ပျော်ရွှင်ဖွယ်အသက်တာသည်အရောင်ပြန်၏အချို့အမှန်တရား။ သင်တို့၏ဆက်ဆံရေးအများကြီးပျော်သောအခါသင်၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်မဆိုလိုပါဘူးသူတို့ဖို့သူတို့ရဲ့သွားရာလမ်းသာ။ နားထောင်ပြီးနားလည်သဘောပေါက်သည်အခြေခံအကျဆုံးဖြစ်သည်။ အချို့ဒေသများတွင်လိုအပ်သောဖြစ်ကြသည်ကိုရောက်ရှိအဖြစ်သူတို့ကနေ့စဉ်အသက်တာ၏။ ရှိခြင်းအနက်ဖော်၊အဓိပ္ပါယ်ရှိသည်လိမ့်မည်ကိုင်တွယ်ရန်အချို့သောကိစ္စရပ်များကိုလမ်းတလျှောက်။ နှင့်ဤအရပ်လက္နက္ျချွတ်ပေးဆောင်။ နားထောငျတျောအသီးအသီးအခြားထွက်၊နှင့်ချိတ်ဆက်ဖန်တီးချက်။ ကိစ္စများအားဖွဲ့စည်းရန်သောအခြေခံများသင်မည်သို့တိုက်ရိုက်ထုတ်သင့်ဘဝအတူတကွအနည်းငယ်ယူညှိနှိုင်းရန်ရောက်ရှိသောနေရာနှစ်ဦးစလုံးခံစားအသိအမှတ်ပြုလက်ခံပါ။ ဒါပေမယ့်အထားအတွက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအလွန်ကြီးစွာသောဝေရှာတွေ့သင်တို့၏ဆက်ဆံရေးအလယ်၌မြေပေါ်မှာဤအခြေခံကျတဲ့ကိစ္စရပ်များကို။ မင်္ဂလာမေတ္တာမျှပျော်ရွှင်ဘဝ။ အားလုံးအပေးအယူအပေါ်အခြေခံပြီးပေးပြီးယူ၊ဒါပေမယ့်နိုင်မပေးနှင့်အချို့အပေါ်အခြေခံ။ အတြက္ဆိုလည္းမငြိစွန်းပေါ်အချို့သောအဓိကအကြောင်းအချက်များ။ သင့်ရဲ့အခွင့်အရေးနှင့်လိုအပ်မည်ဘယ်တော့မှသင့်ပါတယ်အချိုးအားဖြင့်သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်။ ဤဒေသများရှိသင်ဘယ်မှာမဖြစ်သင့်ပြန်ဆင်း၊ နှင့်အပေးအမှန်တကယ်အထက်ကိုင်တွယ်။ ဒါဟာငါ့အလမ်းကိုသို့မဟုတ်အဝေးပြေးလမ်းမသည်အများဆုံးနေရာပေးသဘောထား။ သို့သော်၊သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်ချင်သင်အပေးအယူကိစ္စရပ်များအပေါ်အခြေခံကျကျသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဝိသေသလက္ခဏာနှင့်တန်ဖိုးများ၊ဒါကြောင့်ပဲအချိန်မှစတင်လမ်းလျှောက်ရန်ကွာဝေးသည်။ မပေးလျှင်ကိုဆိုလိုသည်လျှော့ချသင့်ရဲ့စံချိန်စံညွှန်းထက်လျော့နည်းသည်။ ကအကြောင်းတစ်ခုဖန်တီးခြင်းမျှကစားကွင်းထားရှိရန်နှစ်ဦးတစ်ဦးချင်းစီ။ ကဘူးကဂိုးအနိမ့်စံ။ အဆိုပါရည်မှန်းချက်သင်တို့နှစ်ဦးစလုံးသင့်အလုပ်ဆီသို့ဦးတည်ဖြစ်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်၏နှစ်ဦးစလုံးသည်သင်၏ကမ္ဘာ။ သတိရ၊သင့်ရဲ့ချဉ်းကပ်မှုအပေးအဖြစ်သင့်ရဲ့အစချိတ်ဆက်ပြီးမလိုအပ်ပါဘူးအဖြစ်အဓိပ္ပါယ်။ ပြောင်းလဲမှု၊စိုက်ပျိုးနှင့်လိုက်လျောညီထွေ။ သင်ယူသင့်သင်ခန်းစာများနှင့်အတူအကောင်းဆုံးအဘယျသို့သင်ရှိသည်-သင့်အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်မည်ဖြစ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အဖြစ်သဘောထားသင့်တယ်။ သင့်ရဲ့တစ်ဦးချင်းစီအစွမ်းသတ္တိနှင့်အားနည်းချက်များကို၊အမြင်နှင့်တန်ဖိုးများကိုချဲ့ထွင်ရန်၊စာချုပ်အသီးအသီးအခြားရဲ့ကမ္ဘာ။ အလျှော့ပေးလိုက်လျောဆက်ဆံရေးအတွက်နိုင်လမ်းခင်းဖို့အရော။
မယ်ဖရိ၊ေပေါ့ပ်ယဉ်ကျေးမှုအသိပညာ(အဆင်ပြေ၊ဒါကြောင့့်မသတီခေတ်၊ဒါပေမယ့်ဟေး၊၎င်း၏့ငါ့ဆောင်းပါး၊ဒါကြောင့်ကျွန်မပြောခေတ်သစ်)ကိုတီထွင်ထားသောစာပိုဒ်တိုများ၊အဘယ်အရာကိုအမျိုးသမီးချင်၊နှင့်ယခုငါသွားဖို့အ-သငေ်္ဘာ၏အချို့ဒဏ္ဍာဆက်မပြတ်အတွက် ဒီရုပ်ရှင်က၊အဖြစ်ကောင်းစွာ၏စိတ်ထဲတွင်လူအများတို့သည်ကမ္ဘာအနှံ့။ မယ်ခဲ့အနည်းငယ်ထိုးထွင်းသိသောအထောက်အကူဖြစ်ကြောင်းအတွင်းသတင်းအချက်အလက်အစုအဝေး၏အဆင့်ဆက်ဆံရေး၊အာင္ဖန္တီးစတင်ရှိပါတယ်။ အခါအမျိုးသမီးတစ်ဦးပထမဦးဆုံးရှုနှင့်အတူတစ်ဦးဆက်ဆံရေးအချို့သောသူ၏ပထမဦးဆုံးအမှုအရာသူမကအဘို့အရှာဖွေနေသည်ရယ်မောခြင်းနှင့်အပြုသဘော။ အဘယ်သူမျှမအမျိုးသမီးကိုလှည့်ပတ်ဖြစ်ချင်သောနုတ်စော်ဒါကြောင့်ယောက်ျားလိုအပ်ခံရဖို့နောင်သတိပြုမိသူတို့မည်သို့ဟောပြောကြောင်းအခြားလူများ၊မိမိတို့အနေ့နှင့်အသက်အတွက်အထွေထွေ။ အမြဲသူမ၏မှာပြုံးအလွန်အနည်းဆုံး၊သင်ပင်ပိုကောင်းသည်သူမအတွက်အချုပ်ရယ်။ ငါယုံကြည်မယ်ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ပါတယ်သောအဖြစ်အမျိုးသမီး့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေ၊အရာသင်တန်း၏၊မည်သည့်စစ်မှန်သော၊ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်- အမျိုးသမီးသင်ပြောပြလိမ့်မယ်၊မသတီယ့်လိုသောအရာကိုသူမအတွက်သူမ၏အိမ်ထောင်ဖက်။ ကြတီအကြှနျုပျကိုကမှား၊အမျိုးသမီးလုပ်လိုသောသူတစ်ဦးအိမ်ထောင်ဖက်တစ်ဦးအလွန်ကောင်းသောမိတ်ဆွေ-တမျှဝေနိုင်ပါသည်မျှော်လင့်၊အိပ်မက်များ၊အလိုဆန္ဒများ၊ဆုံးရှုံးမှု၊နှင့်စိတ်ကူးယဉ်နှင့်အတူ-ဒါပေမယ့်မလိုအပ်ကြောင်းတည်းသူတို့မျှဝေကြလိမ့်မည်ခပ်သိမ်းသောစိတ်ခံစားချက်သို့မဟုတ်စိတ်ခံစားမှုနှင့်အတူ၊ကအာရုံစေသည်လျှင်။ ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်သောအမျိုးအစား အ အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံး ကိဳက္ျ။ အမျိုးသမီးချင်သူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်ခံရဖို့တစ်စုံတစ်ယောက်သူတို့တိတ္တိတ္ေအတွက်ပွင့်လင်းဖြစ်၊ရိုးသားမှုမရှိဘဲ၊ကြောက်ရွံ့ခြင်း၏တရားစီရင်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်၊နှင့်လည်းကြောင်းတစ်စုံတစ်ဦးမှပွင့်လင်းသစ်အကြံအစည်အတွေးအခေါ်၊အတွေ့အကြုံ(ပါကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်အိပ်ခန်းထဲမှာ)။ အမျိုးသမီးချင်တကယ့်လူ-နိုင်သူတစ်စုံတစ်ဦးချစ်နှင့်ပင်လေးစားအခွန်၏တစ်ရာစုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်၊ဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေးတက်ရောက်နေဆဲကလေးတွေအ ၊အချိန်အပေါ်အမျိုးသမီးများနေ့နှင့်ကိုက်နိုင်ပါတယ်သူမအတွက်ပွင့်လင်းမျှသာအချိန်လေးတွေကိုထုတ်ဖေါ်ဖို့အကြီးအ ကလေးမလေးစောင့်ဆိုင်းနေစိတ်ရှည်ရှည်ထွက်လာဖို့။ ကျနော်တို့ချင်သောသူခိုင်ခံ့ခြင်းရှိလိမ့်မယ်၊ရိုးသားဖြစ်ခြင်းမပါဘဲအခ်က္ေ၊သစ္စာ-ပင်လျှင်သူတို့မကျင့်နှင့်အတူသဘောတူအဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ပြောနေကြတယ်၊သူတို့နေဆဲကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ခံ။ ခါထိုးသို့ပြန်ချိန်းတွေ့ရေကူးကန်ပြီးနောက်နီးပါးအနှစ်၊ကျွန်မလုံးဝနစ်အတွက်ပင်လယ်ဖြစ်ချင်ဟုတ်ကဲ့-အမျိုးသားများလည်းအနည်းအဘို့အကြှနျုပျ၏ကိုယ်ပိုင်အကောင်း(ဘယ်တော့မှစိတ်ကိုမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်)နှင့်နိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဆန္ဒဖြစ်ဖို့အမှန်တကယ်မိမိတို့နှငျ့အတူရိုးသားပြီးကျိန်းသေမတူတဲ့အလားအလာအိမ်ထောင်ဖက်။ ငါပေးမည် ဇာတ်လမ်း။ ငါအပေါ်တစ်ဦးလူကြိုက်များအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ၊ထွက်စစ်ဆေးနေခဲ့သူငါ့အတွက်ပထဝီဧရိယာများ၊ပတ်ပတ်လည်ငါ့အသက်အရွယ်၊နှင့်ရှာဖွေနေများအတွက်တူညီသောအရာ-အလားအလာများအတွက်ဆက်ဆံရေး၊ပဲ ။ ဒါကြောင့်၊ငါစကားပြောနှင့်အတူအနည်းငယ်အလားအလာကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၊နှင့်အနည်းငယ်အတွင်းကစာကြောင်းသို့မဟုတ်အရှိဆုံးမှာအနည်းငယ်၊သူတို့ပျောက်ကွယ်သွား။ ငါချက်ချင်းသွားသို့သုတေသနနှင့်ငါရှိသည်အဘယ်အရာကိုထုတ်တွက်ဆကြောင်းဖြစ်စေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဤအထင်အလားအလာအိမ်ထောင်ဖက်ကနေသွားကြဖို့ပူအမအောက်မှာစက္ကန့်၊နဲ့တကယ်တော့၊သူတို့ပြောချင်ဆက်ဆံရေး၊ဒါပေမယ့်ဘယ်အရာကိုသူတို့တကယ်ကြီးကိုနောက်ကွယ်မှဝှက်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးမျက်နှာပြင်၊ေတစ်စုံတစ်ဦး့မျက်စိ၊နှင့်ဘယ်တော့မှကြကုန်သောကုလားကာထိုးဖောက်အားဖြင့်အဖြစ်မှန်။ ဒါဟာတကယ်ပဲငါ့အဘို့အတွက်ဒီကြည့်ဖို့ငါ့ကိုယ်ပိုင်အလှန်ခါ၊ဒါပေမယ့်ကျွန်မပြောနေတာစတင်နှင့်အတူအမျိုးသမီးများ၊ဖောဖောသီသီရှင်းရှင်းလင်းလင်း။ ယခု၊ကအကြောင်းပြောဖို့မဟုတ်ပါဘူး၊လူတိုင္းလူတိုင္းသူေျပာလိုတဲ့ဆက်ဆံရေးသည်ဤအမျိုးအစား၊ဒါပေမယ့်မပြောပမာဏအဖြစ်မှအဘယ်ကြောင့်ဤမျှလောက်များစွာသောအမျိုးသားများ(နှင့်တရားမျှတဖြစ်၊အမျိုးသမီးလည်း)ဒီချိန်းတွေ့ ဆိုဒ်များခြင်းမရှိဘဲနှစ်ပေါင်းအဘို့အစဉ်တကယ်ဘဲစစ်မှန်တဲ့တယ္။ ကျွန်တော်ထင်သလိုလူတကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချဖြစ်ခြင်းမပါဘဲအထင္ႀ၊ရိုးသားဖြစ်ခြင်းမပါဘဲအခ်က္ေတြ၊အားကြီးသော(မင့်တက်ခူးဖို့တတ်နိုင်တစ်အိပ်ရာရွှေ့၊ဒါပေမယ့်အမှန်တကယ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအားကြီးသော)၊ကောင်းတန်ဖိုးများနှင့်အကျင့်ဓ၊ချိုးမည်ပွင့်လင်းသူတို့ကိုထွက်ရောက်စေသူတို့ရဲ့အတွင်းစိတ်ကကလေးသူငယ်၊အပေါင်းတို့နှင့်အထက်အခြား၊စေရယ်ရှိသမျှသောအအခိုက်၌နေ့တိုင်းအစဉ်အမြဲသူမ၏သတိပေးဘယ်လိုတန်ဖိုးထား။
အဘယ်ကြောင့်သင်သွားရောက်ရန်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များအဘို့အအိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီး? သင်သည်အဘယ်သို့ရှာကြသည်? အဘယ်ကြောင့်လူအထောင်သည်အမျိုးသမီး? အချို့လူများအတွက်အဖြေ၊တကယ်တော့၊ သိသာသူတို့လိုချင်ရုံကိုရဖို့အပျော်အပါး။ ရှိပါတယ်စိတ်ဝင်စားနေသောအမျိုးသားများချိန်းတွေ့ထောင်သည်အမျိုးသမီး၊သင်ဖြစ်စေခြင်းငှါ၊။ ဒီလူတွေမကျင့်ချင်မှရသည်ကွယ်ပျောက်သူမ၏မိသားစုမှ၊သူတို့ပဲဆွဲဆောင်အားဖြင့်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီးကြီးမားတဲ့ဆန္ဒများကိုစားရန်တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုသီး။ တခါတရံမှာ၊ထိုသို့အလိုပြင်းထန်တဲ့ဆွဲဆောင်မှုအခါအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့မိန်းကလေးပုံပေါ်မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းပေါ်ကြောင်းလူတိုင်းမလုပ်နိုင်ခုခံတွန်းလှန်၊ဒါကြောင့်ပင်လျှင်သူမသည်လက်ထပ်ပြီးသင်ဖူးဘူးကြောင်းအိပ်မက်မက်ချိန်းတွေ့ထောင်သည်အမျိုးသမီး။ အပြင်၊အချို့မိန်းကလေးများထင်ဆုံးရှုံးဆွဲဆောင်မှုသည်အခြားယောက်ျားနှင့်အတူလက်စွပ်အပေါ်မိမိတို့အလက်ချောင်း၊သို့သော်၊မကြာခဏအခြေအနေကိုဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ မပါဘူးတီအရေးရှိမရှိသူမ၏ဇနီးကောင်းတစ်ဦး၊မိတ်ဆွေတစ်ဦးရံဖန်ရံခါအကျွမ်းသို့မဟုတ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦး၊အချို့သောလူတို့သည်မရနိုင်ကူညီမှုအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်လျှက်ချိန်းတွေ့တစ်ထောင်သည်အမျိုးသမီး။ အိုင်၏မေတ္တာအမျိုးသမီးကိုဖြည်ပြီးထိုကဲ့သို့သောလူတို့နှင့်အတူအဖျက်သဘောအောင်မြင်ခြင်းများနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအောင်မြင်မှု။ အဆိုပါဆောင်ပုဒ်အများဖောက်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ် ။ သို့သော်၊ဒါကြောင့်လျော့နည်းလာမှုကြောင့်သက်ဆိုင်ရာမှအကြောင်း။ လိမ်လည်ခြင်းခဲ့၊အလိမ့်မည်၊သင်နဲ့မကွာရ။ သင်စကားပြောနိုငျကဲ့သို့များများစားစားသင်ကြိုက်အကြောင်းဤသည်၏အနှစ်သာရလူ့သဘောသဘာဝဖို့ကြိုးစားသင်ပေးနှင့်သကုသရန်အချက်ကို၏လိမ်လည်ဆေးတည်ငြိမ်စွာ။ လိုအပ်သည်ဆိုကြောင်း၊ယခုအချိန်တွင်၊အများအပြားရှိပါတယ်သောသူစုံတွဲများအကြောင်းပြု။ သူတို့အပြောအသီးအသီးအခြားအကြောင်းသူတို့ရဲ့အချစ်ရေးရာ၊တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနှင့်ပင်အဘို့အကြည့်ရှုသင့်တော်သောမိတ်ဖက်သူတို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်။ ထိုကဲ့သို့သောတစ်ဦးကဇနီးနှင့်ခင်ပွန်းမိမိတို့ကိုယ်ကိုစဉ်းစားခံရဖို့အခမဲ့နှင့်အဆင့်မြင့်။ ဖြစ်နိုင်၊က၎င်းဖစ္ေစႏိုင္သည္။ သို့ရာတွင်၊အများစု၏မိသားစုရဲ့ကြဘူးတီကိဳထိုကဲ့သို့သောအဆင့်မြင့်မြင့်အဆင့်။ ကြောင်း၊ပွင့်လင်းချစ်ရေးရာနှင့်အတူအခြားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကြိုဆိုသည်မဟုတ်။ သို့သော်၊များစွာသောလူတို့အတွက်ချိန်းတွေ့တစ်ထောင်သည်အမျိုးသမီး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊အမျိုးသမီးလိမ်လည်ခြင်း၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ခိုင်။ ဤဂုဏ်အသရေကို၊အများဆုံးဖွယ်ရှိပါတယ်၊တစ်ဦးစီစဉျပေးလက်ထပ်ထိမ်းမြား၊နှင့်သည်မလိုအပ်နှင့်အတူငွေရတတ်သောသူ၊တစ်ခါတစ်ရံတွင်သူတို့လက်ထပ်ဖို့ခဲယဉ်းအလုပ်လုပ်သောသူယောက်ျားတွေရှိသည်အလားအလာအနာဂတ်။ သူမကလိုလားနွေးထွေးမှုနဲ့ချစ်ခင်စုံမက်။ သူမသည်အတော်လေးရင့်ကျက်၊နှင့်၊တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ၊သူမအနိုင် အခန္းအလှပေမဲ့၊ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်၊သူမ၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုအသစံပြ။ သူမဆွဲဆောင်ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မည်သူမည်သူမဆိုနေလျှင်ပင်အယောင်များ၏အာရုံစိုက်ကြောင့်လိုအပ်စိတ်ခံစားမှုနွေးထွေးမှု၊နှင့်သူမယူမည်မှာမည်သည့်ကုန်ကျစရိတ်။ ဖြစ်နိုင်၊သူမသင်ပင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ကျရောက်သို့မဟုတ်သူမ၏နှင့်အတူ၊ဒါပေမယ့်ဒီအမျိုးသမီးချန်ထားမည်အမြန်ဆုံးသကဲ့သို့သင်တို့ကိုသူမငြီးငွေ့ရရှိနိုင်ရန်အတွက်တစ်စုံတစ်ယောက်ရှာမည်။ သွားနေတယ်ဆိုရင်ရက်စွဲအမျိုးသမီး၊ဖြစ်နိုင်ခြေအကျိုးဆက်များကြိုတင်မဲအတွက်။ သူမဖြစ်စေတစ်ဦးကငြီးငွေ့အိမ်ရှင်အဘယ်သူသည်လက်ထပ်ပြီးမပါဘဲမည်သည့်အသက်အတွေ့အကြုံ၊သို့မဟုတ်သူအမျိုးသမီးအကျင့်ကိုကျင့်ကိုအတော်လေးတွေအများကြီးနှင့်သူမ၏ခင်ပွန်းမပါဘူးတီဆျော။။။။ အစားအသောက်တစ်ဦးအားလပ်ရက်ရှိခြင်းသို့မဟုတ်တစ်ဝါသနာ၊ဒီအမျိုးသမီးရှာဖွေနေသည်အငယ်ကောင်လေးအပေါ်ဘေးထွက်ဆိုး။ ကံမကောင်းစွာပဲ၊တစ်သိသာအားနည်းချက်။ ပါကပထမဦးဆုံးအမျိုးအစားအိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးသည်ရယ်၊ပြီးတော့ဒီအမျိုးသမီး၊အဆန့်ကျင်တွင်၊အဘို့အစောင့်ဆိုင်းသင့်ရဲ့လုပ်ရပ်အတွက်အရာအားလုံးကို။ တခါတရံ၊သူမကပင်စွန့်ခွာမိသားစုများအတွက်တိုတောင်းတဲ့အချိန်၊ထိုအခါမူကားသူမသည်လာပြန်သည်။ သတိရကြောင်းနဲ့လက်ထပ်၊သူမ၏ ရှာကြံအများအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ၊ချိန်းတွေ့အခြားယောက်ျား။ ဒီမိန်းကလေးကိုယ့်လက်ထပ်တယ်။ သူမ၏ခင်ပွန်းကြီးဖြစ်ကောင်းသူမ၏အလွန်ပထမဦးဆုံးလူသား၊ဤနုံမိန်းကလေးတစ်ခဲ့သည်မကြာသေးမီကတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းထွက်ရှိပါတယ်အခြားအမျိုးသားများ။ သူမသည်သူမ၏ချစ်ခင်ပွန်း၊အနည်းဆုံးသူမရူးချွန်သူ့ကိုမှ၊ဒါပေမယ့်ဒီအချက်ကိုကြောင့်ရှိကြောင်းတစ်လျောက်ပတ်၏မရှိခြင်းအတွက်အတွေ့အကြုံ ။ တစ်ခုပြော၊တစ်ပုလင်း၏စပျစ်ရည်နှင့်လွယ်ကူသောခံယူသောလိင်တူညီသောနိုင်ပါတယ်၊နှင့်ဤနာခံမှုရှိသောမိန်းကလေးအတွက်ပြီးသားသင့်ရဲ့အိပ်။ သို့သော်၊ယခုသင်စည်းရုံးသိမ်းသွင်းသင့်ပါတယ်သူမသမျှကျန်ရှိနေသင့်လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခု။ သင်တွေ့ဆုံနိုင်ပါ၊ထိုကဲ့သို့သောအမျိုးသမီးအတော်လေးမကြာခဏ။ သူမသည်သူမ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတစ်သက်လုံးအိမ်ထောင်ရေးအတွက်၊သူမသည်အရာအားလုံးကိုပြုများအတွက်သူမ၏ခင်ပွန်းနှင့်သားသမီး။ သူမတာနဲ့တော်တော်လေး၊ဒါပေမယ့်သူမသူမ၏အသွင်အပြင်လျော့နည်း။ သူမငြီးငွေ့သည်သူမ၏ခင်ပွန်းသည်သူ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝ၊သူတို့အတူတကွနေထိုင်လို့ထောင်ရေးသည်မြင့်မြတ်သောအရာ။ အဘယ်သူမျှမချစ်သူမ၊နှင့်ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေ သူမရွား။ ကောင်းတစ်လမ်းအတွက်၊ထိုသို့ဖြစ်မည်ဟုယုတ္တိအရကွာရှင်းဒါပေမဲ့သူဘယ်တော့မှလိမ့်မည် ယူထိုကဲ့သို့သောတစ်လှမ်းဖြစ်သောကြောင့်ဒီအဆင့် နက်။ မယ့်အစား၊သူမကအဘို့အချစ်ခြင်းမေတ္တာအပေါ်၊သူမကအောင်ဖို့ကြိုးစားပါသူမ၏ချစ်သူကိုအဖြစ်သူမ၏ခင်ပွန်းကသစ်ကိုမရှိဘဲကွာရှင်းခြင်း၊ဟုတ်ပါတယ်။ အများအားဖြင့်၊ထိုကဲ့သို့သောယောက်ျားချင်ကြပါဘူးအလေးအနက်ဆက်ဆံရေး၊အမြင်တစ်ထောင်သည်အမျိုးသမီး၊အကယ်စင်စစ်သူတို့ကျင့်တီအိပ်မက်အကြောင်းချိန်းတွေ့အထောင်သည်အမျိုးသမီးလေးတွေနှင့်အတူ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊သူမ၏အသစ်လက်ထပ်ထိမ်းမြားစတငျပွဖို့ပျက်ကွက်။ ဆက်ဆံရေးအတွက်အနည်းဆုံးလူတဦးတည်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အထောင်အမြဲစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီကလမ်းပြချိန်းတွေ့ဖို့တစ်ထောင်သည်အမျိုးသမီး? အဘယ်အရာကိုသင်အဆုံး၌ပိုချစ်ခြင်းမေတ္တာသို့မဟုတ်ပြဿနာများ? အဘယ်ကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောဆက်ဆံရေးကိုလူကြိုက်အခု? ၎င်းဖစ္ေစႏိုင္သည္ထိုကဲ့သို့သောဆက်ဆံရေးအတော်လေးရေပန်းစားခေတ်သစ်ကမ္ဘာအတွက်။ အများအားဖြင့်၊ယောက်ျားကိုပြောင်းလဲချင်တယ်အခြေအနေ၊သူတို့စိတ်ကျေနပ်မှုမရှိနှင့်အတူလိင်၊သူတို့အကြတယ်ကျပ်အတည်း၊သို့မဟုတ်သူတို့ခံစားချင်ဖွယ်၊အ သူတို့ရဲ့သဘောသဘာဝအားဖြင့်။ ထို့ကြောင့်၊သူတို့အဘို့အကြည့်ဖို့အကြောင်းသိကောင်းစရာများချိန်းတွေ့တစ်ထောင်သည်အမျိုးသမီး။ သင်တီလိုအပ်ရန်အဆိုပြု။ ပထမဦးဆုံးနှင့်အညီ၊ဖြစ်ကောင်း၊တဦးတည်းအများဆုံး ချစ်ကျိုးမရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်ကတိကဝတ်များ၏လက်ထပ်ဖို့။ တစ်ဦးအုပ်ချုပ်အဖြစ်၊အတွက်အခြေခံဒီဆက်ဆံရေးကမမြင့်မားသောအဓိပ္ပာယ်၊ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးမည်မဟုတ်ဝယ်လိုအားကိုဖန်တီးထောင်အပည္ေထာင္စု၊သူမကရှိပါတယ်။ သင်ရှိသည်လိမ့်မယ်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားလိင်ဘဝ။ ပထမ၊လက်ထပ်ပြီးအမျိုးသမီးများပိုပြီးလေးနက်တဲ့အသိပညာကရင်းနှီးသောနယ်ပယ်၊နှင့်ဒုတိယအ၊မည်သည့်အမျိုးသမီးကိုအမြဲရှာတတ်ဖို့အံ့ကျေးဇူးပြုပြီးသူမ၏ချစ်သူကိုဆိုလိုသောအသီးအသီး၏အစည်းအမည်တူပြီးခဲ့သည့်တဦးတည်း:တောက်ပသော၊အကြမ်းမဖက်၊စိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်အမေ့နိုင်သော။ မှတပါး၊သင်ကျေနပ်အောင်နိုင်ပါ၏ရဲရင့်ရင်းနှီးသောစိတ်ကူးယဉ်နှင့်လိင်အတွက်ပုံမှန်မဟုတ်သောနေရာများ၊အခန်းကဏ္ဍကို-ကစားဂိမ်းသို့မဟုတ်လိင်ကစားစရာ။ သူမတီကောင်။ ပူးပေါင်းကြံစည်မှုအတွက်ဤဆက်ဆံရေးကိုအဓိကအရာ၊ထို့ကြောင့်၊သူမမလိုက်သူမ၏အချစ်။ ဒါကကိုဆိုလိုတယ်သင်ကအသက်တာကိုအသက်ရှင်ချင်တယ်၊သင်ကရန်မလိုအပ်ပါဘာမှပြောင်းလဲ၊သင်အဖြစ်ဆောင်ရွက်သင်လိုချင်မှု၏ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲအတောင်းဆိုမှုများမှသူမ၏ဘေးထွက်ဆိုး။ သူမမရှိပြောဖို့လူတိုင်းကအကြောင်းသူမ၏အနည်းငယ်လျှို့ဝှက်ချက်ကြောင့်သူမလည်းကြောက်လန့်ဖြစ်ခြင်း၏အရှင်။ ထို့ကြောင့်၊ သူမအရာအားလုံးကိုလုပ်ဖို့ကြိုးစားလုပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးဆက်ရှိနေ။ ဤသည်ပြီးသားတစ်ဦးသိသိသာသာအပေါင်း။ သူမမွီလက်ထပ်။ အခြားအပြုသဘောဆောင်သောဘက်ခြမ်း၏အချစ်ကိစ္စကတော့အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးမပါဘူးလိုလက်ထပ်ဖို့။ တခါတလေ၊ဟုတ်ပါတယ်၊ဒါကြောင့်ဖြစ်ပျက်၊သူတို့တောင်းဆို၊ဒါပေမယ့်သူတို့လုပ်အများကြီးလျော့နည်းမကြာခဏထက်ကိုယ်ရေအမျိုးသမီး။ သူမလျော့နည်းတောင်းဆိုမှုများ။ ချိန်းတွေ့ဖို့ကိုဘယ်လိုတစ်ထောင်သည်အမျိုးသမီး။ အချို့ကိစ္စများတွင်၊ဒါကြောင့်အတော်လေးလွယ်ကူသည်။ မပါဘူးတီရှိမရှိနေပါစေသင်ပေးဖို့သူမ၏ပန်းပွင့်သို့မဟုတ်မရှိမရှိ၊သငျသညျပစ္စုပ္ပန်သူမ၏လက်ဆောင်တစ်ခုအတွက်မွေးနေ့ကို၊သင်ပင်မတၲာမှာအားလုံး၊ထိုသို့အားလုံးမှန်တယ်။ ပင်အထူးအတြဟာမလိုအပ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ရုံကျင့်တီမြှင့်တင်လိုသည့်သံသယများသူမ၏ခင်ပွန်းအကြောင်း၊ဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ထို့အပြင်ခုနှစ်၊သင်ပြရန်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဖြစ်အထိခိုက်မခံနှင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောယောက်ျား။ သင်သူမ၏ကိုပဌနာမကြာခဏတူညီတဲ့အကြောင်းပြချက်။ ကြီးစွာသောအရာအကြောင်းမဖြစ်စေခၚမရှိဘဲမည်သည့်အကြောင်းပြချက်အဖြစ်ကောင်းစွာ။ သင်ဟာနည်းပါးလာရှိအခွင့်အလမ်းရှိသည်ဖို့တစ်ဉျ့ရောဂါ။ ရတဲ့၏အန္တရာယ်ကိုထိုကဲ့သို့သောရောဂါတစ်ခုအနည်းဆုံး တစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီး။ သူမအမည်မပြောင်းမိတ်ဖက်သုံးကြိမ်တစ်ပါတ်နှင့်လိင်ရှိသည်လိမ့်မည်မဟုတ်နှင့်အတူပထမဦးဆုံး ။ ပထမ၊သူမတီများအချိန်၊ဒုတိယအ၊ဒါကြောင့်အန္တရာယ်ရှိတဲ့။ အားလုံးပြီးနောက်၊သူမကတစ်ဦးခင်ပွန်းက။ သင်အလွယ်တကူချိုးဖျက်။ ဤဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်မပါဘဲနှစ်ဖက်အပြန်အလှန် နဲ့တိ၊ခင်ဗျားလိမ့်မည်ဘာမှမများဝေမျှဖို့၊ဒါကြောင့်သင်ရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်တဦးစကားပြောဆိုမှုအချိုးတက်။ အဓိကအရာသင်မှတ်မိသင့်ကြောင်းအကြောင်းသင်ပြုလိုအပ်ကြောင်းအတူတစ်သဘောမျိုး၏သိက္ခာနှင့်သပ်ပြီး၊ကျန်တစ်ဦးမှာ။…
အကြောင်းရင်းများရှိပါတယ်နှင့်ချစ်ရန် နှင့်ရက်စွဲကိုရီးယားမိန်းကလေး။ သို့သော်၊အတွက်အထောက်အချိန်၊ကျနော်တို့မှာကြည့်ရှုမည်အကြောင်းသိကောင်းစရာများဖို့ဘယ်လောက်အဘို့အရက်စွဲကိုရီးယားမိန်းကလေး။ ဤအကြံပြုချက်အချို့ဖြစ်ကြောင်းသက်ဆိုင်ဘုတ်ဖြတ်ဖြစ်ပါတယ်၊ပင်ဖို့လိုတဲ့အခါရက်စွဲအခြားအမျိုးသမီး။ သို့သော်၊သူတို့ထဲကအများစုဟာသက်ဆိုင်ကိုးရီးယားအမ်ိဳးသမီးမ်ားသာ။ အဘို့ရှာကြသည်လျှင်မေတ္တာအရှေ့ကနေ၊သင်သည်လက်ျာနေရာ၌ရှိကြ၏။ မချိန်းတွေ့စတင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးမှဆိုးလ်ကန်း။ သင်ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်အချို့ ကြောင်းသင်ကူညီလိမ့်မည်နေဖို့တွန်းလှန်ရန်အဆိုပါအမျိုးသမီး။ သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်အနောက်တိုင်းလူ၊သင်တို့အရပ်၏ပိုကောင်းတဲ့အခွင့်အပူကိုရီးယားမိန်းကလေး၊ထက်ပိုပြီးဒေသခံ။ စေဖို့သင်မည်သို့သွန်သင်ရက်စွဲကိုရီးယားမိန်းကလေး။ အပေါ်စောင့်ရှောက်အလိုက်-သင်အနိုင်ရနောက်ဆုံးမှာယားမိန်းကလေးများယူလိမ့်မည်ဟုမဆိုအခွင့်အလမ်းတွေကိုအကွဲအလွဲသွားပတ်ပတ်လည်အနောက်ကမ္ဘာ၌အကြောင်းကိုသူတို့လွယ်ကူသည်သကြားလုံးလူများအတွက်အနောက်တိုင်းအမျိုးသားများ။ ထို့ကြောင့်၊သူတို့သည်သင်ချွေးအနည်းငယ်တောင်မှသူတို့ကတော့တမ်းပေးရန်အတွက်တိုးတက်မှု။ သို့သော်၊မိန်းမတိုင်းပေးချင်ပါလူပြီးနောက်သူမအတွက်။ ထို့ကြောင့်၊သင်သေချာပါစေ။ ပင်အခါ၊သူမသည်ပြဇာတ်ရရန်ခဲယဉ်းရှိရာ၊သူမကနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ စောင့်ရှောက်ပြီးနောက်သူမအထိရတယ္။ ချိန်းတွေ့ဖို့ကိုဘယ်လိုကိုးရီးယားအမျိုးသမီးအဖို့သင်လိုအပ်ဘယ်လိုသိမှလိုက်မဆုတ်မနစ်သောအခါ၌ပင်သူမအဘယ်သူမျှမကပြောပါတယ်။ ကြကုန်အံ့နှင့်သူမ၏အမိဖုရား၊အနည်းဆုံးအဘို့ဤပြီးတာနဲ့သင်အဖြစ်လူအဘို့လုံလောက်တဲ့ဒီတခါကြကုန်၏ကိုရီးယားအဆိုတော်အမျိုးသမီးနှင့်အတူစိတ်ကူးများနှင့်ထင်မြင်ချက်များ။ ကိုယ့်အနောက်မှာ။ သင်တို့ကိုတွေ့မြင်၊ကိုးရီးယားင့္လက္တြဲလူ့အဖွဲ့အစည်းအများအားဖြင့်အဘယ်မှာရှိ”အမျိုးသမီးများမှာအများအားဖြင့်မြင်ဘူးကြား”။ ထို့ကြောင့်၊အမျိုးသမီးများစွာအိပ်မက်များမလွတ်ဒီအချိန်အများစုမှာ၊ဒါပေမဲ့သူတို့ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုလိုတယ်ထို့ကြောင့်လျှင်သင်ချိန်းတွေ့စတင်လာတဲ့အတွက်တောင်ကိုရီးယား၊သူမမြင်ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းတစ်ဦးအဖြစ်အခွင့်အဖို့အတွေ့အကြုံအသစ်တစ်ခုခု။ ကိုယ့်မေးသူမရဲ့အမြင်ကိုအတူအမှုအရာအဘယ်မှာရှိသူမလိုစားသောက်ရန်၊အဘယျသို့သူမထင်အမှုအရာပြီးတော့၊ဘာမှမပေးရန်အခွင့်အလမ်းဟောပြောဖို့သူ့စိတ်ထဲ။ သူမသင်ခစျြလိမျ့မညျကြောင်း။ အခ်ိဳ အဘယ်သူမျှမနေပါစေဘယ်မှာလူရက္မ်ား၊သူကြိုးစားရမယ် မိမိကိုမိမိနှင့်အတူယဉ်ကျေးမှုမှာတဦးတည်းအချိန်သို့မဟုတ်အခြား။ ဒါဟာအယုအမှန် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ။ ဥပမာအားဖြင့်၊သင်အမေရိကန်နှင့်သင်အသက်ရှင်သော၊သို့မဟုတ်အလုပ်မှာဆိုးလ်မြို့၊သင်ကသင့်မှာအနည်းဆုံးကြိုးစားဘာသာစကားသင်ယူခြင်း၊စားသောက်သူတို့၏အစားအစာနှင့်အတူဒိုင်ယာလော့ကိုရီးယား။ သင်ရွေးချယ်လိုလျှင်အ ကပ်တင္ဒါသို့မဟုတ်လက်ဝဲသာ၊သင်သည်တတ်နိုင်မည်မဟုတ်ပေအနိုင်ရမှသူမယုံကြည်။ ကင္မ္ခ်ီချစ်သူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပြသရန်သူတို့ကိုသင်ချစ်သူတို့၏သမီးသည်ကြိုးစားမှအချို့”အဖွဲ့အစည်း”။ ချိန်းတွေ့ရီးယားမှာင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္လွယ်ကူသည်၊ဒါပေမယ့်သင်နိုင်အောင်ပင်ပိုမိုလွယ်ကူသင်ယူခြင်းအားဖြင့်အကောက်ခွန်၊အများ၏မျှော်လင့်ချက်များအမျိုးသမီးများနှင့်သယ်ဖို့ဘယ်လိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုပတ်ပတ်လည်သူမ၏မိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများ။ ပေါ်အချို့သောပိုက်ဆံဖြုန်းသူမ-။ ဖီးလက်ချောင်းကွာစောင့်ရှောက်ဤအကြောင်းဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးယားမိန်းကလေးများဖြစ်ကြရတယ်၊ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်အာမခံနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်မည်သည့်အနှင့်ခသူမ၏နှင့်အတူသင်သည်မကျင့်လျှင်ပေါ်အချို့သောပိုက်ဆံဖြုန်း။ သောအမျိုးသမီးကိုမချစ်ပါဘူးတစ်ဦးယောက်ျားတစ်ယောက်အပေါ်။ ဟုတ်ကဲ့၊ချိန်းတွေ့ရီးယားမိန်းကလေးသင်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်အပေါ်အချို့သောပိုက်ဆံဖြုန်း။ အကြောင်းမေ့လျော့သွားဒတ်(ခွဲဥပဒေကြမ်းများ)နှင့်အတူသူမ၏အဘို့ဤအကြိမ်၊ဆပ်ကဲ့သို့အ လူကြီးလူကောင်း၊သင်။ ဆက်သွယ်ပြောဆိုထန်သည်အောင်မြင်ကိုးရီးယားအမျိုးသမီးချိန်းတွေ့၊သင်ဆက်သွယ်ဖို့။ အမျိုးသမီးများမှာအများအားဖြင့်လုံခြုံ၊ဒါပေမယ့်ကိုရီးယားအမျိုးသမီးများမှာပိုပြီးလုံခြုံသွားမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအားဖြင့်သူတို့အန္ခံသည္အဖြဲ။ ထို့ကြောင့်၊လျှင်သင်အရမ်းရှည်လွန်းယူမှပြန်ကြားချက်မှမိမိတို့အအီးမေးလ်များ၊စာသားမက်ဆေ့၊ ချက်တင်ပြီးတော့၊သူတို့လုံခြုံ။ အဖြေကိုချက်ချင်းပြန်။ ကိုးရီးယားအမျိုးသမီးကိုချစ်။ ထို့ကြောင့်၊၏နိုးနှင့်အတူကောင်းသောနံနက်မည္၊ကြကုန်၏သတင်းစကားဖြစ်ပြီးခဲ့သည့်တဦးတည်းဓာတ်ဝင်မှာ။ ကိုးရီးယားမိန်းကလေးချိန်းတွေ့အကြံဉာဏ်ဤဖြစ်ကောင်းပထမဦးဆုံးလာ။ သင်သည်ယနေ့အထိဘယ်တော့မှမသင့်ကိုရီးယားအမျိုးသမီးကန်းဤသည်ကားသင်တို့အလွဲချော်။ သင်သိရန်လိုအပ်သည်မိမိတို့အနည်းလမ်း။ ဥပမာအားဖြင့်၊သင်သိသောကိုရီးယားမိန်းကလေးများအသုံးပြုမှုကလေးမလေးနည်းလမ်းအရသူတို့ဘာလိုချင်မှအလူ။ ဒီအအတိအကျမတူညီသောအဖြစ်အပစ်အဝုန်း၊ဒါပေမယ့်နီးစပ်သည်။ အဘယ်မှာရှိသင်တို့၏ကိုးရီးယား။ အထင်ရှားဆုံးနေရာကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ကိုရီးယားအမျိုးသမီးရောက်နေတယ်ဆိုရင်နိုင်ငံခြားသားအပေါ်အ အင်တာနက်။ ကျေးဇူးတင်စရာ၊အများအပြားအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များတက်ကြွစွာယနေ့အချိန်တွင်၊သငျသညျပျက်စီးရကြလိမ့်မည်များအတွက်။ သို့သော်၊မမျိုးမျိုးရှိသမျှဆိုက်သည်ကောင်း၏။ ထို့ကြောင့်၊အသုံးပြုသူ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များဖတ်ပထမဦးဆုံးဒါကြောင့်သင်ရွေးချယ်အကောင်းဆုံးအရာေစနစ္ကသင်မြင်ရပါလိမ့်မယ်အမျိုးသမီးသည်အမှန်တကယ်ဖြစ်ကြောင်း။ ထို့အပြင်၊သင်လိုအပ်တက်လက်မှတ်ထိုးရန်အပေါ်တစ်ဦးအရာသင်တွေ့လိမ့်မည်အထောက်အကူဖြစ်စေချိန်းတွေ့ကိုးရီးယားအမျိုးသမီးအကြံပေးချက်များ။ တစ်ခုခုလုပ်သင်သည်သင်၏အသက်တာ၏ပထမဦးဆုံး-ကိုးရီးယားအမျိုးသမီးများရရှိပြီးသူတို့မုန်းရှုံးနိမ့်နေတယ်၊နေဆဲအသက်ရှင်နှင့်အတူသင့်ရဲ့မိဘများအတွက်နယူးယောက်ရှိသည်၊အဘယ်သူမျှမအလုပ်၊သို့သျောလညျးဒါပေမယ့်သင်သိရှိသမျှနောက်ဆုံးပေါ်အခန်းကဏ္ဍကို-ကစားဗီဒီယိုဂိမ်းဖြန့်ချိလိမ့်မည်ရက်စွဲ။ ကိုရီးယားမိန်းကလေးများဂုဏ်ယူ၊ပညာတတ်အများအပြားရွေးချယ်မှုများ၏လူတို့စဉ်းစား။ ညီအစ်ကို၊သင်ထွက်မတ်တပ်ရပ်၏လူအစုအဝေး။ သင်တွေ့ဆုံသည့်အခါကိုးရီးယားတစ်ဦးတစ်၊သူတို့အများဆုံးဖွယ်ရှိတောင်းသင်သည်အဘယ်သို့ပြုမီသူတို့ပင်တောင်း၏။ မ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖြစ်ခြင်းအနောက်ပိုင်းသည်အဆိုပါလက်မှတ်ကိုရီးယားအမျိုးသမီးရဲ့။ ဖြစ်တစ်ယောက်ယောက်က၊အိပ်မက်နှင့်ရည်မှန်းချက်များနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလိုက်။ ဖြစ်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းသင်ဘာလိုချင်လောက် ရီးယားမအနောက်ဘက်နိုင်မည့်ရက်စွဲနှင့်အတူအိပ်အမျိုးသမီးမရှိဘဲသင့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်။ ချိန်းတွေ့ယဉ်ကျေးမှုရီးယားမှာလိုအပ်သောသင်ပြောပြအမျိုးသမီးအဘယ်အရာကိုသင့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုကြိုတင်။ သင်၌စိတ်ဝင်စားရေရှည်ဆက်ဆံရေးအကြောင်းနိုင်ခဲသည်? သူမသိရန်လိုအပ်သည်၊ဒါကြောင့်သူမအဖေ၊မိခင္၊ပြီးအဖွားနှင့်မိသားစုခွေးလွန်း။ သင်ရုံရန်လိုရှိသည်ဖို့ကောင်းတဲ့အတွက်အချိန်ချိန်သင်တွင်နေထိုင်။ ဒါကြောင့်ပြော။ ဖြစ်တက်ရောက်-ကြည့်ကောင်းရှုကောင်း။ သင်မြင်ရပါလိမ့်မယ်အတွက်၊အများစုကိုအမျိုးသားတွေ၊ချောမောနှင့်ချုံ့။ ထို့ကြောင့်၊လျှင်သင်၏သားကြောင်းပြုမလွန်အကြော်ကြက်သားသို့မဟုတ်ကျန်းမာရေးဝက်အူချောင်းလွန်းမကြာခဏ၊သင်လိုအပ်နိုင်ပါသည်အထိအားကစားရုံကိုတလသို့မဟုတ်ဒီတော့ရေး၏ထင်နိုင်မီချိန်းတွေ့အတွက်တောင်ကိုရီးယား။ နိုင်ငံခြားသားအဖြစ်၊သင်ကောင်းတစ်ဦးအဖမ်းအတွက်အမျိုးသမီး။ အဖြစ်အချိန်မှာနိုင်ငံခြားထွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့၊မင်းကိုဖမ်းဖို့တစ်သက်တာ၏အဖြစ်ပြသပိတ်ဖို့အခြားမိန်းကလေးများ။ ဦးကြိုပြုခြင်းရှေ့မှာသင်တို့၏ကိုးရီးယားအမျိုးသမီး၊အဘယ်အရာကိုသူတို့မျှော်လင့်သောအမျိုးသားများသူတို့ ရက်စွဲ၊ပြီးတော့သူတို့ကိုအကြောင်းပို။ ပူနွေးဖြစ်၊သူမ၏ချစ်ခြင်းနှင့်သင်မြင်ရလိမ့်မည်ဘယ်လိုအမည်ပေးရပြန်အဆများစွာများပြားကျော်။ ဟေ့။ ငါပေတရုဝမ်၊ကိုတည်ထောင်သူ၏ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပန်။ ငါ့အိပ်မက်ကိုအဘို့အပြည့်အဝတစ်ကမ်ဘာ၏မေတ္တာနှင့်အချစ်ဇာတ်လမ်း။ ငါကိုရှာဖို့လူတွေကိုကူညီမေတ္တာကိုရှာတွေ့နှင့်တည်ဆောက်အံ့သြဖွယ်။ သင်အသုံးဝင်သောရှာတွေ့အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အကြံပေးချက်များနှင့်ရိုးသားချိန်းတွေ့ဆိုက်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များကိုဒီမှာ။ ရေးသားဖို့အခမဲ့ခံစားရရန်ကျွန်တော်တို့ကိုသင်သည်မည်သည့်မှတ်ချက်များရှိပါက။
အစားမျိုးဆက်သစ်ဖြစ်ပါသည်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုက်။ ဆန်းသစ်အွန်လိုင်းဗီဒီယိုချက်တင်ဖို့ခွင့်ပြုဖြည့်ဆည်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏မိန်းကလေးများချက်ချင်းကနေတဆင့်ကမ်။ ရိုးရှင်းနှင့်အသုံးဝင်သောအင်္ဂါရပ်များပေါင်းစပ်ဖန်တီးရန်အကောင်းဆုံးချက်တင်ပတ်ဝန်းကျင်၊ဘယ်မှာသင်တွေ့ဆုံနိုင်ပါမှန်မိန်းကလေး။ ကိုးရီးယားဗီဒီစနစ်ဟာချိန်းတွေ့အခ်ိတ္ဆက္ကာမ်က္ႏွာ မျက်နှာအဆက်အသွယ်နှင့်အတူမိန်းကလေးများမှာခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်။ ရိုးရှင်းစွာအစာနယ်ဇင်း’စ’ပြီးသင်ချက်ချင်းချိတ်ဆက်ထားမိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူသင်လည်းတွေ့ဆုံခဲ့သည်ဘယ်တော့မှမလုပ်ပါဘူး။ ငြီးငွေ့ရန်သောဆိုဒ်များများအားဖြင့်ယောက်ျားအပေါ်။ ကိုးရီးယားဗီဒီယိုချိန်းတွေ့အွန်လိုင်းဗီဒီယိုချက်တင်သင်ဆက်သွယ်အားနှင့်အတူသာ။ ရကူးပွဲတွင်တစ်နာရီ။ နှင့်တွေ့ဆုံထက်ပိုမိန်းကလေးများအတွက်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဝှက်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင့်ရဲ့ဝက်ဘ်ကမ်။ ကိုးရီးယားဗီဒီချိန်းတွေ့သည်အတူအသုံးပြုသူများကိုထောက်ပံ့ပေးလုံခြုံပြီးပျော်ရွှင်စရာနေရာမှခံစားကျပန်းဝဘ်စည်းအဝေး။
စိတ်ဝင်စားမိသင်တစ်ဦးကောင်းတဲ့ရှိခြင်းညစာ၊အချိုရည်၊နှင့်ရယ်မောနှင့်အတူကိုးရီးယားကောင်လေးဧည့္ခန္းကိုရီးယားမှာ။ သိကြပါသလားဘယ်လိုအဘယ်မှာကိုယ့်ဖြည့်ဆည်းနိုင်ထိုကဲ့သို့သောကောင်းတဲ့ကိုရီးယားကောင်လေး? သင့်ရဲ့အကြံပေးချက်ကိုအလွန်တန်ဖိုးထား၊ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ငါသေချာမဖြစ်ကြောင်းကိုဒါပေမယ့်အွန်လိုင်းရှိအက္ပ္ကိုဟုခေါ် ဖို့အသုံးပွုနိုငျပြောဆိုရန်ယားပါဘူး။ (အများအားဖြင့်ဘူးမ်ားကိုကအုံး)။ ငါဘာသာျပန္ခ်က္သုံးပြုမီနှင့်အဟုတ်၊ငါသေချာပါတယ်သင်မယ်ရ ၏။ သင်သည်လည်းကြိုးစားအသုံးပြု ဆွေးနွေးရန်သင့်မှာရှိနိုင်သည်ဘယ်မှာအုပ်စုချက်တင်နှင့်ခေါ်ဆိုမှု။ အဲဒီအပလီေကိုးရီးယားဒါပေမယ့်လူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ဖလားကျော်။ ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ကူညီပေးသင်မှာအနည်းဆုံးတစ်နည်းနည်း။ ကံကောင်းပါစေကိုယ်တော်သင်တစ်ဦးကောင်းတဲ့ရှိခြင်းညစာ၊အချိုရည်၊နှင့်ရယ်မောနှင့်အတူကိုးရီးယားကောင်လေးဧည့္ခန္းကိုရီးယားမှာ။ သိကြပါသလားဘယ်လိုအဘယ်မှာကိုယ့်နိုင် တွေ့ဆုံထိုကဲ့သို့သောကောင်းတဲ့ကိုရီးယားကောင်လေး? သင့်ရဲ့အကြံပေးချက်ကိုအလွန်တန်ဖိုးထား၊ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ သူကသာထင်နှင့်သူမ၏မိတ်ဆွေတစ်ဦးအဖြစ်၊ထိုရဟန်းသည်အခွင့်အရေးအမျိုးသမီးမိတ်ဆွေတွေ့ဆုံရန်သူတို့ကိုတောင်းဆိုနေတာမပါဘဲသင်တို့အဘို့အသင့်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ခပ်သိမ်းသောတစ်ခုတည်းအချိန်။ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္တီကယ့်ကိုသင့်ကိုချစ်တော့သူကမဟုတ်ဘူးတီပြုမိပါပြီဤမျှလောက်သင်တို့အဘို့ယခုတိုင်အောင်၊သူသည်ဖြစ်နိုင်မယ်လို့သင်ထားခဲ့အသက်အရွယ်။ ယောက်ျားတွေများသောအားဖြင့်ထားပါလွန်းနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းကဤအမှု၊နှင့်အကြောင်းဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ဖွင့်သူတီပင်နားလည်ဖို့မှားယွင်းနေသည်အဘယ်အတူသူ့ကိုယူတဲ့ဓာတ်ပုံနှင့်အတူအခြားမိန်းကလေးတစ်ဦး။ ရိုးသားဖို့ငါလည်းတွေ့ရယ်စရာဒါဟာသင်စဉ်းစားကို။ ခင်ဗျားကိုမင်းပူးတွဲ၊နှင့်ဆက်လက်လျှင်သင်ကဲ့သို့၊သူသည်နောက်ဆုံးတွင်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေရခြင်းသင်ထားခဲ့။ လူသားတစ်ဦးအဖြစ်၊သူသည်လိုအပ်လွတ်လပ်ခွင့်နှင့်သီးသန့်လုံခြုံရေး၊ပင်သူ၏ရည်းစား။ ကီအနေနဲ့အက္ပ္ကိုသင့္ဖုန္းအတြက္နှင့်သူတို့သည်သင့်ကိုပြောပြလူများနှင့်ပတ်သက်။ ယောက်ျားတွေများသောအားဖြင့်မြင်၏ပရိုဖိုင်နှင့်မက်ဆေ့ခ်ျကိုသင်ဒါမှမဟုတ်သင်မည္။ ဒါပေမယ့်အထဲမှာကိုရီးယားထိခိုက်မှုမရောက်သေး၊အကြမ်းဖက်မှုသို့မဟုတ်ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊နှောင့်ယှက်သို့မဟုတ်ကိုယ်ရေးအချက်ကျူးကျော်မှု၊ ဖို့ဖြစ်ပါတယ်သို့မဟုတ်ရှေ့၊လိမ်လည်မှုသို့မဟုတ် ၊ထိခိုက်မှုမရောက်သေး၊အကြမ်းဖက်မှုသို့မဟုတ်ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊နှောင့်ယှက်သို့မဟုတ်ကိုယ်ရေးအချက်ကျူးကျော်၊ဖို့ဖြစ်ပါတယ်သို့မဟုတ်ရှေ့၊လိမ်လည်မှုသို့မဟုတ် ၊ထိခိုက်မှုမရောက်သေး၊အကြမ်းဖက်မှုသို့မဟုတ်ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊နှောင့်ယှက်သို့မဟုတ်ကိုယ်ရေးအချက်ကျူးကျော်၊ဖို့ဖြစ်ပါတယ်သို့မဟုတ်ရှေ့၊လိမ်လည်မှုသို့မဟုတ် ၊
ကတည်းကတွေ့မြင်ခဲ့ဤမျှလောက်များစွာသောဗီဒီယိုများတာရှည်-အကွာအဝေးဆက်ဆံရေးကိုအစည်းအဝေးပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့နှင့်ငါထင်’၊ဤအကြည်ညိုဘွယ်ကောင်းသော။ ‘ငါလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်တ။ ငါ့ရည်းစားမှရီးယားၽကီပဲဖြည့်ဆည်းရန်ငါ့ကိုငါရိုးရိုးသားသားပြောနိုင်၊အဘယ်သူမျှမ အစဉ်အမြဲပြုသောအမှုကဲ့သို့သောမွှေးအရာအကြှနျုပျအဘို့အ။ ဒီကောင်လေးအံ့သြဖွယ်ဖြစ်ပါသည်၊နှင့်ခံစားရပါတယ်လုပ်နေတယ်။ လူအဖို့၌တာရှည်-အကွာအဝေးဆက်ဆံရေးကိုဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးပါ။ ငါသိရှိခြင်းထိုကဲ့သို့သောအကွာအဝေးအကြားနိုင်ပါတယ်တကယ့်ကိုခက်ခဲပါတယ်၊ဒါပေမယ့်ဒါဟာတကယ်ကိုတန်ဖိုးရှိသင်တွေ့ဆုံသည့်အခါအသီးအသီးအခြား။ ငါဟာအကြီးဆုံးမြို့၊ ကနေဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အတွက်ခရီးဝေးဆက်ဆံရေး။ လူတွေကများသောအားဖြင့်ပြောသောရှည်အကွာအဝေးဆက်ဆံရေးကိုအမဖြစ်နိုင်ဘူးကြောင့်သင်မမြင်နိုင်သီးအသီးအခြား၊ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်သဘောမတူ။ အကွာအဝေးရေးမကြီးပါဘူးအခါသင်အမှန်တကယ်အချင်းချင်းချစ်ကြ။ သည်းခံရှိပါကနှင့်ချစ်ခြင်းတွေကိုဒီလူတစ်ယောက်အတွက်၊တတ်နိုင်သမျှတစ်ဦးဆက်ဆံရေးရှိရန်။ လျှင်ပင်စောင့်ဆိုင်းနေသည်တကယ်ခက်ခဲနှင့်ငါ့ကိုယုံကြည်၊ငါမုန်းသောအကွာအဝေးအများကြီးအဖြစ်။။။။ တိုင်းအချိန်ကြသည့်အခါမှနှုတ်ဆက်ဖို့ငါ့အချစ်၊ဒါဟာစက်ဆုပ်ရွံရှာသောကြောင့်၊ငါတို့သည်သိမြင်လျှင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါတစ်ဦးချင်းစီကတခြားများအတွက်အလွန်အချိန်ကြာမြင့်စွာ။ ဒါဟာခက်ခဲတဲ့င်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကရနိုင်ပါသောကြောင့်ကျွန်တော်သိသော၊ကျနော်တို့အတက်အဆုံးသတ်မည်။ နှင့်အဆုံး၌၊ရှိမည်မဟုတ်ပြန်။
သေချာတာပေါ့၊အဲအဆိုးအစည်းအဝေးအမျိုးသမီးများအွန်လိုင်းသာ္လည္းလုပ်ရလွန်း။ ကိုယ့်ကြောင့်ထိုသို့ပြုမှသင့်အိမ်ရဲ့နှစ်သိမ့်ပါဘူးတဲ့တီဆိုလိုမည်မဟုတ်ကြောင်းကိုထည့်သွင်းအလုပ်အတွက်။ မသာကြောင်းသင်တို့မူကားပင်သိလုပ်နည်းအွန်လိုင်း။ သင်နှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ကိုရီးယားအမျိုးသမီးစိတ်ဖိစီးမှု-အခမဲ့။ ဤသည်နေ့ရက်ကာလသင်နှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံကိုးရီးယားအမျိုးသမီးကနေတဆင့်သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်း။ အဲဒီဟာအားလုံးပိုပြီးအဆင်ပြေသည်။ မသာကြောင်းသို့သော်သင်စိုးရိမ်ပူပန်ရန်မလိုအပ်ပါကြောင်းနာကျင်မှု၏ငြင်းပယ်။ သင်ကိဳတင္ေရြး။ ကိုးရီးယားနေသောအမျိုးသမီးအွန်လိုင်းရှာဖွေနေများအတွက်လည်းကောင်းနိုင်ငံခြားအတွေ့အကြုံသို့မဟုတ်ရည်းစား။ သူတို့လည်းအင်္ဂလိပ်စကားပြော(အရာသည်ကြီးစွာသောအပေါင်း)နှင့်အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်စေသို့မဟုတ်အဖြစ်လို၏။ လျှင်သင်အလုပ်မှာအမျိုးသမီးများကိုတွေ့ဆုံရန်အွန်လိုင်းကနေကိုရီးယား၊သင်မယ်လဒ်များကိုရ။ အားလုံးငါ့သူငယ်ချင်းတွေသူဖစ္ေစႏိုင္သည္။ အလုပ်လုပ်ကိုင်အပေါ်အမျိုးသမီးများကိုတွေ့ဆုံရန်မှအွန်လိုင်းရီးယားနိုင်ပါပြီရှာတွေ့ဖို့ရည်းစားသို့မဟုတ်တောင်မှကိုယ့်တညဉ့်ရပ်တည်ချက်(အများဆုံးဆသောအရာကိုအမျိုးသမီး။)ပဲရွိအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့စနစ်သင်တို့အဘို့အလုပ်ဖြစ်တယ်နှင့်သင်မယ်။ ငါ့ပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့လူကြိုက်အများဆုံးချိန်းတွေ့ဆိုက်ယားကင္ယာပေါ်တွင်နှိပ်ပါကချိတ်ဆက်။ သငျသညျအဘယ်သူမျှမစိတ်ကူးရှိသည်ဘယ်မှာ။ အချို့ကိုကိုရီးယားအမျိုးသမီးစေခြင်းငှါ၊သင့်ရဲ့အိမ်နီးနားချင်း။ အချို့သောဖြစ်စေခြင်းငှါအတွက်ကွဲပြားခြားနား။ သငျသညျအဘယ်သူမျှမစိတ်ကူးရှိပါကအဘယ်အရာကိုသူတို့ကဲ့သို့ကြည့်ရှု။ ငါ့သူငယ်ချင်းတွေသူဘာသာျပန္ခ်က္ဖို့ဘယ်လိုထွက်နေသေးဖြည့်ဆည်းမီးယားအွန်လိုင်းငါ့ကိုပြောပြကြောင်း၏အင်တာနက်မိန်းကလေးများအတွက်ပိုကြည့်ကောင်းသူတို့ရဲ့ပရိုဖိုင်ဓာတ်ပုံများထက်စစ်မှန်သောအသက်တာ၌။ သငျသညျအဘယ်သူမျှမစိတ်ကူးရှိပါကအဘယ်အရာကိုသူတို့တွေလိုပဲ။ ကုန်မဟုတ်တောင်မှဘယ်လိုအကြောင်းပြောဆို၏အချို့အမျိုးသမီးသင်မယ်အွန်လိုင်းတွေ့ဆုံရန်ရှိသည်။ သူတို့ပင်၏ဘာသာစကားကိုပြောဆို? မှတပါး၊သင်တီအရာကိုသိသူတို့ရဲ့မွာကဲ့သို့ဖြစ်၏၊ဖြစ်စေမသူတို့လူမှုရေး၊သို့မဟုတ်ပင်လိုက်တယ်။ ။ ဒါဟာအလုပ်တွေအများကြီး။ ကျွန်တော်အကြံပြုနားလည်လို့ရပြီအိမျကနေ၊တီဆိုလိုတာကလွယ်ကူမယ့်။ အသီးအသီး ကိုရီးယားအမျိုးသမီး(ပင်သူတို့အားသင်ရှာတွေ့ချင်ပါတယ်ဆွဲဆောင်မှု)ရှိသည်ပါဘူးစာတိုပေးပို့သူတို့ကိုနေ့စဉ်။ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်အဘယ်သို့သောသင်ထွက်မတ်တပ်ရပ်။ ဘာလဲအခွင့်အလမ်းရှိပါသလား? ဘာသိစတိုင်အမျိုးအစားအမျိုးသမီး။ ခပ်သိမ်းသောအမျိုးသမီးကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစား။ သိဘာအမျိုးအစားကိုရီးယားအမျိုးသမီး၊သင်ချင်သင်ကူညီလိမ့်မည်အဖြစ်ကြောင်းရေးသားပြီးကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်သင့်။ စကားပြော၏စံရကောင်းတစ်ဦးပရိုဖိုင်။ ကိုရီးယားအမျိုးသမီးများအတွက်အထွေထွေရပါတီဖတ်သင့်ပရိုဖိုင်း။ သူတို့ကကိုယ့်ပုံမှာကြည့်ပါ။ ဒီထက်ခြားနားသည်အနောက်ဘက်နိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာဟာသသတည်း။ ကိုရီးယားမှာ၊အသွင်အပြင်အများကြီးအရေးပါပါတယ်။ ချစ်လျှင်သင်အသုံးပြုဟာသကမျိုးသမီးကိုဆွဲဆောင်၊ဒီကောင်းတစ်ဦးအချိန်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကပြောပါတယ်ခံရကြောင်းသင်လည်းသိမ်းထားချင်။ အများဆုံးကိုရီးယားအမျိုးသမီးမရကြလိမ့်မည်သင့်ရဲ့ခေတ်မီဟာသကသို့မဟုတ်။ ကျွန်တော်အကြံပြုကြသောအခါဗမာရိုးရှင်းပြီးသင့်ရဲ့ဟာသနှင့်အတူတန်းတူအပေါ်မြူးဟာသက။ အများဆုံးကင္မ္ခ်ီချစ်ကြောင်းအမျိုးအစားဟာသက။ လေ့လာသင်ယူအချို့သောကိုးရီးယား။ အနည်းဆုံးဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူရေးအတွက်ကိုးရီးယား။ ကည့္ဗ်ာသင်သည်ထွက်မတ်တပ်ရပ်စေ(အများဆုံးယောက်ျားတွေသာပို့စ်အတွက်ဗမာ)နှင့်ကူညီပေးပါမည် သင်နှစ်ခုဆက်သွယ်။ ရထိပ်မှာ။ သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းသင့်ရဲ့စံပြကိုရီးယားအမျိုးသမီးကိုရှာဖွေသင်အွန်လိုင်းအားဖြင့်ဖြစ်ခြင်းရဲ့ထိပ်ပိုင်းမှာရှာဖွေရေးရလဒ်များကို။ သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အများအတွက်ပေးဆောင်ကြောင်းဆုကြေးငွေသို့မဟုတ်ရိုးရိုးလော့ဂ်တိုင်းနာရီသို့မဟုတ်ဒီတော့။ သင့်ကြောင်းထည့်သွင်းသင်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းမှာရှာဖွေရေးရလဒ်များကို။ သင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်ပါနှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံမှသူတို့ကိုသင့်ရဲ့အိမ်ရဲ့နှစ်သိမ့်။ ပေါ်ပိုပြီးအဘို့အကြှနျုပျအတွေ့အကြုံနှင့်အတူဒါကြောင့်ပေါ်တွင်နှိပ်ပါ။ သူသိတယ်။ သင်ရှာတွေ့စေခြင်းငှါ၊သင့်ရဲ့အနာဂတ်ရည်းစားသို့မဟုတ်ဇနီး။ ကောင်းတစ်ဦးသတ္တုတွင်း၏မိတ်ဆွေကိုပြုနှင့်သင်ရုံစေခြင်းငှါအဖြစ်ကိုကောင်းစွာ။
ချိန်းတွေ့နိုင် ခက်ခဲဖြစ်လိမ့်မည်။ အစည်းအဝေး၏မျှော်လင့်ချက်များသင့်ရဲ့သိသာထင်ရှားတဲ့အခြားမဟုတ်စေခြင်းငှါအစဉ်အမြဲလွယ်ကူသည်။ ဒါပေမယ့်ထည့်ကြောင်း၏ထိပ်တွင်ယဉ်ကျေးမှုကွဲပြားမှုများနှင့်သင်တယ်တစ်ဖွဲ့လုံးသစ်ကိုပန်၏။ ပေါ်မှာဖတ်ကြည့်ဖို့ဘာကိုမျှော်လင့်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်အတွက်ရက်စွဲရီးယား။ အစည်းအဝေးတစ်ဦးတစ်မည်သည့်တိုင်းပြည်အတွက်ဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်ညစ်စရာအလုပ်တခုကို။ အဘယ်ကြောင့်ရီးယားမှာအများဆုံးကင္ယာရဲ့အလုပ်မှတဆင့်ပြု။ အစားချန်သောအရာတို့ကိုဖွင့်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွင်တွေ့ဆုံ(ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်အတွက်လူသတ်စိမ်း)၊ကင္မ္ခ်ီကြိုက်တတ်တဲ့အလားအလာအိမ်ထောင်ဖက်ရှိသည်ဖို့ရည်ညွှန်းဖို့သေချာအောင်နှစ်ခုလုံးသင်၏ဖြစ်ရလိမ့်မည်(အချို့ဒီဂရီမှ)တစ်ကိုက်။ ရှိခြင်းသောမိတ်ဆွေတစ်ဦးအဖြစ်ခံလိမ့်မည်သေချာအောင်၊သူကသူမဟုတ်ဘူးအချို့အရူးအမူးကလာလိမ့်မယ်ပေါ်သင့်ရဲ့တံခါးမှာပါ။ မျက်စိကန်းရက်စွဲများရီးယားမှာအလွန်အမင်းဘုံနှင့်အသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းတွေကလူနှင့်တွေ့ဆုံရန်အတွက်အတော်လေး’ဘေးကင်းလုံခြုံ’။ မှတ်ချက်:၏သင်တန်း၊ဒီသာလမ်းအတွက်တတွေ့ဆုံရန်အလားအလာလေးတိုက္သနှင့် ။ လူတွေ့ဆုံရန်မှာကျောင်း၊အလုပ်၊ကျပန်းရင်ဆိုင်အပေါ်အလမ်းများ၊စသည်တို့ကို။ သို့သော်အထိုင်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်အများဆုံးကြိုက်နှစ်သက် နည်းလမ်းတွေဖြည့်ဆည်းဖို့အခြားတစ်။ အဲဒီမှာနေတဲ့အပင်အနည်းငယ်အခြား”အမျိုး”၏မျက်စိကန်းရက်စွဲများ၊ဒါပေမယ့်သူတို့အားအထူးသဖြင့်ကွဲပြားခြားနားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်:-အုပ်စုတစုရက်စွဲကန်း၊အများအားဖြင့်လူငယ်များအတွက်ကောလိပ်ကျောင်းသား။ အုပ်စုတစ်စုကောင်လေး၏မိတ်ဆွေများနှင့်တွေ့ဆုံရန်လိမ့်မည်အုပ်စုတစ်စု၏ရည်းစားအလှန်နှင့်ကောင်းတစ်အချိန်ရှိသည်။ တစ်ဦးကမျက်မမြင်နေ့စွဲစီစဉ်ခြင်းအားဖြင့်မိဘများ။။။။ ဤသည်အလွန်အလေးအနက်နေ့စွဲ၊နေရာနှစ်ဖက်စလုံးများ၏မျှော်လင့်ချက်များအိမ်ထောင်ချိန်မှာအစအဦးမှ(အပါအဝင်အထူးသဖြင့်မိဘများ)။ အကြားချစ်ခင်စုံမက်၏ကိုရီးယားမှာမဟုတ်ပါဘူးအဖြစ်ဖွင့်လှစ်ဖြစ်မည်အတွက်ကမ္ဘာ၏အခြားဒေသများတွင်။ ပေမယ့်အငယ်မျိုးဆက်ရဲ့အစိတ်ရတယ်အပြောင်းအလဲတစ်ခု၊အများအပြားအတွက်တဆဲမဖွင့်ဖို့အတွက်နမ်း။ ရိုးရှင်း စေခြင်းငှါခံအချို့၊သို့သော်အများစုမှာအတွက်တဖို့ငြင်းဆန်လိမ့်မည်၌အများပြည်သူပါဝင်၏တဦးတည်းအတွက်အဲဒီရုပ်ရှင်-စတိုင်ပွင့်လင်းနှုတ်ကိုနမ်း။ ပင်ကဲ့သို့ရိုးရှင်းတစ်ခုခုတစ်မျိုးသိသာအခြားသူများကိုစေခြင်းငှါ၊အနည်းငယ်ပိုပြီးအဆင်မပြေထက်အဘယ်အရာကိုသင်ဖို့အသုံးပြုနေတာပါ။ သင်ရှိစေခြင်းငှါပြောကြားချမ်းတုန်မှထွက်နေတယ်ဆိုရင်ခံရလွန်း အပေါ်ဆိုးလ်ရထား။ လက်ကိုကိုင်နှင့်ဆက်သွယ်ထားသောလက်နက်၊သို့သော်၊အတော်လေးဘုံ။ ဆိုရင်ထွက်ဆွဲထားနှင့်အတူဘူးမ်ား၊သင်ချင်စေခြင်းငှါခွဲဥပဒေကြမ်းကိုရီးယား။ ဒါကသည့်အခါလူတစ်ဦးပေးဆောင်အတွက်ဥပဒေကြမ်းနှင့်အခြားသူများအတွက်ပေးဆောင်လိမ့်မည်လာမည့်ပတ်လည်။ တချို့ခေတ်ပြိုင်ကင္မ္ခ်ီချင်ခွဲထွက်ဖို့ဥပဒေကြမ်းအမျှ၊အေးလျှင်သင်သည်အဆွေခင်ပွန်းအပေါင်းတို့နှင့်။ ဒါပေမယ့်အကယ်၍သင်ချိန်းတွေ့အတွက်ကိုရီးယား၊အဲလိုမျိုးကြီးမားတဲ့မွန်းတည့်မယ့်(ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရာဆက်စပ်အကြောင်းရှုပ်ထွေးတဲ့အယူအဆ၏ဂျုံ)။ သွားသည့်အခါတစ်ဦးစားသောက်ဆိုင်၊ကဖေးများ၊ရုပ်ရှင်ရုံများ၊သို့မဟုတ်ရေခဲမုန့်ဆိုင်မှာ၊ဘုံအလေ့အကျင့်အဘို့အဆပ်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအသီးသီးမှာသူတို့အားလုံးကိုရပ်တန့်။ ယခု၊ဆက်စပ်အဘို့အဘယ်သို့တက်ဖြစ်ဖို့ငြင်းလုံးကိုစုံတွဲများအတွက်ပတ်ပတ်လည်ရီးယား။ အချို့အဟောင်းကကျောင်းယား အရာအားလုံးကိုများအတွက်ပေးဆောင်၊ဒါပေမယ့်မကြာသေးမီက၊အများအပြားကိုရီးယားအမျိုးသမီးပူဇော်သက္ကာပြီသူတို့ရဲ့ရှယ်ယာ၊လွန်း။ ဒါကြောင့်၊ဒါကြောင့်အမှန်တကယ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအပေါ်မူတည်။ စုံတွဲယဉ်ကျေးမှု၌ကြီးမားသောကိုရီးယား၊ပြီးလျှင်ခင်ဗျားဒီမှာအတူကိုးရီးယား ၊သင်ရှိသည်လိမ့်မယ်အခွင့်အလမ်းခံစားဖို့အားလုံးအခွင့်အရေး၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ခြင်းများအတွက်စုံတွဲတစ်တွဲ။ အကျယ်စိတ်ပျက် အထီးကျန်တစ်ခုတည်းလူများအတွက်ကိုရီးယား၊စုံတွဲရှပ်များမှာအပေါင်းတို့သည်အမျက်ဒေါသနှင့်အလွန်မြင်နိုင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုငျသှား။ ဒါဟာတစ်ဦးရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြေငြာဖို့အဆို”ဟာ”(အပြင်:)။ ရစေခြင်းငှါ၊စုံတွဲတစ်တွဲလက်စွပ်များ၏နှစ်ပတ်လည်နေ့(အောက်တွင်ကြည့်ပါ)၊သို့ကြေညာ၏မေတ္တာအတွက်လက်စွပ်။ ခံရစုံတွဲတစ်တွဲလုပ်နိုင်အများပြည်သူကိစ္စ။ သူကပြောပါတယ်နဲ့အတူ၊အလွန်အမင်းမြင်နိုင်၏ဘေးထွက်တွင်ချိန်းတွေ့ရီးယား။ လူအတော်များများရှိပါတယ်ရီးယားမှာမဟုတ်ကြောင်းပရိတ်သတ်များကျော်-ကို-မောင်-က်ာ္လြန္ရနှင့်ငြင်းရစုံတွဲရှပ်အင်္ကျီနှင့်အကွင်း။ အကယ်စင်စစ်၊ကအနည်းငယ်လွန်းအများကြီးအတွက်တချို့လည်းဤမးရီးယားအကြောင်းကိုအဘယ်ကြောင့်အတွက်တတ္စုံတွဲရှပ်အင်္ကျီ။ လူများကမ္ဘာအဝှမ်းကျင်းပနှစ်စဉ်နှစ်ပတ်လည်အမှန်တကယ်ပတ္ကြင္း- စုံတွဲများကျင်းပလစဉ်နှစ်ပတ်လည်နှင့် စွဲဆယ်ကျော်သက်ကျင်းပပင်ပိုပြီးမကြာခဏ။ ဒါပေမယ့်ကိုရီးယားမှာ၊ဒါကြောင့်အနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသော။ ၏သင်တန်း၊ကြီးမားသောတိုင်နှစ်စဉ်ကျင်းပခဲ့ကြသည်ပဲအတူတူပါပဲ။ ဒါပေမဲ့အဲဒီအစားကိုရေလ၊ကိုရီးယားမျှအပတ္ကြင္း- စုံတွဲများ အောင်ပွဲခံကြောင်းလစဉ်လိမ့်မည်စားပွဲသမိုင်းမှာဂိုဏ်းဂဏ၏ရက်ပေါင်း(။ င)။ ဒါဟာပိုပြီးအသုံးများပြီးပိုပြီးချစ်ခင်မောင်နွဲဖို့ဒီဘက်ပါ၊ဒါကြောင့်လူတိုင်းကမှဂရုတစိုက်။ ဒါပေမဲ့ဒီကျိန်းသေကိုရီးယားလမ်းနွှဲရန်မေတ္တာ၌ဖြစ်ခြင်း။ မှတ်ချက်:သင်ခင်ဆီကထွက်သင့်ရဲ့ပြက္ခဒိန်မှစတင်ရေတွက်နေ့တိုင်းပဲသုံးနေ့ဂဏန်းပေါ်ဘယ်တော့မှ။ ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော၊အများဆုံးယောက်ျားများမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခွန်အားထက်သူတို့ရဲ့ရည်းစား၊နှင့်အမျိုးသမီးများစွာရှိသည်ကြီးမားတဲ့အိတ်အပြည့်အဝစား”။”ကိုရီးယားမှာ၊ဤယေဘုယျအမှန်တရားဖြစ်ကြောင်းတစ္ပုဒ္ေ။ အခါအတူထွက်ဆွဲထားရည်းစား၊အများအပြားကိုရီးယားအမျိုးသားပူဇော်ကျင်းပရန်သူတို့၏ရည်းစားရဲ့ကြီးမားတဲ့အိတ်အပြည့်အဝ၏နက်နဲသောကယ်ဖို့နာကျင်ပခုံးကိုပတ်ပတ်လည်။ အဘယ်သူမျှမစိုးရိမ်မှုရှာဖွေနေ၏ထူးဆန်းသည့်အခါကိုင်တစ်အိတ်နှင့်အတူပန်းရောင်နှင့်သိပ္လည္းရီးယားမှာ၊ဒါကြောင့်အလေ့အကျင့်ဖို့အမျိုးသားများအဘို့အကိုင်အ ၏အိတ်။ သင်ကကောင်လေးဆိုရင်၊အားလုံးသူတို့အားဆင့်-လေ့ကျင့်ခန်းကိုသင်ပြုသည့်အခါသင်ခဲ့ကြသည်တစ်ခုတည်းစေခြင်းငှါနေရာလေးကိုအတွက်လာ။ မ တူဘာမှမရှိဘူးဘက္နာညဉ့်အလွရဲ့နှစ်သိမ့်အတွက်အသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အိပ်။ ဒါေပမယ့္ခင္ဗ်ားဟာကိုရီးယားမှာ၊သင်တစ်ဦးရှိသည်စေခြင်းငှါ၊လမ်းနည်းပါးဘက္နာအစည်းအဝေးထက်သင်ဖို့အသုံးပြုနေတာပါအဖြစ်၊ဒါကြောင့်ပိုပြီးအသုံးများအတွက်လက်မထပ်ဖို့လူတွေကိုတိုက်ရိုက်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏မိဘများ။ လျှင်ပင်သင့်မိဘတွေလုံးဝလစ်ဘရယ်နှင့်အတူတပြင်လုံးကိုစိတ်ကူးသူတို့ရဲ့ကလေးတွေရှိခြင်းဆက်ဆံရေးအတွက်အခန်းတံခါးကိုလာမယ့်၊၏ကျယ်ပြန့်အများစုကိုးရီးယားမိဘကြသည်မဟုတ်အေးမြနှင့်အတူ။ ဟုတ်ပါတယ်၊အများအပြားတစ်ခုတည်းအတွက်လူရီးယားတာ္၊လွန်း၊ထိုအခါအထိတစ်ဦးချင်းစီ။ ဒါပေမယ့်နေထိုင်နေသည့်အခါနှင့်အတူမိဘများအလာစိတ်အပိုင်းအဖြစ်အထုပ်များ၊ဒါကြောင့်အပြောင်းအလဲမှုအရာတွေအများကြီးဖွင့်။ သင်တို့ကဲ့သို့ထင်လှီခဲ့ကြပြီအခါသင်ကောလိပ်မှချွတ်။ ဒါပေမယ့်ကိုရီးယား၊လှီနေဆဲအတော်လေးဘုံသူတို့အဘို့အအသက်ရှင်သေးနှင့်အတူမေမေနဲ့ဖေဖေ။ ပေမဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်မယ်လို့ပြောဖို့ဤမျှအမှန်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့အဘို့၊ကံမကောင်းကြောင့်ပိုပြီးအသုံးများအတွက်အမျိုးသမီးရှိသည်ဖို့ဖေဖေ-ချမှတ်လှီထက်ကအမျိုးသားများအဘို့အ။ အသက်အရွယ်နှင့်အလုပ်အကိုင်အဆင့်အတန်းမနှင်နောက်ခံအရောင်သက်”ဖြစ်ကြာမြင့်စွာနေထိုင်ဒီအိမ္”အငြင်းအခုံ၊တခါတရံရလဒ်အတွက်အမျိုးသမီး၏အဓိကသည်မိမိတို့ချိန်းတွေ့ဘဝအသက်တာနှင့်အတူလှီမီသန်းခေါင်။ ကိုပြချိန်တက်သွားဖို့လိုအပ်မူလစာမျက်နှာ။ အချို့အကောင်းဆုံးရက်စွဲများအရပ်ကိုယူနိုင်ပါသည်။ သင်သိသည်အမျိုးအစား:ဖယောင်း၊စပျစ်ရည်၊နှင့် ။ ဒါပေမယ့်ကိုရီးယားမှာကတည်းက၊ဒါကြောင့်လူအတော်များများနှင့်အတူအသက်ရှင်စပ်စုပြီးစပ်စုမိဘမ်ား၊အများအပြားအတွက်တကြိုက်ဆွဲထားဖို့အပြင်ဘက်အဝေးကနေသူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်။ ဒါကြောင့်၊အဆိုပါ၏အများစုမှာစုံတွဲများအချိန်ဖြုန်းလိမ့်မည်အတူအသီးအသီးအခြားနေသောအိမ်အပြင်ဘက်တွင်။ ဆိုလိုသည်ထွက်မသွားဖို့အချို့ဆိုးလ်မြို့ရဲ့ထူးခြားလှတဲ့အဓိကတင္မည္ဒါမှမဟုတ်ပင်အတွေ့အချို့အကောင်းကိုးရီးယားမှာပုန်းဈေးကွက်ပတ်ပတ်လည်။ အသံမပါဘူးအရမ်းဆိုးပါဘူး။ သငျသညျဆိုပါကချိန်းတွေ့ခြင်း၌ပျော်မွေ့နှင့်အမှတ်မထင်ပဲရှိခြင်းကောင်းတစ်ဦးအချိန်၊မိဘများဖြစ်နိုင်မည်သို့မလာထားခ်င္ပါတယ္။ ဒါပေမယ့်အလျှင်အမှုအရာကိုအစဉ်အဆက်ကယ့်ကိုအလေးအနက်နှင့်အတူသင့်ရဲ့ရည်းစားသို့မဟုတ်ရည်းစား၊သငျသညျရှိစေခြင်းငှါအကြောင်းပြောနေတာ။ နှင့်မှကြွလာသောအခါကိုးရီးယားလက်ထပ်ထိမ်းမြား၊မိဘများသောအားဖြင့်နောက်ဆုံးအဆင့်ပြောဆိုသည်။ လျှင်အသင်းဖႏွင့္သင့်ကိုမကြိုက်ကြဘူး၊ အများဆုံးဖွယ်ရှိ၏အဆုံးကိုဆိုလိုသည်သင့်ရဲ့ကိုးရီးယားအချစ်ကိစ္စဖြစ်အများအပြားအတွက်တရှာတွေ့ရန်အလွန်ခက်ခဲသွားဆန့်ကျင်သူတို့၏မိဘများ၊အထူးသဖြင့်မှကြွလာသောအခါ။ ဒါဟာယူတာပဲ၊ဒါပေမယ့်ဘယ်အရာကိုအမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုသယ်ဆောင်သူတစ်ဦးကိုး-ဝက်ပေါင်ခြောက်ပေါင်အတွက်သူမ၏အစာအိမ်အတွက်ပိုကောင်းအစိတ်အပိုင်း၏အနှစ်။ သင်အနိုင်ရ ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေကအကြောက်သောမိဘများသွင်းထားစေခြင်းငှါသူတို့နွေရာသီအချစ်ဇာတ်လမ်းအကျန်၊မဘုံမိတ်ဆက်ဖို့မိသားစုဝင်များအားအသစ်တစ်ခုကိုရည်းစားသို့မဟုတ်ရည်းစား။ ဒါကအများအားဖြင့်မူပိုင်ခွင့်များအတွက်အခါသင်သိတစ်ဦးဆက်ဆံရေးအစြဲမ်ား။ ဒါပေမယ့်ကိုရီးယားမှာ၊သင်ဖြစ်စေခြင်းငှါ၊မိတ်ဆက်မှမိတ်ဆွေများဖြစ်စေ။ ပေမယ့်အများအပြားအတွက်တလိုလုံးဝလြတ္လပ္တဲ့လူတိုင်းသည်၊သူကသူမသိတော်မူ၏၊တချို့လူတွေအတွက်ရီးယားတွေကိုတွေ့မြင်ချင်ကြပါဘူးဂျော့ခ်ျ ရဲ့”ကမ္ဘာကြီးရဲ့တိုက်မိ”သီအိုရီတွေကိုဟုတ်မှန်လာ။ ဒါကြောင့်ဖြစ်စေခြင်းငှါ၊အအေးမှထွက်ဆွဲထားနှင့်အတူသင့်ရဲ့အပြန်အလှန်သူငယ်ချင်းကနေဓါတ်ပုံ။ သင်မူကား၊မပြုစေခြင်းငှါအစဉ်အဆက်သင်၏သိသာ၏အခြားကောလိပ်ရင်း။ ကျနော်တို့ချင်ပါဘူးဒီလောကရဲ့ပေါက်ကွဲမှုခု၊အကြှနျုပျတို့ပွုပါ။
မာက္ကိုးရီးယားရဲ့အကောင်းဆုံးအခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်။ အခမဲ့အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အတွက်ယားတစ်ဦးတစ်မှာရောနှော။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြော်ငြာများနှင့်ပြည့်လျက်ရှိ၏တစ်ခုတည်းအမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားများကိုရီးယားမှာလိုက်ရှာများအတွက်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး၊အနည်းငယ်အွန်လိုင်း ၊သို့မဟုတ်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်ထွက်သွားနှင့်အတူ။ စတင်စည်းအဝေးတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုရီးယားမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှင့်အတူအခမဲ့အွန်လိုင်းဦးခ်င္းနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်ရီးယားစကားပြော။ ရီးယား၏အပြည့်အဝတစ်ခုတည်းအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးကဲ့သို့သင်တို့အဘို့အရှာဖွေနေရက္မ်ား၊မိတ်ဆွေတို့ကို၊အခင်မင်၊နှင့်ပျော်စရာ။ သူတို့ကိုရှာဖွေတာကလွယ်ကူပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှင့်အတူလုံးဝအခမဲ့ယားချိန်းတွေ့ဝန်ဆောင်မှု။ ဒီနေ့ဖွင့်မှတ်ပုံတင်ကြည့်ရှုရန်အခမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြော်ငြာများအတွက်ရရှိနိုင် ႏွစ္နှင့်တက်ချိတ်အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးပြုခြင်းလုံးဝအခမဲ့ယားအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဝန်ဆောင်မှု။ ချိန်းတွေ့စတင်ရီးယားမှာဒီနေ့။
ချိန်းတွေ့မျိုးသမီးများ၏အပြင်ဘက်သင့်ရဲ့အပြေးပြိုင်ပွဲအစဉ်အမြဲပြုပါရန်လွယ်ကူသောအရာ။ အမှန်မှာအများစုကိုအမျိုးသားတွေတစ်ဦးဧရိယာတွင်နေထိုင်သူတို့အများစုနေထိုင်ပြီးဝိုင်းအားဖြင့်အမျိုးသမီးများ၏သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အပြေးပြိုင်ပွဲ။ သင်ဘယ်မှာနေထိုင်ပေါ်မူတည်၊ပင်ရှာဖွေခြင်းတစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုယားမိန်းကလေးများအတွက်အသင့်ရဲ့နေ့လှုပ်ရှားမှုများအတန်ငယ်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်နိုင်။ မဆိုလိုပါဘူးသင်ရှာမတွေ့နိုင်တစ်ပျော်စရာ၊နယူးရီးယားမိန်းကလေးမှရက်စွဲနှင့်ပုံစံနှင့်အတူတစ်ဦးဆက်ဆံရေးသော်လည်း။ အရာကိုဆိုလိုကြောင်းသင်ရှိသည်ဖို့တာပေါ့၌ထားရန်အပိုအလုပ်၏နည်းနည်းရှာဖွေဖို့ကိုရီးယားမိန်းကလေးရဲ့အိပ်မက်။ ကိုရီးယားကုန်စုံစတိုးဆိုင်စေခြင်းငှါအနည်းငယ်၏သက်သာဇုန်ထဲကထွက်သင့်အဖြစ်ချက်ပြုတ်။ သင်ဖြစ်နိုင်မဟုတ်တီလည်းအကျွမ်းတဝင်နှင့်အတူကိုရီးယားအစားအစာအများစုနဲ့တူတယ်ဆိုရင်ပါဘူး။ တကယ်တော့၊ စေခြင်းငှါမကိုဘယ်လိုသိရန်ပင်ပြုတ်ရေအိုးတလုံး။ ရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင်သင်လုပ်နေတာအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ကိုရီးယားမိန်းကလေးများသော်လည်း၊သင်ချင်ပါတယ်အဖြစ်ခက်ခဲ-ဖိအားနေရာတစ်နေရာရှာတွေ့ဖို့ရှိပါတယ်ပိုပြီးတစ်စတုရန်းပေလျှင်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့၊လူတိုင်းဝင်ကုန်စုံစျေးဝယ်ခြင်း၊သမ္မာ။ တွေ့အထပ္မွာကိုရီးယားကုန်စုံစတိုးဆိုင်သင်အနီးတွင်စတင်အကျင့်ကိုကျင့်အနည်းငယ်သင့်ရဲ့စျေးဝယ်ရှိပါတယ်။ တစ်ဦးစွန့်စားစား-ပင်လျှင်ကပ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားအစားအစာကြောင့်သင်ချက်ပြုတ်မနိုင်-သင်ဖြစ်နိုင်အချို့တော်တော်စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေဖို့ကြိုးစားပါ။ သင်ကံကောင်းနေလျှင်၊သင်ရန်ဝင်တိုးအပူကိုရီးယားမိန်းကလေးနိုင်သူသင်ပြကြောင်းအရာတစုံတခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုကိုရီးယားအိမ်မှာချက်ပြုတ်။ အသက်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲကိုရီးယားမိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားတွေရှိသည်သောသူတူညီသောပန်းတိုင်အတွက်။ အဆိုပါအမှန်တရားဖြစ်တယ်ဆိုတာအစည်းအဝေးတွင်ကိုရီးယားကုန်စုံဆိုင်တစ်ဖွဲ့လုံးတွင်အိမ်ရှင်နှင့်အခြားတည်နေရာဖြစ်နိုင်၊ဒါပေမယ့်လုပ်နေတယ်အွန်လိုင်းကတစ်ဖွဲ့လုံးတွေအများကြီးပိုမိုလွယ်ကူ။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျနော်တို့ပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်အားလုံးအကောင်းဆုံးဆိုဒ်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ကိုရီးယားမိန်းကလေးနှင့်သူတို့ခဲ့ကြပြီကိုအကောင်းဆုံးတစ်ဦးအနေဖြင့်အဘို့။ အခါသင်အဘို့အတက်လက်မှတ်ထိုး အသက်(သငျသညျအထဲကစစျဆေးနိုငျသူတို့ရဲ့အခမဲ့အစမ်းဒီမှာ)၊သင်ကချက်ချင်းချိတ်ဆက်ထားနှင့်အတူအမျိုးသမီးများအတွက်ရှာနေကြသူယောက်ျားတွေ။ သူတို့လည်းအကြောင်းသိနေတဲ့အတွက်စျေးကွက်အတွက်နေသောအမျိုးသမီးပျော်ရွှင်စွာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်-အဖြစ်ဖော်ပြထားယားမိန်းကလေးများနှင့် ။ အစည်းအဝေးၡမ်ားကိုရီးယားမိန်းကလေးများအမှန်တကယ်အသက်တာ၌ကျိန်းသေဖြစ်နိုင်ပေမယ့်သုံး ဘဝလိမ့်မည်ကျိန်းသေတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်သင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်း။ ရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင်ကိုးရီးယားမိန်းကလေးများချိန်းတွေ့၊ကသာရပ်တည်ဖို့အကြောင်းပြချက်သင့်ကြောင်းထွက်ရှာရန်အချို့သောအရင်းသားအစားအစာ။ အမျိုးသားများအကြောင်းကြပါဘူးချက်ပြုတ်ကြီးမည်မဟုတ်ပါပျော်မွေ့ရိုက်ကိုရီးယားကုန်စုံဆိုင်သော်လည်း။ စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုစံပြနေရာမျိုးသမီးများကိုတွေ့ဆုံရန်အထူးသဖြင့်လျှင်၊သူတို့ကတစ်ဧရှိရာအလေ့အဆုိးမီနှင့်ပြီးနောက်၎င်းတို့အစားအစာ။ အခါသင်တို့အဘို့အရှာနေကိုရီးယားမိန်းကလေးများ၊ကြိုးစားကြည့်ဖို့အတွက်ရန္ကုန္လိုစားသောက်ဆိုင်နှင့်အတူအနည်းငယ်အဟောင်းတွေလူအစုအဝေး။ အမျိုးသမီးအဘို့အရှာဖွေနေပါတယ်လိမ့်မည်မဟုတ်မှာအားလပ္ရက္ေပူပြင်းတဲ့အစက်အပြောက်။ ရင္၊သူမဖြစ်ကောင်းရှိပါတယ်နှင့်အတူမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတစ်စုသို့မဟုတ်အခြားယောက်ျားတစ်ယောက်နှင့်မိန်းမမဖြစ်စေခြင်းငှါအတွက်စိတ်ဝင်စား စကားပြောသင်တက်။ ဟိုတယ်အရက်ဆိုင်များမှာအရပ်အမျိုးသမီးများ၏ဂုဏ်ထူးနှင့်အတူသူတို့ငွေအလုံအလောက်မှခရီးသွားလာလေ့ထွက်ဆွဲထား။ ရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင်၊မယ့်အခွင့်ကောင်းရှိတယ်သင်ပိုကောင်းဒီနေရာမှာထက်တစ်ဘားမှာဆွဲဆောင်ငယ်၊ပုံစံတစ်မျိုးအစားများ။ ရှာဖွေနေရတဲ့အခါ၊ကိုးရီးယားအမျိုးသမီးချိန်းတွေ့ဖို့ကြိုးစားဟိုတယ်၌ကျင်ဒေသများရှိလေ့ရှိသည်ဖို့အများစုနေထိုင်ကိုးရီးယားလူအစုအဝေး။ လျှင်သင်အသက်ရှင်အတွက်ကြီးမားတဲ့မြို့အတူလော့စ်အိန်ဂျလိစ်၊နယူးယောက်သို့မဟုတ်ချီကာဂို၊ဒီအသင့်ဖြစ်ဖို့အတော်လေးလွယ်ကူသည်။ ဟိုတယ်ဘားကိုရီးယားအိမ်နီးနားချင်းလည်းကြီးမားတဲ့အထိ။ မင်္ဂလာရှိအချိန်နာရီသည်တစ်ဦးစံပြနေရာအရေအတွက်နှင့်တွေ့ဆုံရန်အလုပ်လုပ်ကိုးရီးယားအဘယ်သူသည်မိန်းကလေးငယ်များရှာဖွေနေစေခြင်းငှါအဘို့အကောင်းတစ်ဦးအချိန်ပြီးနောက်ရှည်လျားတစ်နေ့ရုံးမှာ။ ကိုယ့်အကြိုက်နဲ့ကုန်စုံစတိုးဆိုင်နှင့်ဟိုတယ်များ၊သင်ရှာဖွေနေသင့်အဘို့အမင်္ဂလာရှိနာရီဒေသများအတွက်အမှုသည်အဓိကအားဖြင့်အာရှသို့မဟုတ်ကိုးရီးယား။ သင်ပြုလျှင်သွားများအတွက်ပျော်ရွှင်နာရီသေချာအောင်၊သင်တို့ကိုဝယ်ခြင်းငှါအဆင်သင့်ပါပဲအချို့သောအချိုရည်။ မျှော်လင့်သင့်အခင်းကော့တေးသို့လှည့်လိမ့်မည်ညစာစားပွဲနှင့်ဒုတိယရက်စွဲ။ သင်ပြုလျှင်သွားများအတွက်မင်္ဂလာအချိန်နာရီ၊သေချာအောင်သင်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါ ဝယ်ဖို့အချို့သောအချိုရည်။ မျှော်လင့်သင့်အခင်းကော့တေးသို့လှည့်လိမ့်မည်ညစာစားပွဲနှင့်ဒုတိယရက်စွဲ။ ကော်ဖီအကြီးမားတဲ့အစိတ်အပိုင်းကိုရီးယားယဉ်ကျေးမှုနှင့်အမေရိကန်ယဉ်ကျေးမှု။ ဒါဟာလည်းအကြောင်းအရာတစ်ခုခုလူအများစုရရန်လိုအပ်သည်သွားနှင့်အာရုံစူးစိုက်နေ့ကိုတလျှောက်လုံး။ ကော်ဖီအရောင်းဆိုင်တွင်ကိုးရီးယားအကွက်များမှာသင့်အတွက်အကောင်းဆုံးအလောင်းအစား။ နေစဉ်ယားကော်ဖီဆိုင်ထင်ရုံသူများကိုသင်ဖို့အသုံးပြုနေတာပါ၊သူတို့အနည်းငယ်ရှိသည့်အဓိကကွာခြားချက်။ အကြီးမားဆုံးတဦးခံရသောဈေးနှုန်းများများမှာယေဘုယျအားဖြင့်အဆင့်မြင့်နှင့်အတူထွက်ဆွဲထားတဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်သို့မဟုတ်လက္ပေသည်အားပေးတိုက်တွန်း။ မကြောက်ကြစခန်းအချို့နှင့်အတူထွက်အလုပ်လုပ်သို့မဟုတ်ဝတ္ထုနှင့်ထွက်လှပတဲ့ကိုရီးယားမိန်းကလေးများလာမယ့်တံခါးကိုမှတစ်ဆင့်အတွက်သူတို့ရဲ့ နှင့် ။ မအားလုံးကိုရီးယားမိန်းကလေးများအဖို့ချစ်ကြ၊ဒါပေမယ့်ဝယ်နေဆဲအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့နေရာမှဖြည့်ဆည်းသည့်အခါ။ ငယ်ရွယ်သောအမျိုးသားများအဘို့အရှာဖွေနေတဲ့ကိုးရီးယားမိန်းကလေးသင့်ကပ်ဝယ်နှင့်အတူဒေသများရှိကြီးမားတဲ့အာရှလူဦးရေသော်လည်း၊အခြားအဝယ်စေခြင်းငှါ၊မြေအမျိုးသမီးအဖြစ်ကိုကောင်းစွာ။ သင်ပြုသည့်အခါသွားတက်ခူးဖို့အမျိုးသမီးကုန်တိုက်မှာ၊သေချာအောင်သင်တာမဟုတ္ပါဘူး လမ်းလျှောက်စတိုးဆိုင်မှစတိုးဆိုင်ထံမှပေါ်ရိုက်ရှိသမျှအမျိုးသမီး။။။။ အရမ်းအနည်းဆုံးသင်ကဲ့သို့သောကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်ခင်ဗျားလုပ်နေတာအချို့များအတွက်စျေးဝယ်။ စာအုပ်ဆိုင်မဖြစ်စေခြင်းငှါတိုင်းထောင့်ပေါ်မှာသူတို့ဖြစ်ဖို့အသုံးပြု၊ဒါပေမယ့်အကျင့်သောသူတို့ကိုတည်ရှိနေဆဲများသောအားဖြင့်စမတ်နှင့်အတူတင်ဆောင်၊အမှန်။ ရှာဖွေနေစဉ်အဘယ်မှာရှိစတိုးဆိုင်များကိုရီးယားအမျိုးသမီးလေ့ဆိုင်ပညာရှိတဲ့စိတ်ကူးယေဘုယျ၊ကိုးရီးယားဆိုင်စေခြင်းငှါ၊အနည်းငယ်ထူးဆန်းသင်တို့အဘို့အသင်သည်မပြုလျှင်ဘာသာစကားကိုပြောဆို။ အဲဒီအစား၊အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ဆိုင်ကြောင်းဆွဲကျယ်ပြန့်ပရိသတ်ကိုနှင့်အတစ်တန်ရှိသည်၊ကွဲပြားခြားနားသောလူများအတွက်သူတို့ကိုကိုမဆိုပေးထားသောယခုအချိန်တွင်။ သင်သည်မပြုစေခြင်းငှါရှာတွေ့အနည်းငယ်အပူကိုရီးယားမိန်းကလေးများအတိုင်းအချိန်အထိစာအုပ်ဆိုင်၊ဒါပေမဲ့သူတို့ကျိန်းသေတစ်ဦးစံပြနေရာအရပ်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အမျိုးသမီးတစ်ဦး။ သင်သည်လည်းကြည့်ရှုမည်မဟုတ်ကဲ့သို့အပုတ်သူပဲထွက်ကောက်မင်းသမီးကတည်းကစာအုပ်ဆိုင်များမှာကြိုဆိုကပ္မႈအားလုံးအရလူလိုသူသူတို့ကိုယ်သူတို့ပိုကောင်းဖို့။ လျှင်သင်တက်အဆုံးသတ်မှာအထူးသဖြင့်ကြီးမားသောအုပ်ဆိုင်၊တုတ်မှအခန်းကဏ္ဍဘယ်မှာသင်သိသောအရာတစ်ခုခုအကြောင်းစာအုပ်စင်ပေါ်အပေါ်။ သင်ချင်ကြဘူး တက်အဆုံးသတ်နှင့်အတူစကားပြောတစ်ဦးအနုပညာကိုမြတ်နိုးကိုးရီးယားမိန်းကလေးမနိုင်လျှင်ပင်စာလုံးပေါင်းပီ။ အဆိုပါအားကစားရုံများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်အများဆုံးထင်ရှားသောနေရာများကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အမျိုးသမီးများ၊သို့သော်အမှန်မှာစုံတွဲများတကယ်လိုဖြည့်ဆည်းအပေါင်းတို့သည်အချိန်။ ရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင်ကိုရီးယားမိန်းကလေးများပူးပေါင်းတစ်ဦးအားကစားရုံအနီးနေရာတွေအများကြီးကိုရီးယားအမျိုးသမီးအလုပ်နှင့်တိုက်ရိုက်ကာစံပြရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်။ သင်ပြုသည့်အခါချဉ်းကပ်ကိုးရီးယားအမျိုးသမီးအားကစားရုံမှာသေချာအောင်၊သင်ကမမျှော်လင့်။ အများကြီးကိုရီးယားအမျိုးသမီးချင်စေခြင်းငှါမှရိုးရိုးလေ့ကျင့်ခန်းအနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခြင်းမပါဘဲ။ သင်ဂိုးသွင်းအများကြီးပိုရမှတ်နှင့်အတူကိုရီးယားအမျိုးသမီးအားကစားရုံမှာဆိုရင်ပုံမှန်အစည်းအဝေးနဲ့ဟောပြောတာနဲ့အတွက်နေစဉ်စားတောင်းပန်၏နေ့စွဲပထမဦးဆုံးအကြိမ်သင်တွေ့ဆုံ။ ဒေသခံသီခ်င္းအားလိုွင္သာတစ်ခုတည်းအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး။ ကိုရီးယားမိန်းကလေးများစေခြင်းငှါတောင်မှပိုပြီးရေးဆွဲဖို့အဲဒီအမျိုး၏နေရာအထက်အရက်ဆိုင်ကြောင့်အရာတစ်ခုခုရဲ့အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ထက်ပိုအသား-စျေးကွက်သည်အများဆုံးတွေကတော့အစက်အပြောက်။ သွားဒေသခံဂီနေရာတစ်ခုခုလုပ်နိုင်၊ဒါပေမယ့်သင်ရှိသည်စေခြင်းငှါ၊ကောင်းကံနှင့်အတူ ။ အများကြီးကိုရီးယားအမျိုးသမီးမှကြိုက်တတ်တဲ့။ ထွက်သွားအုပ်စုများအတွက်၊သင်စရာမလိုပါလျှင်အ ဖျော်ဖြေဖို့သူတို့ရဲ့မိတ်ဆွေ၊သင်သည်တတ်နိုင်မည်မဟုတ်ပေအဝယ်အမျိုးသမီးစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အတွက်သောက်လျှင်ပင်၊သူမအတွက်စိတ်ဝင်စား။ နီးပါးလူတိုင်းကချစ်ခွေးနှင့်ပါဝင်သောအများဆုံးကိုရီးယားမိန်းကလေးများရှိပါတယ်။ အခွေးများအတွက်၊ယူမှတစ်ဦးခရီးစဉ်ခွေးပန်းခြံရလိမ့်မည်သင့်ရဲ့အချို့သောလေ့ကျင့်ခန်းနေစဉ်သင်ကြည့်ရှုများအတွက်မင်းသမီးကိုချက်တင်နှင့်အတူ။ ယောက်ျားတွေကသွားရောက်ကြည့်ရှုချင်ခွေးပန်းခြံမျိုးသမီးများကိုတွေ့ဆုံရန်အဘို့အကြည့်ရှုသင့်ဒေသများတွေအများကြီးကိုရီးယားအမျိုးသမီး။ အများဆုံးမိန်းမတို့အဘို့အကြည့်ရှုမည်အရင်းနှီးဆုံးခွေးပန်းခြံမှအိမ်လုံးပြီးနောက်။ မြောက်ကိုရီးယားမဖြစ်စေခြင်းငှါ၊တစ်ဦးအလွန်ဖော်ရွေခရီးသွားရောက်၊ဒါပေမယ့်အမှန်တကယ်အသွားတောင်ကိုရီးယားသည်အံ့သြဖွယ်လမ်းအတွေ့အကြုံယဉ်ကျေးမှုနှင့်တွေ့ဆုံလှပတဲ့ကိုရီးယားမိန်းကလေးများနေစဉ်သင်ထိုသို့ပြု။ အကြီးမားဆုံးအကျိုးကိုအမှန်တကယ်သွားရန်တောင်ကိုရီးယားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို၏အများစုဟာအမျိုးသမီးအတွက်တိုင်းပြည်များမှာကိုးရီးယား။ ဆိုလိုကြောင်းသင်ရှိသည်လိမ့်မယ်အများကြီးပိုပြီးအခွင့်အလမ်းတွေကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အမျိုးသမီးနှင့်ကိုက်ညီသောသင်၏အလိုဆန္ဒ။ ဟုတ်ပါတယ်၊သင်သည်လည်းမျှော်လင့်တော်တော်အံ့သြဖွယ်ခရီးသွားအတွေ့အကြုံ။ သွား သို့သင့်ရဲ့ခရီးစဉ်နှင့်အတူတစ်ဦးပွင့်လင်းစိတ်ထဲမဝင်စေခြင်းငှါပယ်ရှားနှင့်အတူထက်အများကြီးပိုကိုရီးယားမိန်းကလေး။ ဂျေဒေးသည်ပုံမှန်ထောက်ပံ့စာရေးဆရာအဘို့ထက်ကျော်လွန်အသက်အရွယ်။ သူကူညီပေးခဲ့အများစုကအငယ်ယောက်ျားနှင့်အတူအောင်မြင်သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးနှင့်လည်းနှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံက။ ကူညီမျိုးသားယုံကြည်မှုတည်ဆောက်အတွက်မိမိတို့သည်အထူးသဖြင့်စိတ်အားထက်သန်၏။
ငါရှိသည်အဘယ်သူသည်မိတ်ဆွေတစ်ဦးသွားဘို့လဲလှယ်အတွက်ဆိုးလ်နှင့်ရက်စွဲကိုရီးယားကောင်လေးအတွက် နေစဉ်။ သူသဘောကောင်းပုံရတယ်အပေါင်းတို့နှင့်၊ဒါပေမယ့်သူတို့တွေ့နှင့်သူ၏မိတ်ဆွေများကသူကအလွန်ဝေးနှင့်အအေးသူ့ဆီသို့ဦးတည်။ ဆိုလိုတာကလုံးဝမၾတီဝန်ခံသူမမှာအားလုံး။ အစ်ကိုသို့မဟုတ်ကြောင့်အရှက်မဟုတ်ကြောင်းယား။ (ဆဲ။ ငါရှိသည်အဘယ်သူသည်မိတ်ဆွေတစ်ဦးသွားဘို့လဲလှယ်အတွက်ဆိုးလ်နှင့်ရက်စွဲကိုရီးယားကောင်လေးတစ်ဦးအနေဖြင့်အဘို့။ သူသဘောကောင်းပုံရတယ်အပေါင်းတို့နှင့်၊ဒါပေမယ့်သူတို့တွေ့နှင့်သူ၏မိတ်ဆွေများကသူကအလွန်ဝေးနှင့်အအေးသူ့ဆီသို့ဦးတည်။ ဆိုလိုတာကလုံးဝမၾတီဝန်ခံသူမမှာအားလုံး။ အစ်ကိုသို့မဟုတ်ကြောင့်အရှက်မဟုတ်ကြောင်းယား။ (ဆဲအာရှသော်လည်း)ပါင္း၊ကိုးရီးယားပြဇာတ်နှင့်အားလုံး၊ကိုးရီးယားအမျိုးသားများအလေ့အကြွေးကြော်တွေအများကြီး၊နှင့်ပင်အမျိုးသမီးသည့်အခါသူတို့အားလုံးအမျက်ထွက်ခြင်းနှင့်အရာအားလုံးကို။ ဟုတ်၊ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လူတိုင်းသင့်အဘို့အမြင်။ ဒါကြောင့်၊အထွေထွေခံစားရသည်အဆင့်သာလွန်များအကြားအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်ကိုရီးယားလူ့အဖွဲ့အစည်း။ ကိုယ့်အကြောင်းကိုစပ်စုဘယ်လောက်စစ်မှန်တဲ့ဒီကိစ္စဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြဇာတ်ထဲမှာပေမဲ့သူတို့ကပိုပြီးသို့မဟုတ်လျော့နည်းအချဲ့။ ကျေးဇူးပါပဲကျွန်တော်လက်ထပ်ဖို့ကိုရီးယားလူ၊ငါသတိပြုမိကြပြီအများကြီးခြားနားချက် အကြားကိုရီးယားအမျိုးသားများအတွက်အထွေထွေနှင့်အနောက်တိုင်းအမျိုးသားများမှာကြီးပြင်းတာပါ။ ကျွန်မခင်ပွန်းကောင်းသည်၊ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်ထားပါသူကပုံမှန်ကိုရီးယားလူ။ တက်ကြီးထွားလာ၊သူမြင်သူ၏ဖခင်ထိန်းချုပ်ထားရိုက်နှက်နှင့်သူ၏အမိ၊အမှိုက်များ၊အမိန့်အရယစ်မူးနှင့်သူ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူအလောင်းအစားမှနှင့်တွေ့ဆုံအမျိုးသမီးအားလုံးအချိန်မီ၊သူကနောက်ဆုံးမှာလမ်းလျှောက်ထွက်ပေါ်။ ကျွန်မအထင်အဲဒီအတွက်ကြောင့်၊ငါ့ခင်ပွန်းကအမြဲ သူ၏ဖခင်နှင့်လည်းပြုမူသူ့ကိုကဲ့သို့အားလုံးကုန်ကျစရိတ်များမှာ။ ငါမြင်ကြပြီအများကြီးအထိမ်းအလွဲသုံးမှုတစ်လျှောက်လုံးအတွက်ငါ့အချိန်ရီးယားတို့တွင်အခြားစုံတွဲများ၊သော်လည်း။ ငါပြောပြနိုင်ကြောင်း၎င်းမတားမြစ်ထားပါတယ်အတွက်ကိုရီးယားယဉ်ကျေးမှုအကြိုက်တယ်၊ကျွန်တော့အရပ်လေ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ငါဘာသာျပန္ခ်က္မွတ္ထားမႈမ်ားကိုရီးယားရုပ်သံပြပွဲများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းကြောင်းအိမ်ထောင်ရေးပဋိပက္ခ။ အခါခင်ပွန်းသည်တက်ရိုက်နှက်သူ့ဇနီး၊သူတို့များသောအားဖြင့်အဖော်အဖြစ်ရှိခြင်းထိုက်။ အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှု၊၎င်း၏့ယေဘုယျအားဖြင့်သဘောတူသည်ဘာမျှဇနီးပြောနိုင်အောင်တွန်းပို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုဆန့်ကျင်သူမ၊နှင့်မီဒီယာအလိုမဖော်ကျူးတစ်ခုမတော်မတရားခင်ပွန်းကအပြုသဘောဆောင်တဲ့အလငျး၌။ ဟုတ်ပါတယ်၊အများကြီးရှိပါတယ်တရား ဆက်ဆံရေးကိုအတွက်ကမ္ဘာ၏အခြားဒေသများတွင်၊ဒါပေမယ့်ကျွန်မထင်တယ်ပိုပြီးလက်ခံခြင်းအားဖြင့်အများပြည်သူကဒီမှာ။ ကျွန်မခင်ပွန်းရှိပါတယ်ဘယ်တော့မှအထိ၊ဒါပေမယ့်အလေ့အရအများကြီးပိုပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွင်းပဋိပက္ခအများဆုံးထက်နောက်ပိုင်းလူမယ်လို့၊နှင့်အခြားကွာခြားချက်ငါဘာသာျပန္ခ်က္သတိပြုမိသည်။ သို့သော်သူသည်၊သူလည်းအလွန်မေတ္တာမှာကြိမ်။ အဘယ်အရာကိုသင်ပြန်လည်ဖော်ပြနှင့်အတူသင့်ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့်သူသည်မယား။ ကိုးရီးယားယဉ်ကျေးမှု၊ကိုးရီးယားအရှကြသည်မဟုတ်အဖြစ်ရှုမြင်ညီဘူးမ်ား၊ဒါကြောင့်သူကဖြစ်နိုင်ပါတယ်ခံစားရပါဘူးအနည်းငယ်ရှက်ရွံ့။။။။ အတွက်ရှေးကာလ၌ကိုရီးယား၊အမျိုးသားများအတွက်သာလွန်သောမိသားစု။ အမျိုးသမီးအဆင့်အတန်းအလွန်နိမ့်ကျ။ ဒါပေမယ့်ဒီနေ့ခေတ်လူငယ်တွေအတွက်တပိုချစ်နှင့်ပျော့ပြောင်း၊ပဲလိုပါတယ်။ ကၽြန္မကိုရီးယား၊အကြောင်းငါ့ကိုပြောပါ။ အခါတစ်ဦးစုံတွဲသည်လက်ထပ်တဲ့မိန်းကလေးမိသားစုပေးရဖို့လက်ဆောင်များအတွက်ပေးဆောင်မင်္ဂလာဆောင်၊အလေးကိုလက်ခံသမျှသောအကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်လက်ဆောင်ကိုပေးကြရ၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အကောင်လေး။ အကယ်လေးမှာအမြင့်ဆုံးအဆင့်တွင်လူ့အဖွဲ့အစည်း၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ဆရာဝန်တစ်ဦး၊ မိန်းကလေးရှိသည်မယ်လို့ပေးကားများ၊အိမ်စသည်တို့ကို။ ပဲအိန္ဒိယအမျိုးသမီး။ အတိတ်အတွက်အချိန်၊၎င်း၏့ဥပဒေရေးရာများအတွက်ယောက်ျားရိုက်နှက်ဖို့သူ၏ဇနီး။ ဒါပေမယ့်ဒီနေ့ခေတ်ဥပဒေပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ၎င်း့တရားမဝင်အလွဲသုံးမှုအမျိုးသမီးတစ်ဦး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ငါနေဆဲအချို့ကိုကြည့်ရှုပါကင္မ္ခ်ီတဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမှအကွီးအကဲမြား။ တခါခါကျွန်မအတွက်ရုတ်သိမ်းပေးရန်တစ်ဦးစကိတ်အပန်းဖြေစခန်း၊အထီးကိုးရီးယားအပါးသူ၏ဇနီးတော့ခက်များ၏ရှေ့မှောက်၌နှင့်ငါ့မိဘ၊ဒါပေမယ့်ဇနီးတို့သည်တိတ်ဆိတ်။ ငါသေချာမဖြစ်ကြောင်းကိုကယားအမျိုးသားများအတွက်အထွေထွေဒါပေမယ့်ငါသာရက်စွဲကိုရီးယားအမ်ိဳးတော့ဘူးဆိုတော့ကုသငါ့ကိုအထို့ကြောင့်ကောင်းစွာ၊သူတို့အနူးညံ့သိမ်မွေ့အမျိုး၊သာက္လိုက္ေ၊နှင့်အလွန်စိတ်ကူးယဉ်ကနေသုံးကင္မ္ခ်ီငါသာရက်စွဲပါပါပြီ။ သူတို့ကြိုက်ကြသည်မဟုတ်အဖြူယောက်ျားတွေနှင့်ဖြစ်ခြင်းနေသော်လည်းပျော့အမျိုးသမီးတွေကိုသူတို့အလွန်အကာအကွယ်နှင့်ပုလ်ပေမယ့်ဘယ်အဖွဲ့အစည်းရုပ်ဖော်အဖြစ်သူတို့ကို။ မင်္ဂလာပါ၊ငါ့ရည်းစားကကိုးရီးယား။ ကျွန်မအထင်ဒါဟာအမှန်တကယ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအပေါ်မူတည်။ သူကုသၽြန္ုပ္၏ကောင်းစွာ၊တကယ်တော့၊သူကကုသၽြန္ုပ္၏မင်းသမီးတူအောင်။ ကၽြန္ေတာ္ကကိုးရီးယားအသော်လည်း၊ငါ ။ ငါအများကြီးသိကြ၏သူငယ္ခ်င္း(ကင္မ္ခ်ီနဲ့ဖိလစ္ပိုင္)။ သူတို့ သိကၽြန္ုပ္၏။ ကျွန်မအထင်မအားလုံးကင္မ္ခ်ီကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ကြောင်းသို့မဟုတ်အဖြစ်ကိုယ့်ကံ။ အရာတစ်ခုခုလည်းမရှိပါဘူးထားပါသူ့ကိုနှင့်ပတ်သက်။ သူပေါ်ပေါက်မိမိအသံ၏အလယ်၌။ ပင်ငါ့ကိုအဖို့နဲ့သူ့မိတ်ဆွေတွေလည်းပါ။ (မိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးများ)ငါပြောပြရန်ကြိုးစားနေမှသူ့ကိုအေးအေးဆေးဆေးချဒါပေမယ့်သူကပြောသူကဲ့သို့ဖြစ်၏ကြောင်း။ ၎င်း့ပံုကိုသူ့အဘို့။ ငါေျပာလိုက္တယ္။ သိသူပြောင်းလဲပစ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ကတည်းက၊သူသည်အသက်ရှင်ဒီမှာဖိလစ်ပိုင်အတွက်အချိန်အကြာကြီး။ အချို့သောကိုးရီးယားပါဘူးတီဆက်ဆံဖို့ဘယ်လောက်မသိသူတို့ရဲ့အမျိုးသမီးကိုပို လမ်းကြောင့်သူတို့ရဲ့အဖေဖြစ်ကြောင်းဟောင်းကျောင်းနှင့်သူတို့ဖြစ်ကောင်းဘယ်တော့မှမျက်နှင့်လေ့လာသင်ယူမည်သည့် ရွေ့ထိုသူတို့ထံမှ။ ငါသိခဲ့ပါ။ ကိုယ့်သွားနဲ့ကိုးရီးယား-အမေရိကန်ပါဘူး။ ငါ့လို။ ငါဘယ်လိုသိရန်အမျိုးသမီးတစ်ဦးဆက်ဆံ။ အလှည့်အပေါ်အချို့သောငှက်အဖြူ၊လောင်းအချို့သောစပျစ်ရည်၊နှင့်အချို့သောအပူတပြင်းအိမ်ရှင်မ။ ငါရှိသည်အဘယ်သူသည်မိတ်ဆွေတစ်ဦးသွားဘို့လဲလှယ်အတွက်ဆိုးလ်နှင့်ရက်စွဲကိုရီးယားကောင်လေးတစ်ဦးအနေဖြင့်အဘို့။ သူသဘောကောင်းပုံရတယ်အပေါင်းတို့နှင့်၊ဒါပေမယ့်သူတို့တွေ့နှင့်သူ၏မိတ်ဆွေများကသူကအလွန်ဝေးနှင့်အအေးသူ့ဆီသို့ဦးတည်။ ကျွန်တော်ဆိုလိုသည်မှာ၊စုစုပေါင်း။ ငါ့နှမတစ်ထောင် ကိုးရီးယားလူအလွဲသုံးသူမကိုမှန်မှန်။ အခါမိသားစုများအတူတကွရရန်အဘို့အအားလပ်ရက်၊ငါ့နှမမွီကိုးရီးယားခင်ပွန်းနှုတ်အလွဲသုံးငါ့နှမများ၏ရှေ့မှောက်၌။ ယခု၊ဒီကိုရီးယားလူ့နှုတ်ဖြင့်အလွဲသုံးစားမှုတစ်မှန်မှန်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သောအပျက်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလပ်ရက်မိသားစုရ-အတူတူ။ ကျနော်တို့အားလုံးကိုယူပြီးဖြစ်သော်လည်းသာမန်အရာဖြစ်၏။ အဘယ်သူမျှမပြောနိုင်ဘာမှမသောကြောင့်၊ငါ့နှမေျပာသူမယားခင်ပွန်းသည်။ သူမတီအက်ဥပဒေပျော်ရွှင်တော့ဘူး၊မကြိုက်သူဖို့အသုံးပြုမီသူမသည်လက်ထပ်။ ကျွန်တော်ဆိုလိုသည်မှာတောင်မှပဲဒရာမာ၊သင်စဉ်းစားရန်ရှိသည်ကဒရာမာအစဉ်အမြဲပယ်ကိုအခြေခံပြီးပေါ့ပ်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အချို့၏ရောင်ပြန်ဟပ်မှုအဖြစ်မှန်။ ဒါဟာလုပ်ဖို့အရာတစ်ခုခုရှိစေခြင်းငှါအတူသူတို့၏အတွေးအခေါ်သို့မဟုတ်မည်သို့သူတို့ဟာအလုပ်ခန့်သာလူ့အဖွဲ့အစည်းများ၊မိဘများ၊မိတ်ဆွေများ၊ကျောင်းနှင့်အ။ ထိခိုက်မှုမရောက်သေး၊အကြမ်းဖက်မှုသို့မဟုတ်ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊နှောင့်ယှက်သို့မဟုတ်ကိုယ်ရေးအချက်ကျူးကျော်၊ဖို့ဖြစ်ပါတယ်သို့မဟုတ်ရှေ့၊လိမ်လည်မှုသို့မဟုတ် ၊ထိခိုက်မှုမရောက်သေး၊အကြမ်းဖက်မှုသို့မဟုတ်ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊နှောင့်ယှက်သို့မဟုတ်ကိုယ်ရေးအချက်ကျူးကျော်၊ဖို့ဖြစ်ပါတယ်သို့မဟုတ်ရှေ့၊လိမ်လည်မှုသို့မဟုတ် ၊ထိခိုက်မှုမရောက်သေး၊အကြမ်းဖက်မှု သို့မဟုတ်ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊နှောင့်ယှက်သို့မဟုတ်ကိုယ်ရေးအချက်ကျူးကျော်၊ဖို့ဖြစ်ပါတယ်သို့မဟုတ်ရှေ့၊လိမ်လည်မှုသို့မဟုတ် ၊
အခမဲ့အင်တာနေရှင်နယ်အခန်းပေါင်းစကားပြောခန်းများအတွက်ဧည့်စကားပြောမပါဘဲမှတ်ပုံတင်သို့မဟုတ်အတက်လက်မှတ်ထိုး။ ဖန်တီး၊ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်ပုဂ္ဂလိကနှင့်ပူးပေါင်းအုပ်စုချက်တင်အခန်းပေါင်းတောင်ကိုရီးယားအခန်းပေါင်းစကားပြောခန်းတစ်နေရာမှဖြည့်ဆည်းစိမ်းတောင်ကိုရီးယားထံမှ။ လည်း၊ဒါကြောင့်တစ်နေရာမျှဝေဖို့သင့်လမ်းကိုနားလည်မှု၊ကမ္ဘာ၏။ ဒါဟာနေရာအကြောင်းဆွေးနွေးဖို့အသင့် အကြိုက်ဆုံးအရာ၊သိလောကအကြောင်းနှင့်တွေ့ဆုံရန် ။ အစိမ်းသင်တွေ့ဆုံခဲ့သည်ဘယ်တော့မှမလုပ်ပါဘူး။ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်ဖြစ်စေ။ မျှဝေသင့်ရဲ့ကြောက်နှင့်အတူစိမ်းအဖြစ်၊ဒါကြောင့်အလွယ်ကူဆုံးအလုပ်တခုကိုဟောပြောဖို့ရှေ့တွင်အစိမ်း။ နှင့်အတူစကားပြောစိမ်းသင်ကူညီနိုင်၊ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအနောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများအသက်တာ၏အဖြစ်၊ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဘယ်တော့မှသင်အဘို့အဖြေရှိသည်နိုင်ပြီဟုလျှောက်ခြင်းအားဖြင့်အခြားတစ်ယောက်ယောက်ရှိပြီးသား။ ။ အတွက်အခမဲ့ အတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း မိတ်ဆွေတို့ကိုကြိုက်သူကျပန်းစကားပြောမပါဘဲ။ အခမဲ့အသုံးျပဳ မပါဘဲမည်သည့်မှတ်ပုံတင်သို့မဟုတ်အတက်လက်မှတ်ထိုး။ လစ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံမှစတင်က်ပ္။ က်ာ္လြန္ရသည်အေးမြသောနေရာကိုဖြည့်ဆည်းရန်မှာလူကြုံနှင့်အဖော်မပါဘဲ။ က်ာ္လြန္ရအရေအတွက်ရှိပါတယ်အခမဲ့ကျပန်း ဖြည့်ဆည်းဖို့အေးမြမှလူသစ်ကမ္ဘာအဝှမ်း။ ပုဂ္ဂလိကတို့တွင်အခြေခံအကျဆုံးအင်္ဂါရပ်များ ။ ဒီအကြုံအွန်လိုင်းချက်တင်အခန်းအကုန်ကျစရိတ်အခမဲ့။ အမွတ္စွဲချက်လျှောက်ထားက်ပ္။ ချက်တင်နှင့်အတူမရှိဘဲကျပန်းတပါးအမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေး၊အပုဂ္ဂလိကပြောဆိုချက်တင်၊ဗီဒီယို၊ဓာတ်ပုံတွေအခမဲ့။ ချိတ်ဆက် လူများကမ္ဘာအနှံ့မှအပေါင်းတို့နှင့်ဤဝန်ဆောင်မှုများအတွက်အခမဲ့။ တွေ့ဆုံရန်ချင်ကျပန်းစိမ်းယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများ။ က်ာ္လြန္ရအလြဲေဝက်ဘ်ဆိုက်သင်တို့ကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဝင်ရောက်ဖို့အကြုံအွန်လိုင်းချက်တင်အခန်းဝန်ဆောင်မှုမပါဘဲမွတ္ပံုမပဲခွင့်ပြုနှင့်အတူစကားပြောမှကျပန်းတပါးအမျိုးသားသည်ဒါပေမယ့်လည်းအခမဲ့သင်မည်သည့်ကုန်ကျစရိတ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခမဲ့ ရတွေ့ဆုံရန်အခွင့်အလမ်းကျပန်းတပါးအမျိုးသားထံမှအက်စ်၊တက်၊အာရှ၊သြစတြေးလျနှင့်အခြားနိုင်ငံများမှလူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ဖလားကျော်။ စကားပြောနှင့်အတူစိမ်းအလွန်ကြီးစွာသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်သင့်ရဲ့အချိန်ဖြုန်းဖို့၊စကားပြောအသစ်နှင့်အတူလူအတွက်စကားပြောခန်းသင်ကူညီနိုင်ပါတိုးတက်မှုနှင့်ဆင်၏အကြံပြုချက်များနှင့်အဖိုးတန်အခွင့်ထူးကြသောအခါသင်တို့ကိုမလိုအပ်မှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ်မှတ်တမ်းတွင်သို့မဟုတ်တက်လက်မှတ်ထိုး။ စတင်စကားပြောမှာဒီချက်တင်ဝန်ဆောင်မှုသင်ရုံရှိရွေးချယ်ဖို့အသင့်တော်သောအသုံးပြုသူအမည်နှင့်စတင်က်ပ္။ အပိုင္းေတြမွာအားလုံးအစီအစဉ်များ၏အောင်မြင်မှာစကားလက်ဆုံက်ာ္လြန္ရချက်တင်အခန်းပေါင်း။ မှာက်ာ္လြန္ရအခန်းပေါင်းစကားပြောခန်း၊သင်မျှဝေနိုင်ပါသည်၊ဓာတ်ပုံတွေ၊ဗီဒီယို၊ချက်ချင်းသို့စကားပြော။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှင့်အတူပုဂ္ဂလိကဝန်ဆောင်မှု၊သင်သည်ချက်တင်စကားပြောနိုင်နှင့်အတူ စိမ်းသင်တွေ့ဆုံရန်အတွက်ပုဂ္ဂလိကစကားပြောခန်း။ စတင်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်။ ကျနော်တို့ကဒီမှာမှာက်ာ္လြန္ရဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါနှင့်အတူအကောင်းဆုံးက်ပ္အတွေ့အကြုံ။ အောက်ပါအင်္ဂါရပ်မျှခြင်းရဲ့ချက်တင်အခန်းပေါင်း။ ကျနော်တို့ဝန်ခံ၏တန်ဖိုးကိုအချိန်နဲ့ကယ်ဖို့အချိန်နှင့်ယင်းအစားသင့်ကိုကူညီသင့်ရဲ့အချိန်ဖြုန်းအတွက်စကားပြောနှင့်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်၊အရာ၌ခန့်ထားပြီသေချာသင်ကွုံတှေ့ရ။ ထို့ကြောင့်၊သငျသညျဖို့ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးမှတ်ပုံတင် ။ အီး။ အဘယ်သူမျှမမှတ်ပုံတင်သို့မဟုတ်အတက်လက်မှတ်ထိုးရန်လိုအပ်သည်စကားပြောကိုအွန်လိုင်းမှာပါ။ အနှိပ်သည်သင်၏မှော်တံခါးကိုနှင့်အတူစကားပြောကျပန်းတပါးအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာလုံးကျော်ထံမှ။ သင်ကရန်မလိုအပ်မှတ်ပုံတင်ရန်မည်သည့်အကောင့်ဖွင့်ဖို့အကြီးဆုံးအွန်လိုင်း။ က်ပ္အွန်လိုင်းနိုင်ခဲ့ဖူးဘူးဒီလွယ်ကူသည်။ များစွာသောအကြိမ်ဘယ်အရာကိုအများဆုံးအမေရိကန်အနှံ့လာသည်တစ်ခုဥပေက္ခာဝက်ဘ်ဆိုက်၊ထိုကဲ့သို့သောဝက်ဘ်ဆိုက်နိုင်ပါသည်အများကြီးဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုရင်ရှာဖို့ရှိနေဖို့အတွက်အချိန်ကြာကြာကာလများ။ အများဆုံးအွန်လိုင်းချက်တင်ဆိုဒ်များနဲ့သင့်စမတ်ဖုန်း၊သင်ဟန်း။ အသစ်နှင့်အတူနည်းပညာနှင့်အကူအညီ၏ဂူယခုဖြစ်နိုင်ဆောက်လုပ်ဖို့ အပြည့်အဝတုံ့ပြန်မှုဝဘ်ဆိုဒ်မယ်လို့ချောချောမွေ့မွေ့ပြေးအပေါ်မည်သည့်ပလက်ဖောင်းအဖြစ်အကွန်ပျူတာ၊စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်။ တစ်ခုခုကိုအအန္းဖုန်းသို့မဟုတ် သို့မဟုတ်တောင်မှဆေးပြား၊မခွဲခြားဘဲစက်ကိရိယာအမျိုးအစားအသယ်ျ ဟနှင့်အတူလူအမျိုးမျိုး၏မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားနဲ့။ မဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်ဆိုအက္ပ္ကိုအသုံးပွုဖို့အခမဲ့ချက်တင်န်ဆောင်မှု၊မည်သည့်မိုဘိုင်းသို့မဟုတ်ဖြန့်ချိရာက္ဇာကိုအလွယ်တကူလိုက်နာနှင့်အတူချက်တင်ဆိုက်ရဲ့ယန္တရား။ ရအားအခမဲ့အခန်းပေါင်းစကားပြောခန်း၊ဆုံသစ်စိမ်း၊စကားပြောအသစ်အစိမ်းနှင့်အသစ်ရဲ့မိတ်ဆွေ။ ကျွန်တော်တွေ့မှချစ်ကြတဲ့လူတွေနဲ့မတူဘဲ။ ဒါဟာတစ်ဦးပျော်စရာအတွေ့အကြုံအကြောင်းသင်ယူရန်အသစ်၊လူသစ်နှင့်၎င်းတို့၏ယဉ်ကျေးမှု။ တစ်နေရာဖြည့်ဆည်းနိုင်တက်သစ်စိမ်းနှင့်အတူ-စိတ်တူ သည်။ ။။။။ စကားပြောနှင့်အတူတကျွန်းတနိုင်ငံသားတို့၏နှင့်အသုံးပြုသူများအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာလုံးကျော်ထံမှ၊ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများသို့မဟုတ်တောင်မှသင့်ဒေသခံသို့မဟုတ်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ။ ယောင်သမျှသောပျော်စရာရှိသည်နိုင်အောင်သစ်မိတ်ဆွေများအတွက်၊အကောင်းဆုံးချက်တင်ဆိုဒ်များအစိမ်း ။ ကျနော်တို့မေတ္တာပို့၊အဘယ်သူသည်မ။ ကျနော်တို့နာရီကုန်ပို့တနေ့လုံး၊ဒါပေမယ့်ဖြစ်နိုင်တဲ့နည်းနည်းငြီးငွေ့ဖို့ပဲတနေ့လုံး။ မှာက်ာ္လြန္ရသင်မျှဝေနိုင်ပါသည်၊ပုံရိပ်တွေနှင့်ဗီဒီယိုစကားပြောနေစဉ်နှင့်အတူတစ်ဦးကလူစိမ်းနှင့်အတူစကားပြောကျပန်းအသံုးျပဳသူမ်ား၏။ ဒါဟာပင်အတွက်လိုအပ်သောမည်သည့်အသုံးပြုသူတွေကိုမှတ်ပုံတင်ရန်ပေးပို့ဖို့ဓာတ်ပုံတွေသို့မဟုတ်ဗီဒီအွန်လိုင်းစကားပြောခန်း။ ဒီအွန်လိုင်းချက်တင်ဝန်ဆောင်မှုအခမဲ့များအတွက်အပေါင်းတို့ဧည့်သည်များ။ စကားေျယခုစတင်ဝေမျှရုပ်ပုံနှင့်သင်အကြိုက်ဆုံးဗီဒီယိုနှင့်အတူအသစ်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ချက်တင်အိမ်ထောင်ဖက်။ မပေးရန်လိုအပ်သည်ကမဆိုတစ်ပြားမှဒီအွန်လိုင်းချက်တင်ဝန်ဆောင်မှု။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းချက်တင်အခန်းပေါင်းအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်၊နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စကားပြောဝန်ဆောင်မှုကိုလည်းအခမဲ့မခွဲခြားဘဲဘယ်တိုင်းပြည်မှဖြစ်ကြသည်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုကဲ့သို့ဖြစ်ရမှဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ တွေ့ဆုံစကားပြောဖို့အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ၏အားလုံးအသက်အရွယ်အုပ်စုများ။ တွေ့ဆုံဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများအစဉ်စကားပြောကိုအွန်လိုင်းမှာအခန်းပေါင်းစကားပြောခန်း၊သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူသူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်ရသင့်ရဲ့ပျင်းနှင့်ဓာတ်သက်ပါ။ အခမဲ့အများပြည်သူစကားပြောခန်းအခန်း၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေခံချက်တင်ဝန်ဆောင်မှု။ သို့သော်ထိုအုပ်စုချက်တင်မဟုတ်ပါဘူးအစဉ်အမြဲအဆုံးသတ်ဖို့လုံလောက်တဲ့သင့်ရဲ့တစ်နေ့တာကိုကောင်းစွာ။ က်ာ္လြန္ရဖို့ခွင့်ပြုချက်တင်နှင့်အတူတကျွန်းတနိုင်ငံသားတို့အတွက် ပုဂ္ဂလိကစကားပြောခန်းများအဖြစ်ကိုကောင်းစွာ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ကိုသုံးနိုင်သည်ပုဂ္ဂလိကစာတိုပေးပို့ဝန်ဆောင်မှုကိုပင်သိ၏ချက်တင်မိတ်ဖက်ပင်ပိုကောင်း။ အွန်လိုင်းဆက်ဆံရေးအနည်းငယ်လိုအပ်ချုပ်ကဲ့သို့ကောင်းစွာနှင့်ပုဂ္ဂလိကစာတိုပေးပို့ဝန်ဆောင်မှုရုံတာဝန်ထမ်းဆောင်သော။ ဘေးဖယ်ကနေအသုံးပြုပြီးအွန်လိုင်းချက်တင်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုခုရှိမယ့်ကျနော်တို့စောင့်ရမည်ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ထဲမှာနေစဉ်ကျွန်တော်တို့ချဉ်းကပ်မည်သည့်အစိမ်းနဲ့၊ကျွန်တော်တို့အွန်လိုင်းသင့်အတတ်နိုင်ဆုံးမဖြစ်သင့်ကြိုးစားခြောက်လှဖို့မည်သည့်အသုံးပြုသူမဆို၊ငါတို့သည်သင်တို့အသင့်ရှိနေဆဲစကားလုံးများ၊ယဉ်ကျေးတဲ့အခြေခံအဘို့အရှည်လျား-တည်မြဲအွန်လိုင်းဆက်ဆံရေးမျိုး။ ပြည်သူ့အချစ်က်ပ္မှာကျပန်းချက်တင်ဆိုဒ်များအဲဒီအလမ်းကြောင်းသစ်ကိုယနေ့။ ကျနော်တို့ချစ်ဖို့ပြောင်းရွှေ့ထံမှတစ်ချက်တင်ဆိုက်မှအခြားပြီးမှကပ်မပါပဲ။ သူလူမျိုးအဘို့မေတ္တာလွှင့်မှအွန်လိုင်းချက်တင်အခန်းတစ်ခန်းမှအခြားအမေးခံရဖို့မှတ်ပုံတင်နိုင်အမှန်တကယ်အလွန်နာကျင်သည်။ မှာက်ာ္လြန္ရသင်ဖို့မလိုအပ်ပါ။ က်ာ္လြန္ရကမ်းလှမ်းသင်သည်အခမဲ့ဧည့်စကားပြောမပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်တက်လက်မှတ်ထိုးနိုငျသောသက်သေပြခံရဖို့အလွန်ကြီးစွာသောအကူအညီများအတွက် မုိ။ ချိန်းတွေ့နှင့်ရှာဖွေသင့်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်ဘယ်တော့မှမနိုင်ဒါဟာလွယ်ကူ၊ကိုယ့်တဦးတည်းကိုနှိပ်ပါ စတင်စကားပြောမပါဘဲ။ နေထိုင်မှုအတွက်အစစ်အမှန်ကမ္ဘာကြီးကလွယ်ကူသည်မဟုတ်များအတွက်။ ကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းသွားရန်ရှိသည်ဖို့စိတ်ကျရောဂါ၊တင်းမာမှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာညှဉ်းပန်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝတွေကို။ ချက်တင်အခန်းပေါင်းအပေါ်အခြားတစ်ဖက်သွင်ဒါပေမယ့်သက်သေပြခံရဖို့အလွန်ကြီးစွာသောအကူအညီနေထိုင်ကြသူများသည်တစ်ကူကယ်ရာမဲ့ဘဝ။ ဖြစ်စေသင်ကဆယ်ကျော်သက်၊အရွယ်ရောက်အမျိုးသမီးများ၊အမျိုးသားများထံမှသို့မဟုတ်မည်သည့်အသက်အရွယ်အုပ်စုများ၊ချက်တင်အခန်းပေါင်းခဲ့ကြလိမ့်မယ်အစဉ်အမြဲအကောင်းဆုံးနေရာအနာရောဂါကိုငြိမ်းသင်နှင့်သင်၏အချိန်၊အရည်အသွေးအချိန်။ သိရန်ရတဲ့လူသစ်နှင့်ဝေမျှသင့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုအလွန်လွယ်ကူသည့်အွန်လိုင်းစကားပြောခန်း။ ဖြစ်ခြင်း၏ခံစားချက်မဲ့ပေးတော်မူသောလွတ်လပ်ခွင့်ကိုပြောတာဘာမှအတွင်းတည်ရှိသည်။ ဒါကြောင့်၊စတင်စကားပြောသူစိမ်းတွေနဲ့အတူအခုလို၊သင်၏မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်သင်တို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ။ ကျနော်တို့ချစ်စိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့အရောင်စုံ။ အတွက်စကားပြောခန်းနိုင်၏ကြီးမြတ်ပျော်စရာအခါပျင်းပို့တနေ့လုံး။…
၊သင်ပြန်အမှတ်၊သည်ဆိုက်ကိုမြန်အောင်ကျပန်းချိတ်ဆက်ဖို့ဘျ။ ရှိမြဲအခွင့်အလမ်းရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးစိတ်ဝင်စားဖွယ်လူတစ်ဦးနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံအတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်စကားပြောဆို။ ဒါပေမယ့်သင်ကပိုပြီးဖွယ်ရှိင့်ချိတ်ဆက်ဖို့တစ်စုံတစ်ဦးမှပယ်ခြင်းခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းလိမ့်မယ်လို့ပုံမှန်အားဖြင့်ဖုံးလွှမ်း။ အပေါ်အလေးပေးတစ္ေဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်၊သင်မူကား၊ပေါ်ရွှေ့နိုင်မှဗီဒီယိုစကားပြောဖို့နောက်ထပ်အားဖြင့်ရိုက်’နောက်တစ်ခု။ ‘ဆိုက်ထွက်လှိမ့်နှင့်အတူဒေသခံအင်္ဂါကိုခေါ်ဒေသခံကစားတဲ့စေချင်သနည်းသောအသုံးပြုသူများ’ လိပ်စာများ၊ဒါပေမယ့်မယူခဲ့ပါပယ်ဝဘ်စာမျက်နှာအတွက်ဒေသခံဝန်ဆောင်မှုမတည်ရှိတော့ဘူး။ အခုတော့၊ပိုကောင်းသို့မဟုတ်ပိုဆိုးဘို့၊ကိုးရီးယားချိန်းတွေ့စကားပြောခဲ့သည်ပြန်လည်တည်နေရာ-ဝေမျှစိတ်ကူး(ကာဂၤါ)၊ပြီးရင်အလှမ်းဝေးသည်ထက် အတွက်နောက်ထပ်ဧရိယာအဖြစ်ကိုကောင်းစွာ။ ထိုသို့ဖော်ပြပြားကမ်မြစ်ရေပေါ်တစ်လူပျိုစာမျက်နှာ(‘နိစည်းများ’စတိုင်)၊အချက်နှင့်အညီတစ်ချက်တင်အခန်းတစ်ခန်း။ သင်ထင်လျှင်သင်၏အလားအပင်ပိုပြီးထိတွေ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းမှပူးတွဲလူသိသူသင်ဘယ်မှာနေထိုင်မယ်လို့အယူခံသာမှအလွန်သတ္တိသို့မဟုတ်အလွန်ထူးဆန်းဆန်း၊သင်ချင်စေခြင်းငှါ၊နောက်တဖန်အထင်။:ကိုးရီးယားချိန်းတွေ့ချက်တင်ပြောပါတယ်ထွားလာမှာတစ်ဦးနှုန်း၊အသစ်အသုံးပြုသူများ နေ့တိုင်းရှိတယ်လို့အကြောင်း၊တက်ကြွသောချက်တင်အခန်းပေါင်း(အများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိက)ကိုလက်ခံတစ်သန်းလာရောက်လည်ပတ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီလည်းဂုဏ်ယူရှိခြင်း၏အချို့သောကျော်ကြား ၊ပါမစ္ ၊၊ဒေါမန်နေဂျာကောင်လေး ၊ရွန် ။ အသစ်တည်နေရာဂၤါကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပြီးဖော်ပြမှသာတစ်မိုင်ဝက်လျှင်သင်ဆုံးဖြတ်မျှဝေဖို့အဘယ်မှာရှိ။ ‘ဤအကြောင်းကိုအားလုံးဆက်လက်အောင်ကမ္ဘာတစ်ပိုချိတ်ဆက်နေရာဝဘ်ကနေတဆင့်၊’ကိုးရီးယားချိန်းတွေ့ချက်တင်ရဲ့ပူးတွဲတည်ထောင်သူဒန်လိတ်ပာသည္။ ‘ပြောလဲပုံမှန်အစည်းအဝေးယားချိန်းတွေ့စကားပြောခန်းသင်အသုံးပြုဆွေးနွေးဖို့ငါးဖမ်း၊ဒါကြောင့်ဤအင်္ဂါဖြစ်စေမည်ပင်ပိုမိုလွယ်ကူသူတို့အဘို့အအသုံးပြုသူများသည်အတွေ့စစ်မှန်သောအသက်တာ၌အမှန်တကယ်အငါးဖမ်းခရီးစဉ်။ ‘အတူအချို့သောမဆိုင်းမတွ၊ငါကတစ်ကြိုးစားပေးရဖို့။ ငါနဲ့တူသလိုခံစားရခဲ့ဝင္ဖိုသို့လူတွေရဲ့အိပ္ခန္းထဲကအအီအကြှနျုပျ၏။ ခဏတစ်ဘို့၊အပြစ်မဲ့ပုံရ။ သူမချစ်ပါဘူးလူ-ၾကည့္ရႈသည္။ ထိုအခါငါလပ်ငါ့အတွက်ကမ်ရန်ရွေးချယ်ရှာဖွေ ငါ့ကိုအနီးမှဂူဂဲလ်မြေပုံကဲ့သို့သောစာမျက်နှာ အရာအနည်းငယ်သာအထပ်ကိုယ်စားပြုအနီးအနားချက်တင်။ သို့အတွက်အရာတို့ကိုရိုသေလေးစားရန်အခြားသူများအတွက်အခန်းကိုထားခဲ့ဒရာမာ။ ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမဒရာမာ။ မိန်းကလေးထားသီဆိုကိုယ်သူမှ။ တစ်ခုမှာကောင်လေးပြန်ဖြေသူ့အဆဲလ်ဖုန်းအဖို့ပြောနေတာစတင်ခဲ့သူ၏မိတ်ဆွေအကြောင်းကိုချစ်။ အခြားမိန်းကလေးကိုယ့်သူမ၏ကျန်ကြွင်းဖုပေါ်မှာဖြစ်တစ်မှေးလောက်မှာ:။ မီတာ။ ငါအဝင်အခြားစကားပြောခန်းနှင့်စောင့်ကြည့်အကောင်လေးနှင့်အတူနားကြပ်ပေါ်၌မိမိ ။။ သာတူညီသောအခန်း၊ငါစကားကိုနားထောင်မှလူပြောသူ၏အသက်တာဇာတ်လမ်း။ အခြားလူကြီးလူကောင်းကဲ့သို့ထင်ကစားခဲ့သောမေးခွန်းများနှင့်အတူအုပ်စု။ တစ်ဦးကမိန်းကလေးခဲ့နားထောင်ခြင်း၊ချပြီးနှုတ်ခမ်းတောက်ပြောင်ပြီးလျှင်အဘယ်သူမျှမသိနိုင်။ ငါခို၊ပိတ်ငါ့ကမ်၊နှင့်မှနျနားထောငျေျပာပါတယ္။ တယောက်သောသူမည်မျှလောက်စကားပြောသူတပါးအတွင်း’ထ’ရုပ်ရှင်နှင့်မည်သို့သူသည်အထင် ။ ။ ဂျိုးတစ်သူရဲကောင်း။ မကြာမီရုပ်ရှင်ဆွေးနွေးရန်သို့လှည့်အမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းအစည်းအဝေးများအတွက်ဆိုတော့သမီးတစ်ဦးချင်းစီကတခြားကနေ။ ဒါဟာဘာလဲလိုခံစားမိ:ဖြစ်ခြင်းအပေါ်ကပ်ရထားနှင့်ဖို့အတင်းအဓမ္မနားထောင်ခြင်းအပေါ်ကြောက်မက်ဘွယ်သော စကားပြောဆိုချက်။ ကိုယ့်အကြိုက်နှင့်အတူအဲကျယ်မျာအပေါ်မီးရထား၊ငါခံစားခဲ့ရအဲဒီကလူအနီးကပ်လွန်းၽြန္ုပ္၏အဆုံးစီးနင်းမလာနိုင်ဘူးအလျင်အမြန်။ သိဤလူများနေထိုင်ခဲ့တွင်းမိုင်ငါ့ကိုဖန်ဆင်းအမှုအရာပိုမိုဆိုးရွားစေခြင်းငှါရညပ်နောက်သူတို့ထဲကတဦးတည်းအတွက်လိုင်းမှာတပြင်လုံးကိုအစားအစာ၊သူတို့အပေါ်သွားကြောင်း ။ ငါဂျိုး။ ဖရန်စစ္စကိုသည်တစ်မြို့ငယ်လေး၊အားလုံးအပြီး။
လှပတဲ့မိန်းကလေးတွေတွေ့တိုင်းကမ္ဘာ့နိုင်ငံ၊ဒါပေမယ့်မှန်ပေ၏၊အချို့နိုင်ငံများနှင့်လူအမျိုးမျိုးဖို့လုံလောက်တဲ့ကံကောင်းများမှာများစုံလင်ခြင်းနှင့်ပူပြင်းတဲ့မိန်းကလေးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်အဖြစ်အခြားနေရာ။ သို့သော်ထိုသို့မဆိုလိုပါဘူးဂုဏ်အသရေသည်ဤမြေသာ။ ငါသည်အဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကိုပြောတယ်။ဒီမှာအများကြီးရှာတွေ့နိုင်ပါသည်အလွန်ကောင်းမွန်၊ပူနဲ့လှပတဲ့အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအတွက်အများကြီးပိုမိုမြင့်မားအချိုး။ ဒါကြောင့်၊အာင္ဖန္တီးထွက်စစ်ဆေးစာရင်း၏ထိပ်တန်းနိုင်ငံများနှင့်အတူအလှဆုံးမိန်းကလေးများ။ အမျိုးသမီးများနှင့်မိန်းကလေးငယ်များနုပျိုများစင်ကာပူရှိမျှအရေခွံနှင့်အလတ်စားမြင့်။ မိမိတို့အအယူခံအတွက်အထူးခြားကွဲပြားခြားနားသောလမ်းသူတို့လမ်းလျှောက်။ ဒီထက်ပိုဤအမျိုးသမီး’ရှည်လျားတောက်ပဆံပင်လုံလောက်တဲ့ဆွဲဆောင်မှုဆုပ်ကိုင်ဖို့ကျွန်ုပ်တို့အာရုံစိုက်။ တောင်ကိုရီးယားအလှအပအပြစ်မဲ့ပိုင်နှင့် နှစ်သက်ဖွယ်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး။ အဆိုပါမိန်းကလေးငယ်၏ဒီကယ့်ကိုအရမ်းဆွဲဆောင်မှုကြောင့်မိမိတို့အပြစ်နှင့်ချစ်စရာရှာဖွေနေ။ ဒီအစဉ်အမြဲကောင်းစွာရောင်ပြန်ဟပ်အတွက်တောင်ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ဘယ်လောက်လှပချစ်စရာကောင်းဤအမျိုးသမီးများ။ ဘရာဇီးတစ်ပြည်၏အလှအပ။ အဘယ်သူမျှမနေပါစေသင်အမည်ကို၎င်း၏သဘာဝအလှအပ၏အလွလူသား၊အစဉ်အမြဲအချို့အလာကိုနှစ်သက်နှင့်အတူဤတိုင်းပြည်တွင်။ အထက်တန်းကျောင်းနှင့်ကောလိပ်သွားမိန်းကလေးများ၏ဘရာဇီးကိုအမှန်တကယ်လှပခြင်းနှင့်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အကြောင်းကြောင့်အမြင့်ဆုံးအဆင့်အပြစ်ကင်းလျက်ရှိသည်သောရောင်ပြန်ဟပ်မှ၎င်းတို့ရင်ဆိုင်နေရ။ ဒီအပြင်အရွယ်ရောက်အမျိုးသမီးများရဲရင့်ခြင်းနှင့်ဆွဲဆောင်မှုအလောင်းတွေရှိသည့်စေဖို့လုံလောက်တဲ့အရှုးကျွန်တော်တို့ကို။ ယူကရိန်းရဲ့အမျိုးသမီးတို့တွင်အများဆုံးရဲရင့်ခြင်းနှင့်အဆင်းလှအမျိုးသမီးအတွက်။ ဤအမျိုးသမီးများအထိအနိုင်ရခဲ့တွေအများကြီးလက်လွတ်ကမ္ဘာနှင့်လွဲချော်ဠာဆုနှင့်သင်တွေ့မြင်နိုင်သည်အများကြီးလှ၏ဘရာဇီးမှာပါဝင်ညီတဲ့ပြိုင်ပွဲ။ ဒိန္းတူလက်ဆောင်အဖြစ်မြောက်မြားစွာသောအလှအလှမယ်နှင့်ဖက်ရှင်မော်ဒယ်။ ဒီသေးသေးလှ မြေယာအပြည့်အဝအပူနှင့်ၡမ်ားရှာဖွေနေမိန်းကလေးများ။ အခြေခံအားဖြင့်၊အမျိုးသမီးမှာကောင်းသောစောင့်ရှောက်မှုယူသူတို့၏ကျန်းမာရေးနှင့်အရာခပ်သိမ်းကိုပြုမှသူတို့ကိုဆွဲဆောင်မှုလုပ်နှင့်ရှာဖွေနေအေးမြ။ ရုရှားမိန်းကလေးငယ်များသာဖြစ်ကြောင်းရဲရင့်ပေမယ့်လည်းများသောအားဖြင့်ကြာမြင့်စွာ-၊ဆိုလိုတာကဒီမှာထက်ပိုပြီးပျမ်းမျှအရေအမျိုးသမီးများစွာရှည်မြင့်နှင့်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ကိန်းဂဏန်းပါ။ နှုန်း၏အအဝလွန်အမျိုးသမီးအတွက်ရုရှားနှင့်နီးစပ်သည်အဘယ်သူမျှမ။ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် -ေမြးမကြက္အဘယ်မှာရှိအမျိုးသမီးတိုင်း၏အသက်အရွယ်အုပ်စုနှင့်ယဉ်ကျေးမှုတိုင်းတွေ့နိုင်ပါသည်။ ခြုံငုံအဆိုပါလူငယ်မိန်းကလေး၏အလှ၊အဘယ်သူမျှမနေပါစေသူတို့ကအဆီသို့မဟုတ်ပါးလွှာအျ သို့မဟုတ်အတို ။ ဘယ်အရာကိုဤအံ့သြဖွယ်မိန်းကလေးများနှင့်အလှကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်အနက်ရောင်တောက်ပဆံပင်အရာသင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုမတှေ့နိုငျဒီအအများကြီးအတိုင်းအတာ။ အဆိုပါအာဂျင်တီးနားအမျိုးသမီးများအစဉ်အမြဲအလှအသိ။ ဤအမျိုးသမီးအထူးသဖြင့်လူငယ်မိန်းကလေးပေးဆောင်အများကြီးအာရုံစိုက်အပေါ်သူတို့ရဲ့အရေပြားနှင့်ဆံပင်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်သူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးကြည့်ဖို့အပူနှင့်ရဲရင့်။ အဘယ်ကြောင့်ဤသည်ခြုံငုံမိန်းကလေးများ၏အာဂျင်တီးနားများမှာချိုလုံလောက်။ ဗင်နီဇွဲလား အလွအပါရ။ ဒီမှာသာသဘာဝအလှအပအလွန်လေးစားဒါပေမယ့်လည်းအပူနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အမျိုးသမီးတိုင်းမျက်စိမေတ္တာ။ ဗင်နီဇွဲရှိအမျိုးမျိုးသောလွဲချော်ကမာၻ၊ခိုင္သင္းၾကည္နှင့်အခြားဆုများစေတတ်သောငါတို့ယုံကြည်သောမိန်းကလေးများဒီယာကယ့်ကိုပူပြင်းခြင်းနှင့်အယူခံအောင်ပြင်ပကမ္ဘာရဲ့လူ ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည်သာတစ်ပြည်သဘာဝအလှပေမယ့်လည်းတစ်နေရာကိုလူအချိုနဲ့အဆင်းလှသော။ အမျိုးသမီးနှင့်မိန်းကလေးများ၏အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပိုင်ထူးခြားလှ။ သူတို့ချစ်ဖို့စတိုင်သူတို့ရဲ့ဆံပင်နှုန်းအဖြစ်လက်ရှိဖက်ရှင်ခေတ၊အရာအပေါင်းအမှတ်ကိုမြှင့်တင်ရန်ဖို့သူတို့ရဲ့အလှအပနှင့်အယူခံ။
အဆက်မပြတ်ရင်ဆိုင်နေရသောပြဿနာများမှကြွလာသောအခါအစောင့်အကိုထိန်းချုပ်ရန်အပေါ်ကြသူသုံးစွဲသူများ နှင့်ဂိမ်းကစားဆိုဒ်များတွင်အခြားလူများ။ ဒါကြောင့်ပြဿနာများရှိခဲ့ပါပြီရင်ခံတင်ပြခြင်းအားဖြင့်အခြားတရားဝင်အသုံးပြုသူများနှင့်ကိုယ်အသွားအလာများသူတွေကိုလူများအတွက်။ အဖြစ်အများအပြားရှိပါတယ်သောသူလူအလွဲသုံးစားဆိုက်နှင့်အလုပ်လေ့အသုံးပြုသူများမသက်မသာ၊မှတ်ပုံတင်အသုံးပြုသူတစ်ဦးအဖြစ်သိရသည်ခတ္။ အဆိုပါဝန်ဆောင်မှု အသံုးျနေသောလူများအတွက်အနှစ်သို့မဟုတ်အဟောင်းတွေ။ ဆိုက်အတွက်ခေါ်တင်းကြပ်တိုင်းတာ။ ထို့ကြောင့်အသုံးပြုသူများသူချွတ်သို့မဟုတ်အဝတ်အချည်းစည်းများ၏ရှေ့မှောက်၌၊ကင်မရာအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံ နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဖြစ်နိုင်ပိတ်ပင်ထိထိရောက်ရောက်။ ဆိုက်တစ်ခုရှိပါတယ်တိုေကုဒ်မျိုးဆက်နှင့်အတည်ပြုအစီအစဉ်အရပျ၌။ အတွက်အသုံးပြုသူအဖြစ်လက်ခံဖို့ခွင့်ပြုအဖြစ်အသုံးပြုဝန်ဆောင်မှု၊ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးစေလွှတ်လိမ့်မည်စာတိုေကုဒ်အရာဖြစ်လိမ့်မည်ကျပန်းထုတ်လုပ်။ အသုံးပြုသူအမျိုးအစားအတွက်ကုဒ်ကြောင်းသိရသည်စေလွှတ်ဖို့မိုဘိုင်းပြီးတော့ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုနိုင်။ ဒီတွေအများကြီးအသုံးပြုသူများအဆိုးအဖြစ်သူတို့လိုအပ်သုံးစွဲဖို့မိုဘိုင်းလ်နံပါတ်ကိုရဖို့ပေါ်။ ဒီအဖြစ်နိုင်သမျှမပါတွက်အသုံးပြုသူအများအပြား။ အဆိုပါပြဿနာနှင့်အတူဤနည်းလမ်းကိုသောအပြားရှိနေကြသည်မဟုတ်ကြသူအသုံးပြုသူများမိုဘိုင်းဒါပေမယ့်ချင်တယ်။ ထို့ကြောင့်အသုံးပြုသူများရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသောသူတစ်ဦးမိုဘိုင်းလ်ဖုန်းမသုံးစွဲဖို့ချက်တင်ဝန်ဆောင်မှု။ ဒုတိယပြဿနာကလူတွေကြုံတွေ့ရကြောင်းအမ်ကုဒ်စနစ်တခါတရံတွင်အလုပ်မလုပ်ပါဘူးဖြစ်ပြီးအသုံးပြုသူများအလာပြီဖြစ်ကြောင်းမကြာခဏသော့ခတ် ထွက်၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ပေးသည်ချက်တင်ဝန်ဆောင်မှု။ မတားျကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများနှင့်အတူမည်သည့်အခြေအနေသော်လည်း။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရန်အရပျ၌ဘန်ကီမွန်းသောသူတို့အားအသုံးပြုသူများထိတွေ့ဆက်ဆံနေကြမှာမလိုချင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုများအပေါ်။ ကျနော်တို့ကျပန်းတစ်စုံနှင့်အတူလူနှင့်အတူအဘယ်သူ၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်နှင့်သွေးခုန်နှုန်းကိုချက်တင်ပလီကေးရှင်းသတ်ပစ်ရန်ပျင်းနှင့်ဖန်တီးရန်အဘို့အရာအရပ်မှလူထွက်ဆွဲထား။ ကျွန်တော်ခံစားမိသောချပြီးလည်းအများကြီးလုံခြုံရေးအစီအမံအရပ်ဌာန၌ဖြစ်စေအညစ်အသုံးပြုသူများအကြားနှင့်သူတို့အဖို့တွန့်ဆုတ်ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုနိုင်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတိုင်းသင့်အရပ်ဌာန၌သွင်းထားနှင့်နှစ်ဖက်စလုံးအသင့်အတွက်အထောက်အကောင်အထည်ဖော်။ အကယ္၍တစ်ဦးတည်းတာဝန်ယူပြီးအသုံးပြုသူများအဖို့ဆက်လက်အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းနှင့်အလုတ္တစ္ခုက ။ ထို့ကြောင့်အသုံးပြုသူများကိုလည်းနှင့်အတူလိုက်နာမှုစည်းမျဉ်းများနှင့်ရှောင်ရှားဆိုက်အသုံးပြုခြင်းများအတွက်လိင်နှင့်အခြားကိုယ်အပြုအမူ။ အဘယ်သူမျှမနှင့်အတူမှတ်ပုံတင်နှင့်အမ်အင်း၊သင်များနှင့်အတူတွဲနိုင်ပါတယ်အလွယ်တကူလူတွေမပါဘဲမည်သည့်အချိန်-စားသုံးလုပ်ရ။ ဤသည်အကောင်းဆုံးအရာကတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများကိုခံစားဖို့အလပ် ဝန်ဆောင်မှု၏။
မမုန်းပါဘူးအစားအစာ။ ငါချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုရီးယားအစားအစာ။ ကိုယ့်ကိုမုန်းရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့အနည်းငယ်ကွဲပြား။ သင်တန်း၏၊အမျိုးမျိုး၏ရွေးချယ်မှုအစက်အားဖြင့်။ မာက္ကိုးရီးယားအလွန် ၊ဒါကြောင့်အားလုံး၏စားေသာက္ဆိုင္မ်ား တွေ့ဆုံအပြီးဆီသို့ဦးတည်အရသာလိုအပ်ချက်များကို၏ပျမ်းမျှကိုးရီးယား။ ဒါမှမဟုတ်ဒါဟာကင္မ္ခ်ီသောစိတ်ကူးစိတ်သန်း။ သီစိုစွတ်ခြင်းနှင့်ပူပြင်း။ တစ်ခုတူခံစားရ အပေါင်းတို့သည်အချိန်။ ငါထွက်သွားလတ်ဆတ်သောနှင့်သန့်ရှင်းရေးကနေရေချိုးခန်းပြီးနောက်မိနစ်အမြစ်များစီးဆင်းမှုအောက်မှာငါ့အကြက္။ ဒါဟာစင်ကြယ်သောငရဲပြင်ဘက်အခါ လာ။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အ ကြီးကျယ်သောငါးများစတင်သေဆုံးဖို့အတွက်ရေ၏ငါးမွေးမြူရေးခြံအတွက်အရှေ့အရပ်၏။ ငါများသောအားဖြင့်ကိုယ့်ဝှက်အောက်ေလေအးေပးစက္ဖြစ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးနေဖို့အပြင်ဘက်အချိန်ကြာမြင့်စွာကာလအဘို့။ အများဆုံးတစ်ခုမှာအနှောက်အယှက်အရာဖြစ် ကွဲ။ ဤသူ ထိုင်နေကြတယ်နှင့်ဟစ်တိုင်းသစ်ပင်မှအစောပိုင်းဇွန်လမှစက်တင်ဘာလနှောင်းပိုင်း။ ယှက်ဆူညံျ။ ဆောင်းရာသီချမ်းအေးနှင့်လေထန်။ စတဲ့လေပြင်းထန်ဖြစ်ကြောင်း၊သူတို့ရောက်ရှိနိုင်အထိကီလိုမီတာ။ သူတို့ပဲတွားအောက်၏အဝတ်ကိုကိုခိုးယူခဲ့သည့်သဲလွန်စများ၏နွေးထွေးပြီးခဲသင့်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကို။ ကျွန်တော်စဉ်းစားအလျောက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်အတူအပြည့်အဝအပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျွမ်းကျင်မှုအတွက်ဗမာ၊ထို့အပြင်၊အဂၤလိပ္စာေလ့လာဒုတိယဘာသာစကားအလျောက်ပေးၽြန္ုပ္၏အသိပညာအနည်းအလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြကြောင်းနဲ့အလုပ်လုပ်မှကြွလာသောအခါလေ့လာနေတဲ့နိုင်ငံခြားဘာသာစကား။ ငါနားလည်ကြောင်းဤသည်ကအကောင်းဆုံးစနစ်အတူတက်ကြပြီအဖြစ်ဒါကြောင့်အခုထိစစ္ျပယ်ပေါင်းများစွာပညာရှင်ပီသစွာလိမ္မာ။ ကျောင်းသားများစတင်လေ့လာနေဗမာစမူလတန်းကျောင်းကနေရာအနှံ့အသက်၊ဒါပေမယ့်အခါ၊သူတို့အထက်တန်းကျောင်းဘွဲ့ရနှင့်တက္ကသိုလ်ဝင်၊သူတို့မပွောနိုငျမှာအားလုံး။ တစ်ခုခုရွားကိုအတူအမှားလမ်းကိုသူတို့သွန်သင်သည်။ ငါတွေ့ပြီများအပြားအားနည်းချက်များနှင့်အများအပြား တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန်နည်းလမ်းများသင်ကြားနည်းစနစ်။ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားေရွမွာအတော်လေးအနာဂတ်-သက်သေအထောက်အလုပ်မှာအနည်းဆုံးများအတွက်စုံတွဲတစ်တွဲဆယ်စုနှစ်များစွာ။ ကျနော်ပထမဦးဆုံးရောက်ရှိရီးယားမှာ၊ငါတုန်လှုပ်ခဲ့။ ငါနိုင်ဘူးလို့ယုံကြည်တဲ့လူတွေအတွက်အသက်ရှင်ခြားတိုင်းပြည်တူနိုင်ဟုထင်ရလူမှအခြားဂြိုဟ်။ တကယ်တော့ကျွန်မတို့အားလုံးအသက်ရှင်အပေါ်သေးငယ်သောမြေကြီးနေဆဲအကြှနျုပျကိုစောင့်ရှောက်အံ့သောကြောင့်ကင္မ္ခ်ီကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ဂြိုဟ်သားများအတွက်။ ေဖၚျအရာ၊ဟုတ်ပါတယ်၊ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါအတပါးသူတို့အဘို့အအဖြစ်ကိုကောင်းစွာ။ ငါသည်အခြားအဆင့်အလိုက်အတွက်သူတို့ကိုရှိခြင်းကိုရီးယားခန္ဓာကိုယ်ပေမယ့်မတူညီသောလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုစနစ်။ ငါသည်စဉ်းစားအားလုံး၏ကင္မ္ခ်ီတာနဲ့သင့်အတွက်တစ်ဘဝခရီး ဇုန္အကြားတွင်တောင်နှင့်မြောက်ကိုရီးယားကြောင့်ဤနယ်နိမိတ်အကြည့်နဲ့တူ။ ကိုးရီးယားလူအလမ်းအရမ်းစပ်စု။ သူတို့အဘယ်သူမျှမသဘောမျိုးမေးကိုယ်ရေးကိုယ်တာမေးခွန်းတွေအတွက်အနောက်ပိုင်းနှင့်အလယ်ပိုင်းဒေသကမ္ဘာ့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ္။ သူအချို့လူရှိပါတယ်ရုံရချင်အောက်တွင်သင့်ရဲ့အသားအရေ၊နှင့်နှစ်ဦးစလုံးသည်အကျိုးဆက်နှင့်လိုအပ်ချက်များ၏အခြားအရည်အသွေး။ ကင္မ္ခ်ီများမှာ ကိုးရီးယားလူအများမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အရည်အသွေးရဲ့အောင်မြင်မှု၊သူတို့ကအစဉ်မပြတ်ကိုက်ညီဖို့ကြိုးစားသူတို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်သူတို့ကိုယ်သူတို့နှင့်အတူအသီးအသီးအခြား။ သူတို့ကြိုးစားသရုပ်ပြဖို့အချို့ပြင်ပ၏ဂုဏ်အဘယ်အရာကိုသူတို့ယုံကြည်ကိုယ်တိုင်ယုံကြည်ဖို့ပုံရိပ်တစ်ခု၏အောင်မြင်သောပုဂ္ဂိုလ်။ သူတို့သုံးစွဲတဲ့အပေါ်ငွေအများကြီးအဝတ်ကြည့်ကောင်းရှုကောင်းပေမယ့်အစားသေကၤမဟုတ်သူတို့ချစ်သောကြောင့်၊၊ဒါကြောင့်အများကြီးဒါပေမယ့်ဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သူတို့ချိုးဖဲ့။ သူတို့ခရက်ဒစ်များအတွက်ဖန်စီနှင့်စျေးကြီးကားများနှင့်ပေါင်များအတွက်တိုက်ခန်းများအတွက်ကွန်ကရစ်သေတ္တာ သူတို့ကိုယ်သူတို့မှကျွန်စနစ်၏နှစ်ပေါင်း။ ရယ်စရာအရာမေးလျှင်သင်မည်သည့်ကိုးရီးယားအဘယ်အရာကိုသူတို့မကြိုက်ကြဘူးကြောင်းမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှုဤဝေစိတ်ထဲမယ်လို့ပထမဦးဆုံးအရာသူတို့ဖော်ပြလိမ့်မည်။ ဤလူမျိုးဖြစ်စေခြင်းငှါနှစ်တိုင်၏ဝေါဟာရများအတွက်နည်းပညာ၊ဒါပေမယ့်သူတို့ရဲ့လူမှုရေးကျွမ်းကျင်မှုများ၏ပမာဏအတူတူနှစ်ပေါင်းဒါပေမယ့်နောက်ပြန်။ ငါအတွေ့အနှောက်အယှက်။ ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးသောအခါလူအမညွှန်ကြားဘူးဆိုသူတို့ဘာလိုချင်သင်တို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေခန့်မှန်းရန်၎င်းတို့၏ရည်ရွယ်ချက်။ မတစ်စိတ်။ ငါအတွက်ကြီးမားတဲ့အစိတ်အပိုင်းက အေးစက်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ဘာသာစကားပုံယဉ်ကျေးမှုဤလမ်းအတွက်ကြောင့်သာကိုးရီးယားလူစတင်သူတို့ရဲ့ဝါကျနှင့်အတူအသေးစိတ်ကိုပြီးနောက်သင်ဆောင်ကြဉ်းရန်အချက်အဆုံးသတ်မှာ။ ဗမာထဲတြင္(နှင့်ရုရှားအတွက်)ကျွန်တော်နှင့်အတူစတင်မှတ်နှင့်တော့ကျွန်တော်တို့တိုးချဲ့အပေါ်အသေးစိတ်အချက်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရှာတွေ့။ ၏အပြင်ဘက်တွင်ဆိုးလ်မြို့၌မြို့၊သင်ဆဲတတ်နိုင်သမျှကြည့်ရှုဆင်မပြေဖြစ်စဉ်အခါကင္မ္ခ်ီမြင်အနက်ရောင်သို့မဟုတ်အဖြူ။ သူတိုဖို့ဓါတ်ပုံတွေကိုယူ။ သူတို့ဤမျှလောက်ပေးဆောင်အာရုံစိုက်ဖို့ဒါကြောင့်အချို့လူများစေခြင်းငှါရှာတွေ့စေခြင်းငှါ၊ကောင်းကင်။ ငါမြင်ရပါဘူးလက်ကိုကိုင်ပြီးလမ်းများပေါ်တွင်။ ဒါဟာပုံမှန်ပါပဲ။ သူတို့မလိင်၊ဒီရုံ၏နိမိတ်လက္ခဏာကို။ ကံကောင်းထောက်မစွာ၊ဘုရားသခင်ကယ်တင်ငါ့မျက်စိနှင့်မမြင်ရလည်းမကြာခဏ။ ယောက်ျားတွေလည်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအထွေထွေအတွက်၊သူတို့သည်အသီးအခြားမထိသောအတိုင်းအလိုအနောက်တိုင်းနှင့်ရုရှား(ဖြောင့်)လူအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစား။ ခဲ့တဲ့အတွက်အားကစားရုံရှိခဲ့သာနှစ်ဦးယောက်ျားတွေနှင့်အတူငါ့အကျင့်ကိုကျင့်နာကျင်မှု။ တစ်ခုချင်းစီပြီးနောက်၊သူတို့အထိအချင်းချင်းရဲ့အဖျားမှအားလုံးပွဲနှင့်အသံ၊သူတို့အတော်လေးနှစ်သက် နှင့်အတူအသီးအသီးအခြား။ အဝတ်အထည်နှင့်ဖိနပ်များမှာ ၊နှင့်အရည်အသွေးအလွန်အမင်းနိမ့်သည်။ အလိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ထုတ်ကုန်တွေကိုအဆိုပြု။ ဒါဟာမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကြိုးစားရှာတွေ့မှအချို့သောအမှန်တကယ်ထူးခြားတဲ့နှင့်အကောင်း-ရှာနေအဝတ်များ၏လျောက်ပတ်သောအရည်အသွေး။ ဒါကြောင့်နေရာတိုင်းတွင်အတွေ့အလမ်းများ၊တီဗီ၊ရေဒီယို၊စားသောက်ဆိုင်သို့မဟုတ်ဖေး၊ရုပ်ရှင်ရုံ၊၊အဆိုပါဖုန်းများ၏လူများပတ်ပတ်လည်။ ဒါကြောင့်ခက်ခဲသည်မှလွတ်မြောက်ရန်ဤ ၊စိတ်ကိုထုံ၊။ ငါအံ့သြပါဘူးဖြစ်ကြောင်းကိုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ထောက်ခံ(သို့မဟုတ်ငါဆိုသည်ကားသင့်ပါတယ်။)အစိုးရက။ ထိုသို့ထိန်းချုပ်မှုပိုမိုလွယ်ကူင်လူစောင့်ရှောက်လျှင်မိမိတို့ဉာရည်မှန်းချက်မှာအဆင့်-။ နောက်ထပ်၊ဒါကြောင့်အကြီးအကျယ်ဘီလီယံဒေါ်လာစက်မှုလုပ်ငန်းယုံကြည်ပါတယ်သောစောင့်ရှောက်စိုးရအလွန်အရေးကြေးရေးကျေနပ်မှု။ မွစ၍ေၾကာက္စရိဆိုင်းဘုတ်ပေါ်အလမ်းနှင့်အတူပြီးဆုံးကြော်ငြာအပေါ်ရုပ်သံနှင့်ရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာ၊အရာအားလုံးမှာအော်ဟစ်။ ထမ်းဆောင်တူညီမစ်ရှင်အဖြစ်ကေပေါ့ပ်၊ကိုးရီးယားကြော်ငြာများကိုအလွန်အမင်းထိရောက်သော ပိန်းပျိုးထောင်သစ်ရဲ့သားစဉ်မြေးဆက် မှိုင်း ။ ငါမြင်ကြပြီအများအပြား ပစ်ခတ်နှင့်ညွှန်ကြားရေးကြော်ငြာများအတွက်ငါ့အသက်ကို။ ခြယ်လှယ်၏အများစုကိုးရီးယားကြော်ငြာများလိုပဲဖြစ်ထုတ်လုပ်အားဖြင့်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့၏လေ့ကော် ။ ကျေးဇူးပြုပြီးပိတ်ပါ။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကအိမ်ရှင်ထက်ပို။ ထိုကဲ့သို့သောယုတ္တိ သတ်မှတ်အတူကွဲပြားမှုများ၏စိတ်ထဲတွင်၊၊အရသာ၊ဝါသနာ၊အတွေးအခေါ်။ တူညီသောအရသာများအတွက်အစားအစာ။ လူတိုင်းကိုချစ်ဆန်။ ငါချစ်ဆန်လွန်း၊ဒါပေမယ့်ငါမစားနိုင်လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်။ ငါနိုင်စွမ်းအစားထဲကရုရှားသုပ်၊သို့မဟုတ်ဂျူးအသားညှပ်ပေါင်နှင့်အတူ ၊ဒါမှမဟုတ်ဂျော်ဂျီယန်အကင်အစားအစာ၊သို့မဟုတ်တစ်လျောက်ပတ်သောစကား၊သို့မဟုတ်အရာအားလုံးအိမ်ပြန်ပါ။ တူညီတဲ့အရသာအတွက်။ လူတိုင်းနားထောင်ဖို့-နှင့် (ရွန်နစ်ကခုန်ဂီတ)။ လူအများကြီးမသိရပါဘူးအဘယ်သို့သောအကြောင်းအခြားယဉ်ကျေးမှုများပူဇော်ဖို့ရှိသည်။…
အဖြစ်ကျွန်တော်တို့အပေါ်တိုက်ရိုက်ဒီခေတ်သစ်ရာစုထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရှိပါတယ်ယားတစ်ဦးတစ်အွန်လိုင်းမှာရှချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များအဘို့မေတ္တာနှင့်အချစ်ဇာတ်လမ်း၊ဆက်ဆံရေးနှင့်အိမ်ထောင်ပြု။ အပေါ်ကိုရီးယားချိန်းတွေ့၊သင်မြင်ထောင်ပေါင်းများစွာသောသို့မဟုတ်ပင်သန်းပေါင်းများစွာသောတစ်ခုတည်းအမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအတွက်ရီးယားနှင့်အခြားနိုင်ငံများတင္ထားသည္င်းတို့ကိုယ်ပိုင်ပရိုဖိုင်း။ ကိုရီးယားမိန်းကလေးများချိန်းတွေ့ကနေကိုရီးယားချိန်းတွေ့ဆိုက်သူများအတွက်ရှာဖွေလိုတဲ့သူတို့ရဲ့အပေါင်းအသင်း။ သူတို့ပြောင်းလဲချင်တာသို့သူတို့ဘဝရီးစဉ်အလာအတွက်အမေရိကအသက်ရှင်ရန်။ သူတို့ရှိသည်ချင်တယ်၊ပိုကောင်းတဲ့အနာဂတ်အတွက်သူတို့နဲ့သူတို့သားသမီးပြီးနောက်။ မှာအားလုံးဖြစ်ရပ်များရှိပါတယ်၊အချို့အဆင်းလှသောအမှုအရာအကြောင်းကိုကိုးရီးယားအမျိုးသမီးများအတွက်ထောင်။ အမျိုးသမီးရီးယားအပါးပါး၊ပါးပါး၊စိန္သီး။ သူတို့နိုင်အောင်ချက်ပြုတ်အရသာအစားအစာနှင့်တန်ဖိုးကိုအိမ်အကျင့်ကိုကျင့်။ ကိုးရီးယားတစ်ခုတည်းအမျိုးသမီးရှာဖွေနေအမျိုးသားများအတွက်အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့်အင်တာနက်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ။ အဆိုပါမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်၊အဘယ်ကြောင့်အမျိုးသမီးကိုရီးယားမှာရွေးချယ်ရှာဖွေဖို့အွန်လိုင်းယောက်ျား။ တစ်ခုတည်းကိုးရီးယားအမျိုးသမီးများရှာလျက်အမျိုးသားဒီနေ့ခေတ်အွန်လိုင်းသောကြောင့်၊သူတို့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ပြည့်စုံသောပွဲစဉ်။ ကိုရီးယားအမျိုးသမီးတွေအရမ်းစမတ်ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာ၊သူတို့မသွားဖို့တစ်ခုတည်းသို့မဟုတ်အရက်ဆိုင်ကလပ်အသင်းရှာဖို့ရေတိုရေရှည်ရက်စွဲများအဘို့အကြာရှည်ကြောင်းတစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုညတော့ဘူး။ သူတို့ပဲသွားမှကိုအင်တာနက်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များရှာဖွေရန်စစ်မှန်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်အမှန်ခြစ်။ အဆိုပါခရီးကိုကျန်းမာယားချိန်းတွေ့၊ရင်းနှီးသော၊လူမှုရေးနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်ဆံရေးမှာစတင်အစကျွန်တော်တို့ရဲ့စွန့်စားမှု။ အပြားရှိအမြင့်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်များနှင့်မျှော်မှန်းသို့သော်လူတိုင်းမအောင်မြင်။ အတွက်စိတ်ဝင်စားလျှင်သင်ကချိန်းတွေ့တစ်ခုတည်းကိုးရီးယားအမျိုးသမီးသို့မဟုတ် သေချာမဘယ်မှာစတင်ရန်၊သို့ဖြစ်လျှင်ဤဆောင်းပါးကိုသင်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်၌လှုပ်ရှား။ သင်ယူနောက်ဆုံးပေါ်နည်းစနစ်နှင့်အတူစတင်ရကိုးရီးယား။ မဖြစ်သင့်တစ်ခုတည်းကြောင့်၎င်း၏အထီးကျန်။ ကိုရီးယား၏သုတေသနရွေးကောက်သည်သာတည်းနေ့ခေတ်အွန်လိုင်း။ အထူးသဖြင့်၊သုတေသန၏အရက်စွဲများပေါ်မှာပိုက်ကွန်အဖြစ်လွယ်ကူပြီးအဆင်ပြေပါသည်။ သင့်ရှာဖွေသင့်ရဲ့အခြားတစ်ဝက်အရာစောင့်ကြိုသင်လိုင်းပေါ်တွင်။ အဘယ်သူမျှမအခကြေးငွေအတွက်အသုံးပြုမှုလုံးဝအခမဲ့ယားချိန်းတွေ့၏။ သင်တစ်ဦးစုစုပေါင်းအမိန့်နှင့်အတူအရာသင်လိုချင်မှအသွယ်သို့ရောက်လာပြီ။ ဗွီဒီယိုအသစ်က်ဘ်ဆိုဒ်များချိန်းတွေ့သူများအတွက်မျဉ်းကြောင်းစုံတွဲများထောင်ပေါင်းများစွာ၏တည်းကနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း။ အခါသုတေသန၏အဓိကသော့ချက်စကားလုံးမြားထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အခမဲ့လိင်ချိန်းတွေ့တည်နေရာသို့မဟုတ်အခမဲ့လိင်ဝဘ်ဆိုက်များ၏ချိန်းတွေ့ခြင်းသို့မဟုတ်လိင်နှင့်ချိန်းတွေ့တည်နေရာ၊သင်မြင်ရပါလိမ့်မည်ကောင်းအရေအတွက်သူတို့ကိုဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်ဂူးဂဲလ်အပေါ်။ သင်ရုံကိုအကောင်းဆုံးနှစ်ခုစလုံးသို့မဟုတ်သုံးဆိုဒ်များနှင့်အတူမှတ်ပုံတင်ထား။ အာရှချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ကြောင်းအစည်းအဝေးအာရှအမျိုးသမီးများအတွက်အွန်လိုင်းမေတ္တာနှင့်ဆက်ဆံရေးအဖြစ်ထောင်ရေးအတွက်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်။ အခါကျွန်တော်တို့အကြောင်းကိုဖော်ပြထားအာရှမိန်းကလေးများ၊ငါတို့သည်သင်တို့ရည်ရွယ်ဂျပန်၊ထိုင်း၊တရုတ်၊အိန္ဒိယ၊ကိုရီးယား၊ဗီယက်နမ်၊ကမ္ဗောဒီးယား၊ဖိလစ်ပိုင်၊စသည်တို့ကို။ ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ဤလှပသောအမျိုးသမီးအတွက်အာရှပို့စ်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပရိုဖိုင်းနှင့်အတူအွန်လိုင်း မျှော်လင့်ချက်ကိုရှာတွေ့မှဒေသခံများနှင့်နိုင်ငံခြားခင်ပွန်း၏။ လိင်တူတစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်ရှာ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်အညီရနိုင်သူတို့ရဲ့ရလဒ်တွေအတွက်ပြုအမျိုးမျိုးသောလိင်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ။ ဤလိင်အွန်လိုင်းဆိုဒ်များနိုင်ပါပြီထုတ်လုပ်ဖို့ချီများလိင်ဆက်ဆံရေးနှင့်လိင်တူလက်ထပ်ထိမ်းမြား။ အမျိုးသားများရှာရနိုင်သူတို့အလုပ်၌ပြုသောဤလိင်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ။ လိင်ယောက်ျားသွားကြဖို့ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးမှဆိုင်သို့မဟုတ်အရက်ဆိုင်များဆိုပြီးထွက်စောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်လိင်တစ်ဦးတစ်ဒီရက်အဖြစ်လိင်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များအတွက်အိမ်မှာကွန်ပျူတာရှိဖြေရှင်းနိုင်အလာဒ္ႏ။ ယနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုချိန်းတွေ့အသုံးပြုသည်အလွန်ကြီးစွာသောသဘောတူကြားခြင်း၌ပျော်မွေ့သောလူများတင်သူတို့ရဲ့ပရိုဖိုင်နှင့်မိမိတို့တင်လိုအပ္မယ္ထင္တဲ့အပေါ်လူမှုကွန်ယက်အင်တာနက်ဆိုက်များ၊မိတ်ဆွေများနှင့်ဆက်ဆံရေးအက်ဘ်ဆိုဒ်များအဖြစ်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ။ ဒါပေမယ့်ကြိုတင်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကမ္ဘာ့အကျယ်ပြန့်သော၊လူထုကျွမ်းနှင့်အတူချိန်းတွေ့အတွက်ပိုပြီးသမားရိုးကျအသိ-ဘယ်လို။ ချိန်းတွေ့ထွင်ခဲ့သည်မှကြီးကြပ်ချိန်းတွေ့ဖို့ပေါ့ပေါ့ချိန်းတွေ့တညဉ့်ရပ်တည်ချက်။ အတိုအမျိုးမျိုးအပေါ်အမေရိကတိုက်၏အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုထောက်အကူပေးပါလိမ့်မည်၊ကျွန်တော်တို့ကိုပိုပြီးနားလည်သဘောပေါက်ဖို့အကြောင်းခြားနားချက် ချိန်းတွေ့၏အတိတ်အကြားတင်းမာနှင့်ခေတ်သစ်ကာလ။ မှကြွလာသောအခါအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့၊ရွေးချယ်ခြင်းအကောင်းဆုံးချိန်းတွေ့သောဆိုဒ်များအလွန်အရေးကြီးသည်တစ်ဦးတစ်။ သင်သည်နားလည်သဘောပေါက်ရပါမည်အကြောင်းအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုကိုချိန်းတွေ့အခြားသူများများအတွက်မဆိုလိုပါဘူးအကောင်းဆုံးအသင်တို့အဘို့အ။ အခြေအနေအပေါ်အများအပြားရှုထောင့်မှကြွလာသောအခါအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့။ သင်နှစ်သက်စေခြင်းငှါအခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များနေစဉ်အခြားသူများနှစ်သက်ပေးဆောင်ချိန်းတွေ့န်ဆောင်မှု။ သင်မည်သို့သတ်မှတ်ကောင်းတစ်ဝန်ဆောင်မှုကိုချိန်းတွေ့? ရိုးရှင်းတဲ့အဖြေရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။သင်၏အသက်တာမိတ်အွန်လိုင်း။ မကြာခဏကြိမ်ထွက်စတင်ကာနှင့်အတူအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့နိုင်ပါတယ်ခြိမ်းခြောက်ဖို့အသစ်။ မဟုတ်လျှင်သင်ကမိတ်ဆွေတစ်ဦးရှိသည်ဖို့လမ်းညွှန်အားဖြင့်သင်တို့၏လက်ကိုသင်သိစေခြင်းငှါအရာချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များကိုယုံကြည်ဖို့ကြိုးစား။ ဤဆောင်းပါး၌ငါတို့သည်အလိုတော်မှာကြည့်ရှုယူသည့်အဆုံး၏အချို့အစပြုဖော်ရွေချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များကြည့်ရှုနိုင်ကြောင်းမှာမချခင်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရွေးချယ်မှု။ ကိုရီးယားဘာသာစကားခံခဲ့သည်သိသာထင်ရှားသောအပြောင်းအလဲအတိတ်စုံတွဲတစ်တွဲဆယ်စုနှစ်များကြောင့်အနောက်တိုင်းလွှမ်းမိုးယဉ်ကျေးမှုအပေါ်။ အကျိုးဆက်၊ကိုးရီးယားဘာသာစကားဝေါဟာရ၊ နှင့်အခြား ဝိသေသလက္ခဏာများလည်းကြုံခဲ့ရလဲ။ သောကြောင့်ကိုရီးယားဘာသာစကားနေဆဲအပြောင်းအတွက်များစွာလေးစားစွာ၊အဘယ်အရာကိုတစ်ချိန်ကသင့်လျော်သောလမ်း၏အပြောသို့မဟုတ်အရေးအသားမှတစ်ဦးအထူးသဖြင့်ပရိသတ်ကို၊အခုအလွန်ကောင်းစွာခေတ်။ သာအမိန့်ကိုသေချာပါစေသင့်ရဲ့ယားဘာသာျပန္ခ်က္သည်လက်ရှိနှင့်အတွက်သင့်လျော်သော၊သာအရည်အသွေးမြင့်ဘာသာျပန္ခ်က္သင့်ကုမ္ပဏီများကိုမည်သည့်ယားမှဗမာဘာသာျပန္ခ်က္ပရော်ဖက်ရှင်နယ်များအတွက်စာရွက်စာတမ်းများ။ ရှိပါတယ်အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောအခမဲ့အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ။ အဆိုပါလှည့်ကွက်သည်ရှာဖွေဖို့အကောင်းဆုံးချိန်းတွေ့သောဆိုဒ်များအဘို့သင့်လိုအပ်ချက်များကို။ အောက်ပါအားဖြင့်ဤငါးအကြံပေးချက်များ၊သင်မည်သေချာပါစေရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ပြီးပြည့်စုံသောချိန်းတွေ့ဆိုက်။ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်အများဆုံးအမြတ်အစွန်းနယ်ပယ်အင်တာနက်ထဲမှာ။ အထူးသဖြင့်လျှင်၊ကျနော်တို့အကြောင်းပြောနေတာနေကြတယ်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များအတွက်အင်္ဂလိပ်စကားပြောဧည့်သည်များ။ ကစစ်မှန်တဲ့ရဲ့သောအယူ၊ဥပမာအားဖြင့်၊ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များများအတွက်ရုရှား။
ငါအခုထိမသေချာသောအမှု၊ရိုးသားဖို့။ ငါရှင်းပြနိုင်အမှုအရာသာကိုရီးယားအထိကျွန်တော်ကအပြာရောင်မျက်နှာကိုအတွက်၊ဒါပေမယ့်မှကြွလာသောအခါပြငါ၏အကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၊ငါ့အိမ်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၊ဒါဟာထူးဆန်းတဲ့အရာပါ။ ပုံ၌အခြားဘာသာစကားဖြင့်ရိုက်အနည်းငယ်ကွဲပြားသည်။ အဲဒါကမပြောဖို့သူတို့မသိရပါဘူးခင္ဗ်ာသို့သော်၊ကျနော်တို့က ကနေရှည်လမ်းလာကြကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးအစည်းအဝေးလွန်ခဲ့တဲ့ငါးနှစ်။ (ဤပို့စ်တွဲဖက်လင့်များပါရှိသည်၊အရာဆိုလိုသည်ရ၏တယောရာခိုင်နှုန်းရောင်းချဝယ်ယူလျှင်နှိပ်ပြီးနောက်။ ဤရန်ပုံငွေသွားဖို့ကိုထိန်းသိမ်းရန်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သင့်ရဲ့ထောက်ခံမှုများအတွက်။)ကအစားအလျင်အမြန်အတူတူထားအပျက်အကြောင်း၊ငါ့ကိုအ၊ခဲ့။ -ငါသာရှိခဲ့ပြီးချိန်းတွေ့လအနည်းငယ်အဘို့ဒါပေမယ့်တစ်ခုခုငါ့ကို၏အတွင်းကျွန်မကိုပြောပြတယ်သူအတဦးတည်းသော်လည်း၊ကျွန်တော်တို့လက်ထပ်ရန်အတွက်နောက်ထပ်သုံးနှစ်။ သူကခေါင်းချဖို့ခ်န္ဂင္၊အဘယ်မှာရှိသူ၏မိသားစုဘဝ၊ကျွန်မပြောချင်လာပြီးသူတို့ကိုခရီးဦးကြိုပြု။ မီမိနစ်ကျနော်တို့ရောက်ရှိမှာသူ့အစ်မရဲ့အိမ်သို့သော်၊-ပြောဖို့ပြင်ဆင်သောကြောင့်စုံတွဲများ၊သူတို့ရေရှည်ဒါမှမဟုတ်မ၊အဘူးအများအားဖြင့်တွေ့ဆုံရန်မိဘများသည်အထိသူတို့လက်ထပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်။ ငါအထဲကိုလမ်းလျှောက်ဝင်တစ်ခန်းနှင့်အတူသူ၏မိခင်၊သူ့အစ်မနှင့်သူ့ခင်ပွန်းနှင့်သားသမီးနှစ်ဦး။ ပြီးနောက်၊ငါအနည်းငယ်ယားဆိုတာသိမှာဖို့အချိန်ကိုယ့်ကိုကိုယ်မိတ်ဆက်၊အရာ -ခဲ့ဘာသာပြန်ဆိုဖို့သူတို့နားမလည်နိုင်ခဲ့ ငါ့ကို၊သူ၏မိခင်ရဲ့ပထမဦးဆုံးတကယ့်အကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့၊”အိုး၊ကောင်းသော။ သူမမဆီ။”ငါအတော်လေးသေချာမကြီးများအတွက်သင့်လျော်သောတုန့်ပြန်။ ဟန်ခါ -ခေါ်ခဲ့ပြီးဖော်ပြခဲ့တဲ့ခဲ့ဆောင်ခဲ့သူနိုင်ငံခြားရည်းစားသူမမေရိကန်၊သူ့အမိနိုင်ပုံကိုအချို့ကြီးမားတဲ့နောက်မိန်းကလေး။ ငါဆက်ဆက်နေဆဲထက်ပိုကြီး၊သူမနှင့်သူ၏ညီမ၊သူနှစ်ဦးစလုံးအတိုကောက်အပြည့်အဝခြေလျင်ထက်တိုတောင်းခင္ဗ်ာ။ အဆိုပါနောက်ဆက်တွဲခဲ့တဲ့ငါ့အလုပ်နှင့်အခါသူမလိုပဲအတူစိတ်ကျေနပ်မှုငါ့အလုပ်လုပ်နေမိန်းကလေးအဆင့်အတန်း၊ကျနော်တို့ကခံ့ကျန်းကြ၏။ ကျနော်တို့အတက်အဆုံးသတ်ထိုင်ပတ်ပတ်လည်သေးငယ်တဲ့စားပွဲမှာဧည့်ခန်းကြမ်းပြင်ပေါ်မှာသော်လည်း၊သူတို့ကကျွန်မကိုပြောပြဖို့နေရာကိုယ်အိပ်ရာပေါ်တွင်တစ်ဖက်တည်း။ ငါအတော်လေးသေချာမကြီးဘယ်မှာငါကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်။ ငါနှစ်ဦးအရွေးခံခဲ့ရသူ၏မိခင်၊သူပဲငေးမှာဘဲပြောတဲ့စကားလုံးအများစုအတွက်အချိန်၊သို့မဟုတ်သူ၏အစ်မပင်အချက်။ ငါအလွန်ကျေးဇူးတင်၊အဖြစ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးခဲ့ကြ၊သောနှစ်ဦးသည်အလွန်ငယ်ရွယ်တဲ့ကလေးငယ်များအတွက်အခန်းတစ်ခန်းနှင့်အတူကစားရန်ဖြည့်စွက်ရန်အဆင်မပြေငြိမ်ဝပ်စွာနေ။ -တိရစ္ဆာန်ရုံရဲ့မိခင်များမေးရင် ကြရတဲ့ထောင်နဲ့ -ကြားနေရကြောင်းရှင်းပြခဲ့သည်ကိုယ့်အလိုကိုဖြည့်ဆည်းဖို့သူတို့ကိုရှင်းပြကြောင်းဒါနဲ့ပတ်သက် ကွဲပြားခြားနားသောအကောက်ခွန်နှင့်ချိန်းတွေ့စဉ်အခါ။ ဒါဟာရှင်းလင်းပြီးနောက်၊မိသားစုကိုခဲ့မျှော်လင့်အချို့မျိုးကိုကြေငြာသောအခါအဘယ်သူမျှမလာကြ၊အဆိုပါလေကြောင်းရန်အခန်းထဲမှာ ကိုယ်တိုင်နှင့်သူ့အစ်မလေထွက်အချို့အစားအစာ၊သော်လည်းသူသည်ဆက်မကြည့်ဖို့အတွက်လာမယ့်နာရီအနည်းငယ်။ အချက်တစ်ချက်မှာ၊လူတိုင်းအခြားအခန်းတွင်ငါကျန်ခဲ့ပြီးအားဖြင့်ကိုယ်အတွက်ဧည့်ခန်းအခါ -ထွက်လာဖို့ဘယ်လိုမေးခဲ့သည်။ အမျက် တက်ငါ့မျက်မှောက်၌ကြောင့်ငါခံစားရလျှင်အဖြစ်သူ၏အစ်မငါ့ကိုအတူပိုဆိုးတာက၊ကျွန်မမသိခဲ့ပါလျှင်ခဲ့သည်၊ငါ့ကိုသို့မဟုတ်လျှင်ခဲ့တဲ့အတြက္အလုပ္လုပ္ခြခဲ့ကြောင်းသိရသည်မှဆန့်ကျင်။ အဖြစ်ယုတ္တိ၊ အဖြစ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်၊သူကသွားတယ်သူမနှင့်သူမ၏ပြောသည်သို့လာသောဧည့်ခန်း။ သူရှင်းပြခဲ့ပုံ၊သူမရှင်းပြခဲ့ကြောင်းနိုင်ဘူးပြောပြီးအလွန်အမင်းရှက်အကြောင်း၊ဒါပေမယ့်သူမစိတ်ထဲမလုပ်ခဲ့တဲ့အတြက္အလုပ္လုပ္ခြ။ အလေးချိန်ရုပ်သိမ်းခဲ့သည်။ တစ်အသေးစား သက္ေဆိုတဲ့အချက်ကိုအတွက်ငါခံရသောနိုင်ငံခြား၊အဓိကစိတ်ကူးကအနည်းဆုံး၊မကြီးဖို့ခြိမ်းခြောက်မိမိမိသားစု။ အလေးချိန်အပြန်လာအပေါ်သို့ငါ၏တောင်းပန်သောအခါကျွန်တော်ဟာအစည်းအဝေးကိုရှေးဘိုးဘေးများ၏မိသားစု -တိရစ္ဆာန်ရုံရဲ့အမေအကြောင်းရှင်းပြသော်လည်း၊သူတို့ပျော်ရွှင်ခဲ့ကြဖြည့်ဆည်းဖို့၊ငါ့ကိုငါမဟုတ္ဘူး၊အစည်းအဝေး၏ဖခင်သည်အထိတစ်ထောင်ရေးကြေငြာသို့မဟုတ်အနည်းဆုံးပိုပြီးအတိအကျနဲ့ရေရှည်ဆက်ဆံရေးအဆင့်အတန်း။ ရှေးရိုးစွဲအရင္လုိငါကြားကြောင်းသူ့မိသားစုကျင်းပမှန်တွင်ဤသဘောမျိုးနှင့်မဖြည့်ဆည်း -တိရစ္ဆာန်ရုံရဲ့အဖေအထိနှစ်နှစ်သို့မဟုတ်ဒီတော့ပြီးနောက်။ သူ၏မိသားစုဖြစ်လာလေ့နှင့်ငါ့ရောက်လေ့လာ၊ငါသည်သူတို့ကို။ ကျွန်တော်တို့မှာသူ့အစ်မရဲ့အိမ်တိုင်းကျနော်တို့သွားခ်န္ဂင္ရာမပြောင်းလဲမှီတိုငျအောငျချင်ပါတယ်ဆည်းပူးလက်ထပ်ကြရန်ဖိတ်ခေါ်အိပ်မှာသူ့မိဘရဲ့အိမ်။ သူ့အစ်ဝယ်သေးငယ်တဲ့သားညှပ်ပေါင်သို့မဟုတ်အသီးကိုစားသည်နံနက်အချိန်၌သိသောကြီးမားတဲ့ပန်းကန်၏ဆန်နှင့်ပိတ္စမဟုတ်ကယ့်ကိုငါဘာတဏှာ၌နာရီလောက်မှာနံနက်။ သူတို့ကလည်းသဘောပေါက်လာငါတော့မစားသိပ်ဆန်မှာ အားလုံး၊ဒါကြောင့်အများကြီးပိုကောင်းအပေးအကြောင်းတဝက်အဖြစ်အများကြီးသူတို့ပေးသောအခြားလူနှင့်အငယ်အရွယ်အကူညီပေးမယ့်အစား။ ကျွန်တော်ဖြစ်လာဖို့အသုံးပြုသူ၏မိသားစုအဆက်မပြတ်တောင်းဆိုနေလျှင်သူတို့ဝယ်လို့ရငါ့ကိုတစ်ခုခုသို့မဟုတ်ငါ့ကိုတစ်ခုခုသောသော်လည်းငါမတွေ့ကြိုဆို၊ငါလည်းအတွေ့အလွန်အမင်းမပြေသောကြောင့်၊ငါကယ့်ကိုလုပ်လိုဘဲမဟုတ်သလိုဘာမှမယေဘုယျအားနှင့်အမှုအရာ၊သူတို့အကြံပြုမယ်လို့ခံစားရတယ်ထက်ပိုခဲ့ကြရပါမည်ပူဇော်ဖို့ကိုယ့်ရည်းစား။ သူတို့သည်ဇွဲနှင့် -ချင်ပါတယ်သူတို့ကိုပြောပြကြောင်းအရာတစ်ခုခုတော်ွစ္ဖက္စလံုး။ -တိရစ္ဆာန်ရုံဖွင့်မိဖို့အသုံးပြုတယ်၊ကျနော်ထင်လိုခံစားလာသိရသည်၊ငါ၏ဆုတ်အပေါ်တစ်မျိုးခါသူမ၏တွေ့ဆုံရန်နှင့်နှုတ်ဆက်။ ယခု၊ပင် -ဝင်မှာအဘို့အပွေ့ဖက်ကနေသူ့အမေ၊သူတို့ဟာဘယ်တော့မှမပြုမီငါတလျှောက်လာ။၊။ အလွန်ရှေးရိုးစွဲတန်ဖိုးကိုအကြာမယ်လို့ဘယ်လောက်ကြည့်ရှေးရိုးစွဲသောအခါငါတွေ့ -တိရစ္ဆာန်ရုံ၏အဘ၊ငါ့အဘို့ခဲယဉ်းနားလည်သဘောပေါက်ရန်။ မိမိတို့မရှိခြင်း၏ခ်က္သေယာင္လည္းပြုံးသို့မဟုတ်သံသို့မဟုတ်စကားမဆိုကြင်နာခဲ့ကြောင်းနောက်ထပ်အရာမွေ အစာကြေ။ ရှေ့တော်၌ကျွန်ုပ်တို့၏မင်္ဂလာဆောင်အခမ်းအနားကိုရီးယားမှာ၊ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏မိသားစုများနှင့်အတူတကွအစာစားပြီးကျွန်မမထင်ခဲ့တဲ့အထိအခိုက်အကြောင်း -တိရစ္ဆာန်ရုံရဲ့မိသားစုနားလည်ဘယ်ကြောင့်ငါအမြဲကြိုးစားနေဖို့ကွဲဟာသတစ်ခုဒါမှမဟုတ်ဂိမ်းကစားတစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူ။ ငါ့မိသားစုဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်ပြီးပြည့်စုံသောဆန့်ကျင်ဘက်ဝေါဟာရများအတွက်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့လုပ်ပါသည့်အခါကျနော်တို့အတူတကွ။ ပြီးနောက်န့်ညက်၊-တိရစ္ဆာန်ရုံရဲ့မိသားစုခဲ့ပါဘူးဖြစ်ပုံပေါ်မသက်မသာနှင့်အတူငါ့စေရန်လိုအပ်သည်လူတိုင်းကိုအပြုံးသို့မဟုတ်ရယ်ငါ့ပတ်လည်သို့မဟုတ်ကိုယ့်လေထုယေဘုယျအားဖြင့်ပိုပြီးပုံစံမျိုးထက်အတော်လေးအလေးအနက်လေထုအကြောင်းသူတို့ရဲ့မိသားစုကိုထိန်းသိမ်းထား။ ကျွန်တော်အလွန်ကံကောင်းသမီးယောက္ခမနှင့်အတူကိုရီးယားမိသားစုအကြောင်းခန့်ထားပြီနိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးချယ်မှုကိုလက်ထပ်ဖို့ထက်ပိုခက်ခဲခဲ့သည်။ ငါဝမ်းသာတယ်သူတို့ကိုယ့်အဖြစ်လက်ခံအဖြစ်ငါ့မိသားစုကအ -။ သော်လည်းနေဆဲရှိပါတယ်အချို့သောအမှုအရာအကြောင်းထူးဆန်းပုံရဖို့၊ကြိုက်သည့်အခါသူ့မိခင်ပို့ၽြန္ုပ္၏သေတ္တာပန်းသီးတစ်အိတ်၊ဆန်နှင့်အခြေအိတ်အတွက်နွေဦးသို့မဟုတ်အထွက်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု၏အပြာရောင်နှင့်ကိုယ့်မေးလျှင်ငါ၏အပူပေးစက်သည်အလုပ်လုပ်မနှင့်အတူယခင်အရိပ်အယောင် မဟုတ်ခဲ့ငါသိသူမဂရုစိုကျ၊နှင့်ဤသူမ၏ဖေါ်ပြခြင်း။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားပြောဆိုချက်တွေကိုမနက်သို့မဟုတ်မှတ်ချက်-ထိုက်၊ဒါပေမယ့်သူတို့ငါတို့ဥစ်စာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးသည်အခြားသောတူငါရှိသည်သောအစဉ်အဆက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ လက်ခံအားဖြင့်အမျိုးသမီး၏မိသားစုကအကြောင်းရင်းစသင္ယူကိုးရီးယားအနက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်နိုင်ပြီစကားပြောဆိုချက်တွေကိုအခုတောင်မှသူတို့ရဲ့တောင်ပိုင်းဘန်းနှင့်ငါ၏မြောက်ပိုင်းအင်္ဂလိပ်နေဆဲကိုတစ်ဦးကိုဆီးတားဖြစ်လိမ့်မည်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်။ ငါးနှစ်ကျော်သွားကြပြီကတည်းကပထမဦးဆုံးအစည်းအဝေးနှင့်ငါနေဆဲခံစားရလို့သိချင်တာအများကြီးပိုဤအကြောင်းကိုမိသားစုလိုက်ထောင်သို့ရောက်သေးတာသေချာပါတယ်ပြီးနောက်နောက်ထပ်ငါးနှစ်ရှိနေဆဲပဲဖြစ်အများအပြားမေးခွန်းများကို။ ငါအတွေ့အကြုံအများအပြားတူညီတဲ့အဆင်မပြေအချိန်လေး။ ငါလက်ထပ်ဂျာမန်နှင့်သင်ယူဂျာမန်အထူးသဖြင့်၊ဒါကြောင့်ကျွန်မဆက်သွယ်သူ့မိသားစုနှင့်အတူအဘယ်သူကိုပြောဆို ခဲ့ကြသည်။ သင့်ရဲ့ယဥ္ေက်းမႈတစ္မ်ဳိးလးေကြွယ်ဝ၏အသက်တာအတွက်နည်းလမ်းတွေသင်ပင်မြင်ရသေး။ ငါစေလွှတ်မည်သင်သည်ကောင်းချီးများစွာနှင့်အကောင်းဆုံးဆန္ဒကို။ ကျောက်စိမ်းသင့်ကိုငါသိပ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ကျောက်စိမ်း။ ငါလုံးဝယုံကြည် ။ ငါဘာသာျပန္ခ်က္ပြီးသားအများကြီးသင်ယူသူတို့မှ၊ဒါပေမယ့်အများကြီးပိုငါသင်ယူချင်နေဆဲ။ နိုးတဲ့အစိတ်အပိုင်းအကြောင်းကိုပွေ့ဖက်။ ကျွန်မတို့အားလုံးနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းလည်း၊ထိုသို့အစဉ်အမြဲအံ့သြဖွယ်တော့၊ဒါပေမယ့်သူတို့မသိမကြိုက်ဘူး။ -ဟက်တာအခါတစ်စုံတစ်ဦးသင်ပို့လွှတ်လိုက်တဲ့အကွက်အသီးသီး၏အဓိသူတို့စောင့်ရှောက်မှုနှင့်ပတ်သက်။ အမေပို့ၽြန္ုပ္၏သေတ္တာများအသီးအပြာရောင်များထဲကကဲ့သို့ကောင်းစွာတခါတရံသုံးပုံး-ဟက်တာ။ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ခေါ်နဲ့မေးရင်ကြိုက်တဲ့ပန်းသီး။ ကျနော်ဟုတ်ပါတယ်ပြောပါတယ်နဲ့သူတို့သူမသည်တက်ချိတ်။ ငါတီအဘယ်ကြောင့်နားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့သေတ္တာပန်းသီးနှင့်အတူရောက်ရှိလာသည်နက်ဖြန်နေ့၌။ နည်းလမ်းတစ်ခုလည်းအများအပြားကိုယ့်အဘို့အနှစ်အပြီးစားရန်ကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ရှေ့မှာပုပ်စပ်လျက်ရှိ၏။ ငါခဲ့သည်အောင်ပန်းသီးယို၊ပန်းသီးမုန့်၊ပန်းသီးပိုင်နှင့်မည်သည့်မိတ်ဆွေများလာသည်ဟုကျော်ငါစေလွှတ်သူတို့ကိုအိမ်မှာပန်းသီးနှင့်အတူ။ ၊ကျွန်မလိုပန်း၊ဒါပေမယ့်မသိပ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆန်။ အဲ့လေးလံသည်၊အရာကိုဆိုလိုသည်ကိုစာပို့လေစျေးကြီး။ သူမသည်အလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ခုခုသို့မဟုတ်အခြားသူသည်သွားခဲ့သည်မှာသူအစ့်အိမ္။ ကျွန်တော်မေးလျှင်ငါသွားနိုင်နှင့်တွေ့ဆုံရန်သူ့မိသားစုနဲ့သူငါ့ကိုယူခဲ့ပါဖော်ပြထားတီ မှီတိုငျအောငျခဲ့မှာတံခါးကကိုရီးယားမိသားစုများရပါတီအားလုံးအကြောင်းဤဘလော့ဂ်ပေါ်မှာမဟုတ်ရင်ဖော်ပြထားသည့်မဟုတ်လျှင်အခြံမြေများ၏ဝိညာဉ်ဆိုးလ်နှင့်အမသည်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ။
ကစားသမား၊တာယာ နှင့်လက်ထပ်ပြီးယောက်ျားယေဘုယျချင်ကြပါဘူးအထွက်ဆပ်ဖို့ငွေအတွက်စားသုံးစိတ္ကိုျရေးရာနှင့် ။ တင်ထားသောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအဉာဏ်အလင်းဆောင်းပါး”အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ၊”ဆိုဒ်များတင်ပြခဲ့ကြကြောင်းအရအများဆုံးဖွယ်ရှိသင်တို့အတစ်လိုက်ဖက်ကိုက်ညီ။ သူတို့ပြောကဲဖြတ်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ”အပုဂ္ဂလုပ်ငန်းစဉ်”အဖြစ်ကွဲပြားခြားနားတဲ့လူတွေကွဲပြားခြားနားသောအလိုဆန္ဒ၊လိုအပ်ချက်များ၊ရည်မှန်းချက်များအတွက်သူတို့၏ရင်ခုန်စရာဘဝတွေကို။ သို့သျောလညျး၊အဆိုအရသူတို့ကိုယ်တိုင်သုတေသန၏ပြိုင်ဘက်၊အချို့သောအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များကာင္းတဲ့အလုပ်မြှင့်တင်မှာကျူးလွန်ဆက်ဆံရေးနှင့်အိမ်ထောင်ပြု။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စအဘယျသို့သင်တို့အဘို့အရှာဖွေနေပါတယ်ပေါ့ပေါ့ ၊မင်္ဂလာဆောင်၊၊ဆက်ဆံရေးကိုနှင့်အတူလူတို့နှင့်အတူဆက်ဆံရေးကိုအမျိုးသမီးတစ်ဦး နည်းနည်းအရာအားလုံးကိုကိုးရီးယားအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့လိုက်လျောညီထွေနိုင်ပါ။ နှစ်ဦးအချက်များကယ့်ကိုထားကိုးရီးယားချိန်းတွေ့အွန်လိုင်းထံမှခြားပြီးအပြိုင်ဆိုင်မှု:ဒါဟာအကောင်းဆုံးပရိုဖိုင်း၊နှင့်အသုံးပြုခြင်းအကောင်းဆုံးအကိုက်ညီသမ်ပေါ်လာကြောင်းကိုအများဆုံးအလားအပရိုဖိုင်းကိုအထိပ်ဖြစ်ဖို့ပိုများပါတယ်၊လူ၊နှင့်ချို။ အစွန်အဖျား:အောင်မကြာခဏ၊အသေးအဖွဲမွမ်းဖို့အသင့်ပရိုဖိုင်းကိုရွှေ့နိုင်ပါတယ်သင်၏ထိပ်မှအချို့ဆိုဒ်များ’ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်နီးယား၊ပိုခတ်နှင့်အီးမေးလ်ကနေအွန်လိုင်း။ ပွဲစဉ်ကဲ့သို့ဂုဏ်သတင်းရှိပါတယ်ပိုကောင်းတဲ့နေရာကိုရှာရန်အတွက်ရေရှည်ဆက်ဆံရေးထက်ပိုပြီးအ -ဖော်ရွေယားအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့၊သိပ္ပံကုန်းကြောင်းဂုဏ်သတင်းတက်:အဆိုအရလေ့လာမှုတစ်ခု၊ဖက်နှင့် ထုတ်လုပ်အများဆုံးလက်ထပ်ထိမ်းမြားအဆိုချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များသို့မဟုတ်။ ဒါဟာအခမဲ့ဖွင့်ဆောက်လုပ်ဖို့အပရိုဖိုင်၊ဒါပေမယ့်သင်ကပေးဆောင်ဖို့ရှိသည်ဖို့ဆိုက်ကိုသုံးပါ။ ကျွန်တော့်ထင်မြင်ချက်အရ၊ပွဲကမ်းလှမ်းပိုပြီးအခွင့်အလမ်းမှဖြည့်ဆည်းသင့်ရဲ့စံပြရင်ခုန်စရာမိတ်ဖက်မှခွင့်ပြုခြင်းအားဖြင့်လွတ်လပ်စွာရှာသူတို့ရဲ့အွန်လိုင်းဒေတာဘေ့စနှင့်သူတို့ပူဇော်သက္ကာကိုမ်က္ႏွာ။ အဖြစ်ချိန်းတွေ့ ဆိုက်၊ ရှိပါတယ်ဖြစ်ခြင်းများအတွက်ဂုဏ်သတင်းဟောင်းနှင့်အိမ်ထောင်ထားသည်၊ဒါကြောင့်အကြိုက်ပဲ။”သင်လိုချင်တဲ့အရာအစာရှောင်သို့မဟုတ်အစဉ်အမြဲ။”၎င်း၏ရုပ်သံကြော်ငြာမေးတယ်။ လိုဖော်ပြခဲ့သော၊ နှင့်ကိုက်၊လည်ပင်းနှင့်လည်ပင်းအတွက်အများဆုံးလက်ထပ်ထိမ်းမြား၊နှင့်အတူ ထွက်အထိပ်အစက်အပြောက်အားဖြင့်။ ရာခိုင်နှုန်း။ နင်: အစျေးအကြီးဆုံးဆိုဒ်များ၏။ ငါကြီးမားတဲ့ပရိတ်သတ်ဘူး၏ ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာသင်ခွင့်ပြုလွတ်လပ်လပ်ရှာဖွေဒေတာဘေ့စ၏သူလူည့္စံုစံနေစဉ်၊ကန့်သတ်သင့်ရဲ့ဆက်သွယ်မှုများကိုလူသူေခါက္ပါခွန်းသင်ပယ်နေ့တိုင်း။ ငါး၏ပဒေသာကိုကမ်းလှမ်းလမ်းပိုပြီးလှုပ်ရှားမှုထက်မဆိုအခြားဆိုက်သို့သော်၊အပြန်အလှန်ခဲ့ကြသည်အလွန်အမင်းနိမ့်ကျအရည်အသွေး။ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ၊ကျွန်တော်တို့မသေချာလျှင်အဆိုပါသတင်းစကားတွေကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံရရှိခဲ့သည်တစ်ဦးထံမှစစ်မှန်သောလူသားသို့မဟုတ်လိမ်လည်။ နှိပ်ပါဒီနေရာမှာဖတ်ရှုဖို့နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးကိုတိုးတက်နိုင်ပါတယ်မှာသင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းရှာဖွေခြင်းချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်အပေါ်တစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုက်။ သင်သေချာသင်သည်သင်၏စျေးကွက်တစ်ခုအဖြစ်ကွာရှင်းသို့မဟုတ်မုဆိုးမမိန်းမ? ငါကူညီနိုင် နားလည်သောခေတ်မီစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ။ ကြကုန်အံ့ရဲ့။ အကြှနျုပျကိုအီးမေးလ်များအတွက်သုံးမိနစ်နည်းပြဘဝတိုင္ပင္ေ။ ပိုမိုလေ့လာသင်ယူမှာနန် အသက်နည်းပြအစီအစဉ်။ ဖတ်ဘုရားသခင်၊ကျေးဇူးပြုပြီးပြုပြင်ပါ။ တစ်အောင်မြင်မှုများအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လေးစား၊ဆက်ဆံရေးဥာဏ်နှင့်ကိုယ်ပိုင်အနာရောဂါငြိမ်းစရာအတွက်အမျိုးသမီးအားဖြင့်နန် ဝယ်ယူစာအုပ်ဒီမှာပါ။ အခမဲ့နေ့၌ပင်ရေကြောင်း။ စာအုပ်စင်နှင့် တြင္အြန္လိုင္းစတိုး၊ကျနှင့်အရိယာနှင့်အမေဇုံ။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အသုံးအများဆုံးအနက်အဓိပ္ပာယ်အရှင်သည်သက်ကြီးညီအစ်ကို၊ကိုရီးယားမှာ၊တစ်ညီလိမ့်မည်အများဆုံးဖွယ်ရှိခၚသူ၏သက်ကြီးညီအစ်မရှင်မယ့်အစားခေါ်အားဖြင့်သူမ၏အစစ်အမှန်မည်။ သို့သော်၊အခါ၊ကိုးရီးယားလူအားအနီးကပ်ရရှိရန်တစ်စုံတစ်ယောက်၊သူတို့လေ့လို့ခေါ်အားဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုအနီးကပ်၊ မိသားစု၏စတိုင်ခေါင်းစဉ်၊အကြောင်းပြမှသူတို့မိသားစုကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။ ဒါဟာအရေးကြီးသောတီရ ထွက်လျှင်ကိုရီးယားတောင်းဆိုသင်၏တဦးတည်းအားဖြင့်ဤခေါင်းစဉ်အဖြစ်၊လျှင်မိသားစုမှသူတို့ကို။ သူတိုတီဆိုလိုပြန်လည်အစိတ်အပိုင်းတို့မိသားစု၊ကိုယ့်အကြောင်းသင်သည်အလွန်နီးကပ်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး။ အချို့သောကိုးရီးယားပါဘူးတီတောင်းဆိုထားတူသောမိန်းကလေးကသူတို့တကယ်လို့ရှင်ကြောင့်၊သူတို့ကိုခံစားစေတယ်သောသူတို့ဘာမှမပိုတဲ့မိန်းကလေးတွေထက်လူငယ်တစ်ဦးကောင်လေးတစ်ယောက်။ အခြားသူများက၊သို့သော်၊စိတ်ထားပါစိတ်ခေါ်တဲ့မိန်းကလေးရှင်သူတို့ကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်း။ တစ်ချိန်ကသူတို့အသုံးပြုခဲ့ဖို့တောင်းဆိုထားသူမ၏အရှင်၊သူသည်အနိုင်ရှာတဲ့အစ်ကို-ညီမစတိုင်နှင့်အတူဆက်ဆံရေး။ ပင်လျှင်သင်တို့အကြောင်းအများကြီးသင်ယူပါဒီယဉ်ကျေးမှု၊၎င်း၏့အကောင်းဆုံးသင်သည်မကျင့်လျှင်ခေါ်ရန်တစ်ဦးအဟောင်းတွေမိန်းကလေးကရှင်ကြောင့်ခေါ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံမှသာအကြားအရင်းနှီးဆုံးမိတ်ဆွေများ။ သင်ကကောင်လေးဆိုရင်၊သင်အနီးကပ်ကိုးရီးယားမိတ်ဆွေနှင့်၎င်း၏့အသက်ငယ်မိန်းကလေးတစ်ဦးထက်သင်၊သူမဖြစ်နိုင်နောက်ဆုံးတွင်စတင်သင်ဖုန်းဆက်ဖို့သ”ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့”။ အားလုံးတို့တွင်ဤခေါင်းစဉ်၊”ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့”အဖြစ်ဖြစ်ကောင်းအများဆုံး အရေး၏ဤအဖြစ်တစ်ခါတစ်ရံအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်အချို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဓိပ္ပါယ်အဖြစ်ကိုကောင်းစွာ။ ပင်ဒါကြောင့်၊”ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့”အဖြစ်အများအားဖြင့်ဆိုလိုတယ်အစ်ကို။။။။ ခေါင်းစဉ်”ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့”အဖြစ်အသုံးပြုသည်၊အများအားဖြင့်အခါမိန်းကလေးလိုအသံမှချစ်စရာသို့သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ်အသုံးပြုကြပါတယ်။ ဒီအကြောင့်ကိုရီးယားယောက်ျားတွေချစ်ချစ်စရာမိန်းကလေးငယ်များအကြောင်းဆောင်ရွက်ကဲ့သို့အနည်းငယ်သာအစ်မတွေ၊နှင့်ဖြစ်ကောင်းသူတို့လိုချင်တဲ့ဤရွေ့ကားမိန်းကလေးများကဒီချိုမြိန်၊အချိုအမျိုးအစားဖြစ်ဖို့သူတို့ရဲ့ရည်းစား။ ၎င်း့ဒီအတွက်ကြောင့်အချို့ယားမိန်းကလေးများခေါ်ပိတ်အဟောင်းတွေကလူ”ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့”။ ဒီအစဉ်အမြဲညာဘက်အတွက်မည်သည့်အခြေအနေ၊တောင်မရှိဘဲအဖို့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအဖြစ်ရှုချိုမိန်းကလေးနဲ့သူတို့လိုချင်တဲ့အဓိပ္ပါယ်ကိုသဘောပေါက်ရန်သင်၏ပြန်လည်မှညီအစ်ကိုတစ်ဦးနှင့်တူၽြန္ုပ္ဒေါင် ၊အကျော်ကြားဆုံး ရီးယားမှာ၊သူတို့အခေါ်”ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့”အဖြစ်အများအပြားဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးများရှိပါတယ်ယားကောင်လေးကြကုန်အံ့မယ်လို့သူငယ်အစ်ကိုသူ့ကိုခေါ်အားဖြင့်လူတစ်ဦးအတွက်နာမကြောင့်၊သူတို့ကျင့်ကိုကျင့်လျှင်၊ဒါကြောင့်အရွယ်နဲ့တူပုံရ၏စိန်ခေါ်မှုအဟောင်းတွေအစ်ဏာ။ လျှင်အသက်အရွယ်ကွာဟချက်သည်အသေးစား၊အငယ်ကောင်လေးခေါ် အဟောင်းတွေကောင်လေး လျှင်မူကားအသက်အရွယ်ကွာဟချက်ကြီးမားသည်၊သူသည်အသုံးပြုသင့်ပါတယ် (ပါဝင်တဲ့အတွက်လေးစားမှုအတွက်ကိုရီးယားဘာသာစကား၊။ အီး။ နေရောင်ခဲ့သည်ကိုဆိုလိုသည်ဆရာ၊ဒါပေမယ့်ကျောင်းသားတစ်ဦးအစဉ်အမြဲခေါ်လာတဲ့ဆရာ လး)။ အညီတောင်းဆိုသူမ၏အစ်မလိုပဲဇောင်းတူလူငယ်တစ်ဦးအစ်ခၚသူမနုန်စားမည်။ တစ်မိန်းကလေးလည်းခေါ်အခြားမိန်းကလေးတစ်ဦးအကြောင်းအတီဆက်စပ်သော်လည်းအလွန်နီးကပ်ဇောင်းအဖြစ်ကိုကောင်းစွာ။ ဤသည်အဟောင်းတွေလူခေါ်ရန်မိမိတို့အငယ်မောင်နှမ။ သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်ထက်အသက်ကြီး၊သင်တီပင်ရှိသည်တစ်ခုပေးခေါင်းစဉ်များ၊သင်အသုံးပြု၎င်းတို့၏အမည်တစ်ချိန်ကသင်သေချာနေကြောင်းသူတို့ထက်အသက်ငယ်။ ဒါပေမယ့်သင်ကလည်းသူတို့ကိုခေါ်ဘူးခဲ့သည်၊ဒါပေမယ့်တီအသံအဖြစ်သဘာဝ၊မဟုတ်လျှင်သင်မိတ်ဆက်ဖို့သူတို့ကိုတစ်ယောက်အဖြစ်ဤသူကားငါ၏အကျင့်ခဲ့သည်။ ဤအကြောင်းကိုအားလုံးဘယ်လိုသုံးစွဲဖို့အဆိုပါရှုပ်ထွေးတဲ့ခေါင်းစဉ်အတွက်အသုံးပြုတဲ့ယားယဉ်ကျေးမှုကြောင့်အယူအဆများ၏အဆင့်ဆင့်အကြားလူတွေအပေါ်အခြေခံပြီးအသက်အရွယ်။ သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်အစဉ်အမြဲရောထွေးပတ်သက်သောသူတို့ကိုခေါ်ခြင်းငှါ၊ပဲတီအသုံးပြုသော်လည်း။ သူတို့ကိုခေါ်အားဖြင့် င်းတို့၏အမည်။ စိတ်ဝင်စားစရာ။ ၎င်း၏့အဖြစ်ရှုပ်ထွေးအဖြစ်ဗီယက်နမ်-ဟက်တာ။ ကျွန်တော်တို့မှာများစွာသောခေါင်းစဉ်များကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့တစ်စုံတစ်ယောက်။
© 2020 ဗီဒီယိုက ချက်တင် ကိုရီးယား